RSS Channel Showcase 5925326
RSS Channel Showcase 2721859
RSS Channel Showcase 6257815
RSS Channel Showcase 5741625
(showing articles 221 to 240 of 1811)
05/23/13--06:06: _" တပ်မတော် ဘာလဲ….ဘယ...
05/23/13--06:09: _" တပ်မတော် ဘာလဲ …ဘယ...
05/23/13--06:12: _" တပ်မတော်…..ဘာလဲ…....
05/23/13--06:15: _" တပ်မတော် ဘယ်လဲ….....
05/23/13--06:20: _မြန်မာသည် အာရှဧ။် ထ...
05/23/13--07:07: _ကျွန်မမှာ ချစ်သူဝို...
05/23/13--21:51: _“လူထုအားကို အများကြ...
05/24/13--00:22: _" တပ်မတော်…..ဘာလဲ…....
05/24/13--01:17: _ရှင်သန်နေဆဲ အတွေးပံ...
05/24/13--04:57: _လူတွေပြောနေတဲ့ အမှ...
05/24/13--05:17: _ဝ ပြည်နယ် တောင်းဆို...
05/24/13--05:37: _စာရေးသူများ နှင့် စ...
05/24/13--20:17: _တန်ဖိုးတက်လာတဲ့ မြန...
05/24/13--20:48: _ဝါဒဖြန့် မှာလား၊စည်...
05/25/13--05:05: _အမျိုးသားရေးစိတ် ရိ...
05/25/13--05:26: _ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥ...
05/25/13--05:35: _ကျွန်တော် နှင် နိုင...
05/25/13--05:48: _" တပ်မတော် …..ဘာလဲ…...
05/23/13--06:06: " တပ်မတော် ဘာလဲ….ဘယ်လဲ ….( ၁ ) "
ကျွန်တော် အခုရေးတဲ့ ဆောင်းပါးဟာ…
အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ချီတက်တဲ့ လမ်းခရီးမှာ
တပ်မတော်ရဲ့ မူဝါဒလို့ အတိအကျ မဆိုနိူင်ပေမယ့်
အပြင် အရပ်သားတစ်ယောက် ထက်တော့
တပ်ရဲ့အနေအထားနဲ့ စဉ်းစားပုံကို
နီးစပ်အောင် ချဉ်းကပ်နိူင်မယ်လို့ယူဆပြီး ရေးမိတာဖြစ်ပါတယ်…..။
အပိုင်း သုံးလေးပိုင်း ခွဲရေးရမယ်ထင်ပြီး.....
ဖက်ဒရယ်စနစ်၊တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့.....
တပ်မတော်ရဲ့ ရပ်တည်မူ အနေအထားအထိ ...
စစ်သားဟောင်း လို့ စကားခံခဲ့ တဲ့ အတိုင်း …..
ဒါပေမယ့် စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူကြား ……
နားလည်မူ တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ
အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်မလားလို့ …
တပ်မတော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ….
အရပ်စကားနဲ့ နားလည်အောင်ပြောပြပါလို့ ….
ကျွန်တော့်ကို လာမေးရင်တော့ ….
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ဘယ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးကျင့်သုံး …..
တိုက်စရာရှိရင် သူပဲတိုက်ရမှာပဲလို့ စဉ်းစားပြီး
တပ်မတော်ရဲ့ရပ်တည်မှုကို မခြိမ်းခြောက်နိူင်အောင် ….
ဖြိုခွဲလို့ မရအောင် အင်အားတည်ဆောက်ထားရမယ်လို့ ….
ယူဆတဲ့ အတွေးအခေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပါ.....…။
လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက စခဲ့တဲ့ ….
ပြိုကွဲလုနည်းပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ အကြုံကို အခြေခံပြီး ….
ဒီအတွေးအခေါ် ပေါ်ထွက်လာတာလို့ ပြောရင်လဲ …..
တပ်မတော်ရဲ့ ရှိစုမဲ့စု တပ်ရင်း ၁၀ရင်းထဲက ….
တပ်ရင်းတစ်ချို့ ဟာ တောခိုသွားခဲ့ပါတယ်……
အတော်များများက တစ်ပြိုင်တည်း ပုန်ကန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်….
တပ်မတော်ဟာ အတော်အထိနာသွားခဲ့ပြီး ….
ရန်သူက ….မန်းလေးအပါအ၀င် မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးနီးပါးနဲ့….
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထိ ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်……
တပ်ရင်းတွေဟာ တပ်ရင်းလိုက်တောင်တိုက်ပွဲမ၀င်နိူင်တော့ပဲ ….
တပ်ခွဲ လိုက် မြန်မာပြည် အနှံ.အပြားပြန့် ကျဲ ခံစစ်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်......
မြန်မာပြည် အရှေ့ အနောက် တောင်မြောက်.....
အရူးမီးဝိုင်း အပြေးအလွှား ချီတက်တိုက်ခိုက်ရင်း.....
ကိုယ့်ထက် အင်အားငါးဆလောက်များတဲ့ ရန်သူကို ......
အသေခံ ကာကွယ်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ.......
သက်တမ်းနုနယ်လှသေးတဲ့ အမြဲတန်းတပ်မတော်တစ်ခုရဲ့ စိတ်ကို …...
အင်မတန် အနာတရ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်……။
အဲဒီနောက် ထပ်ပြီးခါးသီးစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတာကတော့ ….
ပြည်ပနိူင်ငံတွေရဲ့ အထောက်အပံ့ ရထားတဲ့……
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကာလရှည်စစ်ပွဲကြီးရယ်.....
နောက်ထပ်စစ်မျက်နှာ အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရတဲ့…
အဲဒါနဲ့ အတူ တစ်ပြိုင်တည်းပေါ်လာတဲ့…
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်က မူဂျာဟစ်လှုပ်ရှားမှုရယ်…ပါ …။
တပ်မတော်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရခါစတိုင်းပြည်မှာ ….
အရပ်ဆယ်မျက်နှာကို လှည့်ပတ်စစ်တိုက်နေရတဲ့ ဘ၀ကနေ ….
အစိုးရ အဖွဲ့ ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးဟာ…
တပ်မတော်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးနေတယ်ဆိုတာပါ…။
အစိုးရအဖွဲ့ ထဲက နိူင်ငံရေးသမားများရဲ့နိူင်ငံရေးကစားကွက်တွေဟာ ….
တပ်ထဲက စစ်သည်အတော်များများရဲ့ အသက်ကို ချွေပြစ်နိူင်တယ်ဆိုတာ…
၁၉၆၁ သြဂုတ် ၂၆ရက်နေ့ မှာ …..
ဦးနုက ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိူင်ငံတော် ဘာသာလို့ကြေငြာလိုက်ပြီး ….
တစ်လအတွင်း ဒီရေလိုတိုးလာတဲ့ …….
KIA သောင်းကျန်းသူ အရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီး ….
ဒါဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့…….
အမျိုးသားနိူင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်က ပါကို ပါရမယ်……
ဒါမှ ….နိူင်ငံရေးသမားတွေ မဲရဖို့ ……
တပ်ကိုထိုးကျွေးတဲ့ ကိစ္စမျိုးကို တားဆီးနိူင်မယ်ဆိုတဲ့ …..
အယူအဆ တစ်ခုကို ထွက်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်…….။
(အပိုင်း ၂ ကို မနက်ဖြန် ဆက်တင်ပါမယ်.....)
05/23/13--06:09: " တပ်မတော် ဘာလဲ …ဘယ်လဲ... - ၂ "
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့ မှာ …..
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်း ဟာ ….
တော်လှန်ရေးအစိုးရဟာ ….ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့ မှာ....
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ကိုဖွဲ့ စည်းခဲ့ ပြီး …....
ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ခုတ်မောင်းဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ တဲ့ အတွက် ….
တပ်မတော်ဟာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ ….
ဒီကာလမှာ…တပ်မတော်အနေနဲ့ အမြတ်ထွက်ခဲ့တာကတော့ …..
အရင်က နောက်ကျောဓါးနဲ့ ထောက်သလိုဖြစ်နေတဲ့ ….
နိူင်ငံရေးပါတီတွေက ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့…..
ပြူစောထီးတပ်တွေ စစ်ဝန်ထမ်းတပ်တွေ ပြည်ထောင်စုစစ်ရဲတပ်တွေ အားလုံးကို …..
တပ်မတော်တပ်ရင်းတွေ အဖြစ် အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်နိူင်တာပါပဲ……
ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုလဲ သိပ်တော့ နားမလည်လှပါဘူး…..
သူတို့ ဟာ တစ်နှစ်မှာ ရက်သုံးရာလောက် …..
ရှေ့ တန်းမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာပါ…..
သူတို့ သိတာက တစ်ခုပဲရှိပါတယ်……
စစ်သားမဖြစ်ဘူးတဲ့ သူတစ်ဦး ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိူင်တဲ့စိတ်ပါ……
အပြင်လူ နားလည်အောင် အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင်တော့…..
အမြောက်ဗုံးဆံတွေ တဂျိမ်းဂျိမ်း ပစ်နေတဲ့ကြားထဲ ….
ဒဏ်ရာနဲ့ လဲနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပြန်တက်ဆွဲတာဟာ ……
ဒီစိတ်က မောင်းနှင်ပေးတဲ့ ခွန်အား တစ်ခုပေါ့…..…။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ပဲ့ကိုင်သူတွေပြောင်းပြောင်း ……
တပ်မတော် အနေနဲ့ ဆက်ရင်ဆိုင်ရတာကတော့ ……
မဆုံးနိူင်တဲ့ တိုက်ပွဲခရီးကြမ်း အထပ်ထပ်ပါပဲ…..
အရေအတွက် လေးငါးဆယ်နီးပါးရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ 
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်….
သူ့ ဖက် ကိုယ့်ဖက် အပြန်အလှန် အပြစ်ဖို့ …
ဒုံရင်းဒုံရင်း ကျောပိုးအိတ်လွယ်ပြီး …..
အမြဲတန်းပဲ သေနတ်ပဲ ပြန်ကိုင်ရနေကြမို့ …….
တပ်မတော်ရဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေဟာ…
ဘယ်သူ့ ကိုမှ သိပ်မယုံကြည်လှတော့ပါဘူး…..။
အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ရတာ မဟုတ်ပဲ …….
သူ့ သူငယ်ချင်းကို ….
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပြောပြော …..
" သူတို့ အင်အားရှိမှ သူတို့ အသက်ရှင်မယ် " ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာကို ……
၁၉၆၂ တော်လှန်ရေးအစိုးရရဲ့ အဖွဲ့ ဝင်အများစုဟာ…
တပ်မတော်သားတွေ ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ….
သူတို့ လက်ထက်မှာ …..
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမူ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးကို ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်
ငြိမ်းချမ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ အဆင်မပြေတဲ့ နောက်….
တပ်မတော်ဟာ ၁၉၆၄ ဒီဇင်ဘာမှာ …..
ကေအိုင်အေကို စတင်ပြီး ထိုးစစ်တွေဆင်နွဲပါတော့တယ်….
၁၉၆၆အရောက်မှာ ကေအိုင်အေဟာ …..
နယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ ရတဲ့ အဆင့်ထိဖြစ်လာခဲ့ ပြီး……..
၁၉၈၇ မေလမှာ တော့ ……
ကေအိုင်အေရဲ့ ဗဟိုဌာနချုပ် ပါဂျိုနားဖော့စခန်းကြီးနဲ့ ……
ဂျာပူ ၊နမ့်ဆန်ယန်၊ကဇူး စခန်းတွေကို ……
ဒါပေမယ့် ….သူတို့ ကို မဆုံးနိူင်တဲ့ နောက်ထပ်တာဝန်ကြီးတစ်ခုက …
ထောင့်တစ်ညပုံပြင် ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို …..
လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်ကနေ…… ၁၉၈၉ ထိ .....
သူတို့ ရဲ့ မဟာရန်သူတော်ကြီး ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပါပဲ……။
ဗကပ ကိုအမြစ်ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့တပ်မတော်ဟာ….
၁၉၆၆ နှစ်ဦးပိုင်း မှာ ….
လက်ရှိတပ်မတော်ရဲ့အဓိက တိုက်ခိုက်ရေး အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့
ခြေမြန်တိုက်ခိုက်ရေး တပ်မတွေကို စတင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ပါတယ်…..…..။
၁၉၆၈ စက်တင်ဘာ မှာ ……
တပ်မ ၇၇ ဟာ ဗကပ ဗဟိုဌာနချုပ်ကို သိမ်းပိုက်နိူင်ခဲ့ပြီး ……
သခင်သန်းထွန်းကိုပါ အသေဖမ်းဆီး ရမိခဲ့တဲ့အတွက် …..
တပ်မတော်က အသာစီးရလာတယ် ဆိုနိူင်ပေမယ့် ….
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မကြာခဏ အထိနာခဲ့ရတဲ့ ....
၁၉၇၀ ၊ ၇၁ တစ်ဝိုက်မှာ စဖြစ်ခဲ့ တဲ့….
ဗကပ အရှေ့ မြောက် စစ်ဒေသရဲ့ နာမည်ကျော် ကြူကုတ်ပန်ဆိုင်း တိုက်ပွဲ ….
ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀ တိုက်ပွဲ တွေအပြီး …..
၁၉၇၅ ပဲခူးရိုးမ တိုက်ပွဲစဉ်တွေမှာ …….
သခင်ဇင် ၊ သခင်ချစ် ကျဆုံးပြီး ဗကပ ဗဟို ပြိုလဲသွားတဲ့ အတွက်
အထိနာသွားတဲ့ ဗကပဟာ …….
၁၉၇၇ မှာ ခြူးရွှေပန်ကောက် တိုက်ပွဲ …..
၁၉၇၈ မှာ နောင်လိုင် ပါဖန် တိုက်ပွဲ နဲ့……
၁၉၈၆ မှာ စီစီ ၀န်တာပန် တိုက်ပွဲကို ဆက် ဆင်နွဲခဲ့ပါတယ်….
တပ်မတော်က ဗကပ ခြေကုပ်စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ …
ကြူကုတ် ပန်ဆိုင်း ၊ကွန်ဟိုင်း၊နောင်မ၊မာန်ဟီးရိုး စခန်းတွေကိုပါ …..
ဆက်တိုက် သိမ်းပြစ်ခဲ့ လို့……
ဗကပဟာ အကြီးအကျယ် အထိနာသွားခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ….
တပ်မတော်ဘက်က အကျအဆုံးလဲ နည်းလှတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး …..။
အထူးသဖြင့် ……အရှေ့ မြောက်ဒေသ တိုက်ပွဲတွေမှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရန်သူဟာ …..
ပြောက်ကျားစစ် ၊ တောတွင်းတိုက်ပွဲ စတာတွေ မဟုတ်တော့ပဲ ……
နိူင်ငံနှစ်ခုက စစ်တပ်တွေ တိုက်ကျသလို ……
သမားရိုးကျ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နည်းတွေနဲ့ တိုက်လာပြီး ……
ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းသူအဆင့်ကို ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် ……
တပ်မတော်ဘက်ကလဲ အတော်အကျအဆုံးများခဲ့ ရပါတယ်…။
ရှိစုမဲ့စု တပ်မ ၇၇ ၊ ၈၈ ၊ ၉၉ သုံးခုထဲက ….
နှစ်ခုကို အရှေ့ မြောက်ဒေသမှာ အမြဲလိုလို တပ်စွဲထားခဲ့ရပြီး
သူတို့ ရဲ့ ရန်သူတော်ကြီးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရပါတယ်….
ဒါဟာ …အနာဂတ်မှာ …..
ပြည်ပအထောက်အပံ့ရတဲ့ ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ဖို့ ….
ဒါမှမဟုတ်လဲ…အိမ်နီးချင်း နိူင်ငံတွေ ရဲ့ တပ်မတော်တွေနဲ့ 
တပ်မတော်ရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံကို တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ လိုလာမယ်ဆိုတာကို ….
တပ်မတော်ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကို……
( အပိုင်း ၃ နောက်ရက်ဆက်တင်ပါမည်…)
05/23/13--06:12: " တပ်မတော်…..ဘာလဲ….ဘယ်လဲ …. - ၃ "
ပြည်တွင်းစစ် အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့ ….
တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ နေရာမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး …
လုံခြုံရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီတွေကို ……
ဗဟို ၊တိုင်း၊ခရိုင်နဲ့ မြို့ နယ် အထိ အဆင့်လိုက် စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ပါတယ်…..
ကော်မတီ အဖွဲ့ ဝင်တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတွေမှာ …
လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေ ဖြစ်ပြီး ….
ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နဲ့ပါတီကို ….
တပ်မတော် အနေနဲ့ မြို့ ပြအုပ်ချုပ်ရေး ဘက်မှာ …..
တရားဝင် စပြီး ပါဝင်လာတယ်လို့ ပြောရင်လဲ မမှားပါဘူး…..။
ဒီနေ့ ခေတ် အခြေအနေနဲ့ စဉ်းစားရင် …….
ဒါဟာ အင်မတန်နားလည်ရခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပေမယ့်လို့ ….
အဲဒီခေတ် အနေအထားကတော့ ……
ကျေးလက်ဒေသတွေ အတော်များများမှာ …..
သောင်းကျန်းသူ အမာခံတွေ စိမ့်ဝင်ချုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကာလမို့ …..
အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ကို အမှန်တကယ်ပဲ အထောက်အကူပြုနိူင်ခဲ့ ပါတယ်……
တစ်ခါ ….၁၉၄၈ ကနေ ၆၂ ခုနှစ် အတွင်း ……
သူရင်ဆိုင်ခဲ့ ရတဲ့ ခရီးကြမ်းအတွေ့ အကြုံ တွေအရ …….
မယုံကြည်ရဘူးလို့ ပဲ ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီး …..
အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ ….
ပါတီရဲ့ အမာခံကေဒါတွေ အနေနဲ့…..
မြို့ ပြအုပ်ချုပ်ရေးမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပြီး
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် အတော်များများဟာလဲ ….
တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်….
ဘေးပယောဂ ပါ မပါ ……..
ဒီနေ့ ထိ အငြင်းပွားနေရတဲ့လူထုအရေးအခင်းတွေမှာ …….
လူထုနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မူတွေကိုလဲ ရှောင်လွဲလို့ မရနိူင်ခဲ့ပါဘူး…..။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ရေခံမြေခံ နဲ့ အင်မတန် ကြီးထွားလွယ်တဲ့…….
တပ်မတော်ရဲ့ အင်အား သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကို
တောခိုသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိူင်ခဲ့တဲ့ ………..
တိုက်ရည်ခိုက်ရည် အကောင်းဆုံး တပ်မတော်တစ်ခုတောင်
အနှစ်လေးဆယ်လောက် တိုက်ခဲ့ ရတဲ့……....
ဗကပ အန္တာရယ် ကို
တပ်မတော်ဟာ အင်မတန်ပဲ စိုးရိမ်စိတ် ကြီးခဲ့ ပါတယ်…....
လူထု အရေးအခင်းအတော်များများကိုလဲ …....
ပြီးခဲ့ တဲ့ဆယ့်လေး ငါးနှစ် အတွေ့ အကြုံတွေအရ …..
ဗကပ ယူဂျီတွေရဲ့ လှုံ့ ဆော်မှု အဖြစ်ပဲ ရူမြင်ခဲ့ ပါတယ်…….
ဒီ စိုးရိမ်စိတ် ဟာ ……
ဒီကနေ့ စတုတ္ထ မျိုးဆက် တပ်မတော် အရာရှိတွေအထိ ……
ကူးစက်ခဲ့ တယ်ဆိုရင်လဲ မမှားဘူးလို့ ဆိုနိူင်ပါတယ်………။
တော်လှန်ရေး အစိုးရဟာ ….
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းခဲ့ ပေမယ့် …..
ဦးနု၊ဦးဘဆွေ၊ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ၀ိဒူရ သခင်ချစ်မောင် …စတဲ့ …….
နိူင်ငံရေးသမားကြီး ၃၃ဦးကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ……
၃၃ဦး ကော်မရှင်ဖွဲ့ ကာ ……
တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ ဆွေးနွေးပေမယ့် ……
အချင်းချင်းသာ အငြင်းပွားပြီး အဖြေမထွက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်….
ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး
ကျန်ပါတီများကိုပါ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ သော်လည်း …......
မအောင်မြင်တဲ့ ဖြစ်ရပ် တွေကြောင့် …..
၁၉၆၄ မတ် ၂၈ မှာ တစ်ပါတီ စနစ်နဲ့ သွားဖို့ ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ ပါတယ်……။
မဆလ ပါတီ လုပ်ဆောင်ခဲ့ တဲ့ …..
အမှားတွေ အများကြီးရှိခဲ့ တဲ့ အထဲက….
လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းဆည်းခဲ့ ခြင်း ……
တာဝန်ကျေ စပါးရောင်းချရခြင်းနဲ့ ……..
ငွေစက္ကူ တရားမ၀င်ကြေငြာခြင်း တို့ ဟာ ……
လူထုကို တိုက်ရိုက် အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်လို့…..
အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရကို မကျေနပ်ချက်များလာတဲ့ပြည်သူဟာ……
အစိုးရအပေါ် အယုံအကြည်လျော့နည်းလာပြီး ……
တပ်မတော်အပေါ်လဲ မကျေမနပ်ဖြစ်စ ပြုလာခဲ့ ပါတယ်……။
တပ်မတော်အနေနဲ့ ကတော့ …..
၁၉၆၂ နှောင်းပိုင်း မြို့ ပြ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ…..
တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း နဲ့ ….
ဦးစီးအရာရှိ တစ်ချို့ သာပါဝင်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး
တပ်မတော်ရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နူန်းကတော့ ……
မြန်မာပြည် အနှံ့ အပြားက တောနက်တွေထဲမှာ …
မရပ်မနား တိုက်ပွဲဝင်နေရတာ ဖြစ်ပေမယ့် ….
မြေပေါ် မြေအောက် နိူင်ငံရေးပါတီတွေ ရှုပ်ပွ နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာ….
၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာရယူခဲ့ တာကို မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ် ……
ဒီကနေ့ ထိ တပ်မတော် တစ်ခုလုံးက ရူမြင်ခဲ့ ပါတယ်…….။
အဆိုးဝါးဆုံးကာလတွေကို ကျော်လွန်ခဲ့ တာ ……
ဒေသ အသီးသီးမှာ ငြိမ်းချမ်းစပြုလာတဲ့ အချိန်မှာ….
တစ်စတစ်စ များပြားလာတဲ့ပြည်သူလူထုဟာ…..
ဗကပ တို့ ရဲ့ လူထုတိုက်ပွဲနည်းအတွက် ……
၁၉၇၆၊ ၇၈၊ ၇၉၊ဂ၂ ၊ ၈၇ ခုနှစ်တွေမှာ….
အင်းဒေသ စစ်ဆင်ရေး ၊ ၀ရဇိန် ၊ စွန်ရဲ စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ …….
ဗကပ မြေအောက် ဆဲလ် ၄၀၀ကျော်ကို ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးနိူင်ခဲ့ ပေမယ့် …
၁၉၈၆ ခုနှစ်တည်းက …….
မြေပေါ်လှုပ်ရှားမှု အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့…….
ဗကပ ယူဂျီ ၄၈၂၈ ဒေသပါတီ ကော်မတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို …….
ဒီတစ်ခါတော့ ကြိုတင်မထိန်းချုပ်နိူင်တော့ပါဘူး ……
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု ပေါင်းစုံကို တလကြမ်း နှိမ်နင်းရင်း…..
နယ်စပ်ထိရောက်အောင် တိုက်ထုတ်နိူင်လိုက်တဲ့ အတွက်
အသက်ရူချောင်စ ဖြစ်လာတဲ့ တပ်မတော်ဟာ…
အနားယူဖို့ စဉ်းစားလို့ ရအုန်းမယ် မဟုတ်ပါဘူး…..
စစ်ရေးမှာ ဆက်တိုက်အထိနာခဲ့တဲ့….
သူတို့ရန်သူတော်ကြီးက .....
နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့ လွယ် တိုက်ပွဲကြီးကို ဆင်နွှဲဖို့ ......
( အပိုင်း ၄ နောက်ရက်ဆက်တင်ပါမည် )
05/23/13--06:15: " တပ်မတော် ဘယ်လဲ…..ဘာလဲ … - ၄ "
၁၉၈၈ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ညမှာ ……
အင်းစိန် ကြို့ ကုန်းဘူတာအနီး ....
အာအိုင်တီကျောင်းသားအချို့ နဲ့ အရပ်သားလူငယ်အချို့ …..
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ညတွင်းချင်း ကြီးကျယ်သွားခဲ့ ပြီး ……
ရပ်ကွက်သမဆိုင်ကို မီးတင်ရှို့ ခဲ့ ရာက ……
ရပ်ကွက်ကိုပါ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းလာတဲ့ အတွက် …..
ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပစ်ခတ်လူစုခွဲရာမှာ …..
ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော် သေဆုံးခဲ့ ပြီး ……
ဆူပူမှုတွေ အစပျိုးလာလို့ …….
ကျောင်းများကို ဇွန်လထိ ခဏပိတ်ခဲ့ ရပါတယ်……
ဒါဟာ ဗကပ ယူဂျီ ဆဲလ် များအတွက်တော့ …..
အကောင်းဆုံး စနစ်တံတစ်ချောင်းကို ရလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်…..။
ဇွန်လ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာတော့…….
တစ်နိူင်ငံ လုံးကို ကူးစက်ဖို့ တာစူနေပါပြီ…….
တစ်နိူင်ငံလုံးအနှံ့ ကူးစက်ပြန့် ပွားသွားတဲ့အရေးအခင်းကြီးဟာ …..
ထိန်းချုပ်လို့မရနိူင်တော့ပဲ …..
မဆလ ပါတီကို ဖျက်သိမ်းစေခဲ့ ရပြီး …….
ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ .....
သမတ သုံးယောက်တိတိ …..
အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ်……..။
ရှစ်လပိုင်း အရောက်မှာတော့ ……
အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ဟာ ……
တော်လှန်ရေး သမားတွေရဲ့လက်ထဲကျရောက်သွားခဲ့ ပါပြီ…..
ထိန်းချုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အခြေအနေကို .....
၆.၉.၈၈ ရက်နေ့ မှာ …..
ဗကပ ယူဂျီ များဟာ ရန်ကုန်မြို့ မှာ…..
အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီ (GSC) ကို ဖွဲ့ စည်းနိူင်ခဲ့ ပြီး……
GSC အတွင်းမှာ ....
သပိတ်အဖွဲ့ ပေါင်း ၅၀ ကျော် ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်……
ဗကပ ဆဲလ်များဟာ GSC အတွင်း …..
အရေးပါတဲ့ နေရာ ၁၃ နေရာထိ …..
စိမ့်ဝင်ထားနိူင်ခဲ့ တဲ့ အတွက် …..
တစ်နိူင်ငံလုံးက သပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ….
လူထုတိုက်ပွဲကြီးကို အရှိန်မြှင့် ဆွဲတင်ရင်း …..
လိုသလို ထိန်းကျောင်း လာနိူင်ခဲ့ ပါတယ်…..။
တစ်လအတွင်း အကြမ်းဖက်စီးနင်းခံရတဲ့ …..
ကောင်စီနဲ့ ပါတီယူနစ် ရုံးပေါင်း ၇၃ ရုံး ရှိခဲ့ ပြီး ….
ပြည်နယ် ရဲမှူးကြီး တစ်ဦးအပါအ၀င် ….
ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင် ၃၇ ဦး သေဆုံးကာ …..
၈၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ပါတယ်……
ရန်ကုန်တိုင်း တစ်ခုတည်းမှာတင် ……
စက်ရုံ အလုပ်ရုံ ၄၅ ခု ၊ ဂိုဒေါင် ၆၁ခု ၊ အစိုးရ အဆောက်အအုံ ၇၅ခု ၊
ယာဉ် ၃၇ စီး …မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ ရပါတယ်…….
တစ်နိူင်ငံလုံးက ထောင်တွေမှာ ……
အုပ်စုလိုက် ထောင်ဖောက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အတွက် …..
ထောင်တာဝန်ကျများမှ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ ရာမှာ …..
အကျဉ်းသား ၈၄ ယောက်သေဆုံးပြီး ၂၀၁ ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်……။
သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ……
အစိုးရ အဖွဲ့ က စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေငြာခဲ့ လို့……
လမ်းတွေပေါ်ကို လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ …..
သမတ အသစ် ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့ 
သြဂုတ် ၂၄ ရက်နေ့ မှာ …….
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အမိန့် ကြောင့် …..
လမ်းတွေပေါ်က ပြန်ထွက်ခွာ သွားရပါတော့တယ်……..
ဒါပေမယ့် အခြေအနေဟာ ...
စစ်ကားတန်းကြီးတွေ ပြန်ထွက်သွားပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ……
တစ်ရက်တည်း ယောက်ကျားမိန်းမ ၂၃ ယောက် တိတိ ကို …..
ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲပြီး …..
ခေါင်းဖြတ် မီးရှို့ သတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်……..။
သြဂုတ်လ အကုန်ပိုင်း မှာ …..
မြို့ တစ်မြို့ နဲ့ တစ်မြို့ ကြား လမ်းတွေဟာ …..
ဒေသလိုက် သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မပါရင် …….
ဖြတ်သန်းလို့ မရတော့တဲ့ ကင်းစခန်းတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ် …….
အစိုးရဌာနအားလုံး သပိတ်ထဲပါဝင်နေပြီဖြစ်လို့ …….
အုပ်ချုပ်ရေးဟာ လုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားပြီး ……
အရပ်သား ၀န်ထမ်းတွေလစာမရတာလဲ …….
ရေဒီယို ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ သတင်းစာ အားလုံးဟာလဲ ……
သပိတ်မှောက်သမားများရဲ့ လက်ကိုကျရောက်သွားခဲ့ ပြီး ……
တော်လှန်ရေး သတင်းတွေကိုပဲ ......
တပ်မတော် အနေနဲ့စိတ်အပူပန်ဆုံး ကိစ္စ ဟာလဲ …..
အရိပ်အယောင်တော့ စနေပါပြီ ….
သပိတ် စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ ရှေ့ မှာ ……
တပ်မတော် ယူနီဖောင်း ၀တ်ဆင်ထားသူအချို့ ကို…….
စပြီး တွေ့ မြင်နေ ရပြီဖြစ်ပါတယ်..….။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလရဲ့နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ……
မြန်မာ့ ကြယ်ငါးပွင့် ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် " အင်းဝ " သင်္ဘော ဟာ……
ရန်ကုန်ကို ဦးတည်ခုတ်မောင်းရင်း ….
အရေးကြီး ကြေးနန်းတစ်စောင်ကို ……
ရန်ကုန်မြစ်ဝ ကရေမိုင် ၁၉၀ အကွာ ……
လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘော အုပ်စုကြီးတစ်ခုကို တွေ့ ရတဲ့ အကြောင်းပါ……။
အဲဒီထဲက သင်္ဘောအမှတ် ၄၃ ဟာ …..
ကမ်းတက်ရေယာဉ်တွေနဲ့ လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း နဲ့ …….
တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ ကတင်ပြလာတဲ့……
တရုတ်နယ်စပ်မှာ ရောက်လာတဲ့ သံချပ်ကာတပ်မကြီး ရဲ့ သတင်းဟာ….
တပ်မတော်ကို တစ်ကယ်ပဲ …..
မျက်စိမျက်နှာ ပျက်အောင် ခြိမ်းခြောက်နိူင်စွမ်း ရှိခဲ့ ပါတယ်…….။
တစ်ဆက်တည်း တက်လာတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့….
ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ 
ဗိုလ်ကြီး ခင်မောင်ချို ဦးစီး တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ခွဲ တစ်ခွဲကို
လူအုပ်ကြီးက ၀ိုင်းဝန်း ပိတ်ဆို့ ပြီး …..
နာရီအတော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေပြီး ……
ပစ်မိန့် မရခဲ့တဲ့ တပ်ခွဲမှူးဟာ…..
နောက်ဆုံးမှာတော့ လူအုပ်ကြီး လက်ကို …
ဗကပ နဲ့အနှစ်လေးဆယ်ကျော် တိုက်လာတဲ့ …..
တပ်မတော် တစ်ခု အနေနဲ့ တော့….
ဗကပရဲ့လူထုတိုက်ပွဲ စစ်နည်းဗျုဟာတွေကို …..
အတော်များများ ခန့် မှန်းလို့ ရနေပါပြီ……..။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ဟာ….
နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေ အားလုံးကို သုံးသပ်ပြီး
ထိပ်တန်းလျို့ ဝှက် အဆင့်ရှိတဲ့…….
တပ်လှဲလှယ်ရွေ့ ပြောင်းမှု အစီအစဉ် တစ်ခုကို …….
အဲဒီ အစီအစဉ်အရ ………
ဒေါနတောင်တန်းရဲ့ တောင်ဘက်နဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာ ……
ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရာယူထားတဲ့ 
ခြေမြန် တိုက်ခိုက်ရေး တပ်မ နှစ်ခုထဲကနေ …..
တစ်ခုကို ပြန်ရုပ်သိမ်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်….
ရှေ့ တန်းမှာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ……
အဲဒီ တပ်မက စစ်သည်တွေဟာ ……
ဒါပေမယ့် သူတို့ မသိတာက ……
သူတို့ ဟာ အိမ်ပြန်ကြရမယ် မဟုတ်ပါဘူး …..
ဘယ်သူမှ မထိန်းသိန်းနိူင်တော့တဲ့……
မြို့ လယ်ခေါင်တွေက အိပ်မက်ဆိုးကြီးကို …..
အိပ်မက်ဆိုးကြီး အပြီးမှာ …….
တစ်နိူင်ငံလုံး သေဆုံးသူ ၆၉၁ ယောက်…….
ဒဏ်ရာ ရသူ ၆၄၃ ယောက် ရှိကြောင်း …..
အကြိမ်ကြိမ် ရှင်းပြခဲ့ ပေမယ့် …..
နောက်ထပ် ၂၂ နှစ်တိတိ တပ်မတော်အပေါ်…..
ဆက်လက်ကူးစက်ခံရတော့မှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်….
တပ် တွေ အရွေ့ အပြောင်း လုပ်နေတဲ့ ကာလ မှာ….
ကေအန်ယူ အဖွဲ့ က ……
စစ်ရေးအရ တိုက်ကွက် ဖော်ထုတ်ခဲ့ တဲ့အတွက်…
သမိုင်းဝင် မဲသဝေါ ဒေသ တိုက်ပွဲကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ရပါတယ်….
တကယ်တော့….အဲဒီတပ်ရွေ့ ပြောင်းမှုဟာ ……
တပ်မတော် အတွက်တော့ မိအေး နှစ်ခါနာ ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ ……
သမိုင်းဝင် တပ် ရွေ့ ပြောင်းမှု ပါ ပဲ……။
( အပိုင်း ၅ နောက်ရက်ဆက်တင်ပါမည် )
— with ရုပ် ဆိုး and 72 others.
34Like· · Share
05/23/13--06:20: မြန်မာသည် အာရှဧ။် ထွက်ရပ်လမ်း
by Thanda Win (Notes) on Wednesday, November 28, 2012 at 9:42pm
( ၂၁.၃.၁၂ နေ့မှာ Stratfor ---- Global Affairs မှာ ဖော်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးရှင် Robert Kaplan ရဲ့ အာဘော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ၊ သွားရည်ကျတတ်ရင် လက်ကိုင်ပုဝါလေး ဆောင်ပြီးဖတ်နော်။ )
မြန်မာနိုင်ငံဧ။်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ပွင့်လင်းလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု၊ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ပုံမှန်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများသည် အာရှဒေသဧ။် ပထ၀ီနိုင်ငံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြောင်းလဲလာစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
မြန်မာသည် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ တို့ဧ။် လွှမ်းမိုးမှုဆုံချက်ဖြစ်သော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ တည်ရှိသည်။ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ကြေးနီ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ကျွန်းသစ်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ် တို့ ပေါများကြွယ်ဝသည့်အပြင် ယူရေနီယံသတ္တုလည်းရှိသည်။
အင်ဒို-ပစိဖိတ် ဒေသဧ။် လက်ဆောင်မွန်ဖြစ်သော မြန်မာသည် အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပိတ်လှောင်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုကာလတလျှောက်လုံး တရုတ်တို့သည် မြန်မာတို့ဧ။် သဘာဝသယံဇာတများကို တဖြည်းဖြည်းထုတ်ယူလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဲ့သို့ပင် ဒေသတခုလုံးကို ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အချက်အချာကျသည်။ မြန်မာတို့သာ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်သွယ်လာလျှင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအားလုံး အဖက်ဖက်တွင် ပွင့်ထွက်သွားမည်။
တရုတ်ပြည်မှ မွန်ဂိုလူမျိုးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၃ ရာစုတွင်ကျုးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်တို့အကြားတွင် သဘာဝ ပထ၀ီအနေအထားအရလည်းကောင်း၊ လူသားတို့ တည်ဆောက်ထားသော ဂရိတ်ဝေါကဲ့သို့လည်းကောင်း အတားအဆီးများ လုံးဝမရှိပဲ ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း တလျှောက် ဆက်စပ်လျှက်ရှိကြသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် သမိုင်းတလျှောက် မြန်မာသည် အိန္ဒိယစီးပွားရေး အသိုက်အ၀န်းဧ။် ကျက်စားရာဒေသလည်း ဖြစ်သောကြောင့် ဗြိတိသျှတို့သည် အိန္ဒိယနှင့်အတူ မြန်မာကိုပါ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ မြန်မာသည် တရုတ်ဧ။် သယံဇာတသိုက်ကြီးအဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန်နေမည့်အစား အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပါက စွမ်းအင်နှင့် သယံဇာတပေါများသော ဆုံချက် နိုင်ငံအဖြစ် မိမိကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်နိုင်မည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယနယ်စပ်၊ တရုတ် နှင့် အရှေ့တောင်အာရှတခုလုံး ကိုလည်း တစုတဝေးတည်း ပေါင်းစပ်စုစည်းပေးနိုင်မည်။
တရုတ်ဧ။် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ အတန်အသင့် လွတ်မြောက်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း တရုတ်သည် မြန်မာထံမှ မြောက်များလှစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ဆက်လက်ခံစားနိုင်ဦးမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ကူမင်းမြို့သည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသဧ။် စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်၍ မြန်မာ၊လာအို နှင့် ဗီယက်နမ်တို့ကို ဖြတ်သန်းလာသည့် ရေလမ်း ကုန်းလမ်းတို့သည် ကူမင်းသို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာအနောက်မြောက်ပိုင်း ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသရှိ ရမ်းဗြဲကျွန်းတွင် တရုတ်သည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ ထိုပိုက်လိုင်းများသည် အာဖရိက၊ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့တို့ကို သယ်ဆောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှ ဖြတ်သန်း၍ ကူမင်းသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တရုတ်သည် မလက်ကားရေလက်ကြားအပေါ် လက်ရှိပြည်ပရေနံတင်သွင်းမှုအတွက် မှီခိုမှုကင်းစေရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ တွင် ကူမင်း-ကျောက်ဖြူ အမြန်ရထားပြေးလမ်းကိုလည်း အပြီးတည်ဆောက်ကြလိမ့်မည်။
အိန္ဒိယသည်လည်း ရမ်းဗြဲကျွန်းမြောက်ပိုင်းရှိ စစ်တွေမြို့တွင် စွမ်းအင်ပိုက်လိုင်းကို တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ ထိုပိုက်လိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်လျက် သဘ၀ဓါတ်ငွေ့များကို အနောက်ဘင်္ဂလားဒေသရှိ အိန္ဒိယပြည်နယ်သို့သယ်ဆောင်မည်။ ထိုပိုက်လိုင်းသည် နှစ်ပိုင်းကွဲသွားပြီး တခုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမြောက်ပိုင်းသို့ ဦးတည်သည်။ စီးပွားရေးကုန်သွယ်မှုများသည်လည်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို ဖြတ်၍ အိန္ဒိယ၊ ချစ်တကောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့သို့ ရောက်ရှိမည်။ ထိုမြို့သုံးမြို့တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသကြီးဧ။် အစိတ်အပိုင်းကြီးအဖြစ် ပေါင်းစည်းသွားလိမ့်မည်။
ထင်ရှားသောအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းလာသည်နှင့်အမျှ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ချောင်ပိတ်မိနေသော ဟစ်ဟာတိုဒေသသည်လည်း ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်လာမည်။ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသသည် သွားလာရေးခက်ခဲမှုကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေပြီး လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများ ၁၂ ကြိမ်ခန့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တောတောင်များဖုံးလွှမ်းနေသော ထိုဒေသသည် အိန္ဒိယနှင့်အဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်နေသည်။ သီးသန့်ဆန်၍ မဖွံ့ဖြိုးသော ထိုဒေသဧ။် အနောက်ပိုင်းတွင် ဆင်းရဲတွင်းနက်လှသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် အရှေ့ပိုင်းတွင် မြန်မာတို့တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဧ။် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုများသည် ထိုဒေသနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ကို အကျိုးရှိစေနိုင်မည်။
အဆိုပါဒေသများတွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို လျော့ချနိုင်လျှင် ကာလက္ကတားနှင့် ဘင်္ဂလားအနောက်ပိုင်းတို့မှ ဒုက္ခသည်ပြသနာများကိုလည်း ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ထိုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို မခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင် အင်အားတောင့်တင်းလာစေနိုင်သည်။ အိန္ဒိယသည် ဆင်းရဲတွင်းနက်၍ ပြည်ပျက်လုနီးပါးဖြစ်နေသော ပါကစ္စတန်၊ နီပေါနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့နှင့် နယ်စပ်ခြင်းထိစပ်နေသဖြင့် ၎င်းဧ။် နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးအင်အားများကို အာရှနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့ ဖြန့်ကျက်နိုင်ခြင်းမရှိချေ။ ထို့ထက်ပို၍ ဆိုရလျှင်မြန်မာပြည် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာခြင်းသည် အိန္ဒိယကို အာရှဒေသတွင်းသို့ ပိုမိုနက်ရှိူင်းစွာ ပါဝင်ပတ်သက်စေနိုင်ပြီး တရုတ်နှင့် အင်အားချိန်ခွင်လျှာကို ညီမျှစေနိုင်သည်။
အနာဂတ်အလားအလာများ ကောင်းမွန်နေသော်လည်း ပစ္စုပ္ပန်မှာ သေချာရေရာခြင်းမရှိသေးချေ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲသည် ခရီးအစမှာပင်ရှိသေးလျက် လမ်းမှားသို့ရောက်နိုင်ချေလည်း များနေသေးသည်။ ယူဂိုဆလာဗီးယားနှင့် အီရတ်တို့ကဲသို့ပင် ဒေသကွဲများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကွဲများ များပြားနေခြင်းသည် အဓိကပြသနာဖြစ်သည်။
မြန်မာသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းတလျှောက် ရှင်ဘုရင်အုပ်စိုးသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုဒေသဧ။် တိုင်းရင်းသားများကို ဗမာဟုခေါ်၍ မြန်မာနိုင်ငံဧ။် မူလအမည် ဗမာနိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြည်နယ် ၇ ခုတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် နယ်စပ်ဒေသတလျှောက် နေထိုင်ကြသော လူနည်းစုများကို ထည့်တွက်သည့်တိုင်အောင် တနိုင်ငံလုံးလူဦးရေဧ။် သုံးပုံတပုံမှာ ဗမာမဟုတ်ပါ ။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းကို ၀န်းရံထားသော တောင်တန်းဒေသများတွင် ချင်း၊ကချင်၊ရှမ်း၊ ကရင်နှင့် ကရင်နီလူမျိုးများနေထိုင်၍ ၎င်းတို့ဧ။် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် ဗမာအုပ်ချုပ်သော စစ်တပ်နှင့် မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြသည်မှာ စစ်အေးကာလကတည်းကဖြစ်သည်။
ပိုမိုဆိုးရွားသည်မှာ တောင်တန်းဒေသ လူနည်းစုများသည် အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေကြသည်။ ဥပမာ - ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၀၊လားဟူ၊ပအို့၊ကယန်းနှင့် အခြားလူမျိုးစုများနေထိုင်ကြသည်။ သူတို့သည် သမိုင်းကြောင်းအရ တိဗက်၊တရုတ်၊အိန္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ထိုင်းနှင့် ကမ်ဘောဒီးယားတို့မှ ဆင်းသက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်းရှိ ချင်းလူမျိုးတို့သည် မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းရှိ ကရင်လူမျိုးတို့နှင့် တူညီခြင်းမရှိပေ။ ထို့အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သည်မှလွဲ၍ ရှမ်းလူမျိုးများဧ။် ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့သည် ဗမာတို့နှင့်မတူပြန်။ ဟိန္ဒူဘန်ဂေါယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးလျက် ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာသော ရခိုင်လူမျိုးများသည်လည်း မြန်မာပြည်မနှင့် အဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်နေကာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကတို့ရှိ သီးခြားလူနည်းစု များကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။
တနည်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့် အာဏာရရှိလာသော ဗမာလူမျိုးများသည် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် ညှိနှိုင်းစေ့စပ်ခြင်းမရှိပါက ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိချေ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မှာ ရာစုနှစ်ဝက်ရှိခဲ့ပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် စစ်တပ်အုပ်စိုးမှုမှ လွတ်ကင်းသော ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အနည်းငယ်သာရှိသည်။ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအား အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ရက်ရက်ရောရော အပ်နှင်းသော စနစ်တခုကို အခြေခံမှ စတင်ရမည်။တိုင်းရင်းသားများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူနိုင်ရန် မျှတခိုင်မာသော ဖယ်ဒရယ်မူကို ပြဌာန်းရန်လိုသည်။
မြန်မာတို့သည် ယခင်ကထက် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်ဆံနေသည်မှာ မှန်သည်။ သို့သော် ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက်ဖြစ်ခဲ့သော အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် ခိုင်မာသောအဖွဲ့အစည်းများ တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ချေ။ အချုပ်အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်သားအစိုးရ အုပ်စိုးနိုင်စေကာမူ တပ်မတော်သည် ထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပတ်သက်နေရဦးမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်တပ်ဧ။် သက်တမ်းရှည် အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်အရာရှိများကသာ စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သယံဇာတကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် သင့်တင့်သောလူဦးရေ ၄၈ သန်းရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံပါဝင်သော ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကို လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ထူထောင်နိုင်မည်ဆိုလျှင် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့ကို မခြိမ်းခြောက်သော အလယ်အလတ် စစ်ရေးအင်အားကို ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် အာရှနှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်၍ ကုန်သွယ်မှုများလည်း အမြောက်အများ တိုးပွားလာပေမည်။
( ဖတ်ရတာ တော်တော်ကို ထောက်နေတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြင်ပေးကြပါဦး။ )
( မှတ်ချက် ---- ဖယ်ဒရယ်မူ၊ တပ်မတော်ကဏ္ဍ တို့သည် မူရင်း ဆောင်းပါး အာဘော်သာဖြစ်၍ လူဦးရေ ၄၈ သန်းမှာလည်း ယခုအခါ သန်း ၆၀ ခန့်ဟု ခန့်မှန်းကြပါသည်။ )
- မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုများလွန်းတော့ ဆင်သွားမှလမ်းဖြစ်တဲ့ ပြဿနာရှိနေတယ်..။ ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှ တရားမင်တာမျိုးက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအမှန်တရားတစ်ခုလိုပဲ…။
- အမှန်တကယ်က… အခုဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံလမ်းကြောင်းမျိုးကို G7 အုပ်စုလို့ ခေါ်တဲ့ ရှေးဦး NLD အုပ်စုက ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းမှာဖေါ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတာပဲ..။ ခုလို ၂၆ နှစ်ကြာမှဖြစ်လာတာကလည်း မျက်နှာမွဲပြောရင် အမှန်မထင်ကြတဲ့ ဓလေ့ကြောင့်..။
- ခုလည်း KIA, SSA, UWSA စတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့ အဖြေက ဖက်ဒရယ်ပဲ..။ ဒီမှာလည်း ရှမ်း၊ကချင်တို့ မြင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာထက်…အမေရိကန်လို ဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ နမူနာအတိုင်း တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ နာမည်ကို ပထ၀ီဝင်နာမည်ပေးခြင်းကနေစရမယ်…။ ဒါတွေကိုလုပ်ဖို လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို NLD ခွဲထွက် NDF အုပ်စုကပဲ အသံထွက်လာတာတွေ့ ရပြီး ဒေါ်စု ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပုံမပေါ်..။
- ဒီလူမျိုးစွဲအတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့PR က တစိတ်တပိုင်းအကျိုးပြုနိုင်တာပဲ..။ အနဲဆုံးတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်…ဒီစံနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်တာပဲ..။ ဒါကိုလည်း PR စံနစ်ကို မသင့်တော်သေးလို့ ပြောကြပေမယ့်…ပေးကြတဲ့အဖြေက ဒီစံနစ်က ရှုပ်ထွေးလို့ တဲ့…။ မိုးကြိုးပစ်ထန်းလက်ကာ။ …..ဒီကနေ့ လို အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ ဒီမဲပေးစံနစ်က ရှုပ်ထွေးလွန်းသတဲ့လား။…ဒီစံနစ်မှာ နားလည်ဖို့ အများကြီးအားထုတ်စရာမလိုတဲ့ ပုံစံတွေရှိနေတာပဲ..။ …အမေရိကန်ဟာ သမ္မတကို တိုက်ရိုက်ရွေးခြယ်လို့ဒီစံနစ်ကို သုံးဖို့ မလိုတာ..။..အင်္ဂလန်လို ဘိုးအေ ဒီမိုကရေစီကြီးရဲ့ unitary state ကိုရောလိုက်လို့ ဖြစ်မတဲ့လား...။ တကယ့်တကယ် ဒီစံနစ်ကို ဆန့် ကျင်ကြတဲ့ အကြောင်းက Non-NLD ဒီမိုအုပ်စုကတင်ပြလာလို့ ပဲ…။NLD သာလျှင် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်မြင်နေကြတဲ့အမြင်ကို ကျော်လွှားဖို့ ဆိုတာ ကြံ့ဖွံ့ အမတ်တွေ လွှတ်တော်ထဲက ထွက်သွားနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ လောက် ခက်နေတယ်…။
-၂၀၀၈ ကိုပြင်ဖို့ ဆိုတာ ဒေါ်စုသမ္မတဖြစ်ဖို့ အတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အပြင်တခြားမရှိတော့ဘူးလား..။ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ ပြင်တိုင်းရောကောင်းတဲ့အရာလား..။ ဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာ စိတ်မထင်တိုင်း ထပြင်နေရရင်ဖြင့် ခတ်ကွင်းပြင်နေတာနဲ့ ပဲ ရွာသစ်ကြီးကိုကျော်သွားတော့မယ်..။
- ၂၀၂၀ လောက်ရောက်ရင်တော့ NLD နဲ့ ဒေါ်စု သာကယ်တယ်ရှင်ဖြစ်စေချင်ကြတဲ့အမြင်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်စရာတစ်ခုလို့ မြင်လာကြမယ်ထင်တယ်…။
05/23/13--07:07: ကျွန်မမှာ ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်
by Thanda Win (Notes) on Sunday, October 7, 2012 at 10:22am
Myanmar Soil map
1999 ခုနှစ်တုန်းက ဆရာကြီး ဦးစောဆိုင်မွန်သာက ပြောပြခဲ့တာ။ ကုလားတွေဟာ တရုတ်ကိုကြောက်တယ်တဲ့။ တရုတ်တွေကတော့ ဂျပန်ကိုကြောက်ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆရာလို့ မေးတော့ ကုလားတွေ ရပ်ကွက်ထဲ တရုတ်ဝင်လာရင် ရှိသမျှစီးပွားရေး သိမ်းသွားတာပဲတဲ့။ အဲဒီလိုပဲ ဂျပန်ဝင်လာရင် တရုတ်တွေ ပြေးရတာပဲတဲ့။ ဘာနဲ့ ဆိုင်သလဲဆိုတော့ Neuro surgeon (ဦးဏှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်) ပီပီ ဖြေပါတယ်။ Frontal Lobe ( ဦးဏှောက်ရှေ့ဆုံးပိုင်း ဧရိယာ) အကြီး အသေးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ့်ခေါင်းကို အသာပြန်စမ်းမိသေးတယ်။ အခုတော့လဲ သိနေပြီမို့ မလိုတော့ပါဘူး။
မရိုးနိုင်တဲ့ ဗမာဆုံးမစကားတခွန်းလဲ ရှိပါသေးတယ်။ တရုတ်လိုရှာ ကုလားလိုစု ဗမာလို မဖြုန်းနဲ့တဲ့။ တရုတ်ရယ် ဗမာရယ် ကုလားရယ် စင်္ကာပူရယ် ဂျပန်ရယ် European ရယ် ကိုများ နံပါတ်စီလိုက်ကြမယ်ဆိုရင် ---- ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။ သိပြီးသားမို့ ခေါင်းကို စမ်းစရာ မလိုတော့ပါဘူးလို့။
ကြားဖူးနားဝကို လက်တွေ့သိရတဲ့အချိန်ကျတော့ သူတို့ပြောတာ အပိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြင်လာပါတယ်။ ဆင်တကောင်လုံးတွေ့လို့ ဆင်ခြေရာခံမိတာပေါ့လေ။ JICA ဆိုတာ အရင်က NGO အဖွဲ့အစည်းတခုလို့ပဲ နားလည်ခဲ့တာ။ ဂျပန်ဆေးရုံသစ်ကြီးဆောက်ပေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့။ သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ ရေခဲသေတ္တာတွေ နောက်တနှစ်လာစစ်တော့ ဆေးရုံထဲမှာမရှိဘဲ ဆေးရုံလူကြီးအိမ်ရောက်နေတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးအိပ်ရင်းနဲ့ အလုပ်သင် ညဂျုတီအတူဆင်းခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေတောင် လွမ်းမိပါသေး။ နောက်တခါ ကြားရပြန်တာက JICA က ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွေကို ဆေးလှူမှာတဲ့။ သာဓုပါရှင်။ ဟိုတနေ့ကမှ သိတယ်။ ၁၅ နှစ်လုံးလုံး JICA တကယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်က တနေ့မှာ ဖွံ့ဖြိုးလာမယ့်မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်မယ့် နေရာတွေ၊ သတင်းတွေ၊ စီးပွားကွက်တွေနဲ့ စီးပွားဖက်တွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းထားဖို့တဲ့။ မြတ်စွာဘုရား။ တို့များမြန်မာပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မျှော်လင့်နေတာ တို့တွေချည်းပဲမှတ်နေတာ။ အင်းလေ --နံပါတ်စဉ်ထဲမှာ ဘိတ်ချီးဆိုတော့လဲ ထိပ်ဆုံးကကောင် ဘာလုပ်လဲ မသိနိုင်တာ မထူးဆန်းပါ။
ဂျပန်များဟာ မြန်မာပြည်ကို အားဖြည့်နေပါပြီ။ မာရသွန်ပြေးပွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလရဲ့ ညတညမှာ အစပြုခဲ့တာပါ။ မြန်မာသမ္မတသစ်က ညစာစားပွဲအပြီးမှာ မြေပုံကြီးဖြန့်ခင်းပြီး အသက်ကြီးကြီးဂျပန်လူမျိုး အာဏာပွဲစားကို ဆုတခုချလိုက်လို့ပါ။ ဒီဆုဟာ မာကူးမြို့ ( မကာအို ) လောက်ကြီးတဲ့ မြို့တော်တခုတည်ဆောက်နိုင်ခွင့်ပါပဲ။
အသက်၆၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ဟာ မြန်မာအရပ်သားအစိုးရရဲ့ သမ္မဖြစ်တာ ၆ လပဲရှိပါသေးတယ်။ သမ္မတဟာ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လက်တွဲခဲ့ပြီး အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ နှစ်၅၀ကြာခဲ့တဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကို လမ်းပြန်ဖွင့်ပေးမှုတွေအတွက် အားပေးခံရသလို သတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ခံထားရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သမ္မတဟာ အာရှတိုက်ရဲ့ ဒုတိယအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေကို ရှာဖွေနေပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ တရုတ်ပုံစံ ညစာစားပွဲအပြီးမှာ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မြန်မာပြည်အရေးစိတ်ဝင်စားသူ ဂျပန်နိုင်ငံရေးသမား ဟီဒဲအို ၀ါတာနာဘဲ (၇၈ နှစ် ) ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။ သမ္မတသစ်ဟာ ရန်ကုန်မြို့အနီးမှာရှိပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းမှာ အထူးစီးပွားရေးဇုံတည်ဆောက်ဖို့ အပေးအယူတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြွေးတွေ ချေးငွေတွေ နဲ့ လဲလှယ်ဖို့ပါပဲ။
ကျွန်တော် တခုခုတော့ လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ယာဆုဟိရို နာကာဆိုနဲရဲ့ အနီးကပ်ဖြစ်ခဲ့သ၊ူ ယခင် ဂျပန်အစိုးရ၀န်ကြီးဟောင်း ၀ါတာနာဘဲက ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၀ါတာနာဘဲဟာ စကားတည်သူပါ။ တနှစ်မပြည့်ခင်မှာတင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ဂျပန်က အကြွေးတွေကိုလျော်ပစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၈ ဘီလီယံဒေါ်လာအကူအညီပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
ရွှေရောင်ဝင်းတဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် ချစ်ကြည်ရေး
ဒါအပြင် ဂျပန်ဟာ ၃.၂ ဘီလီယံဒေါ်လာကို မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ တည်ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အကြီးဆုံးစက်မှုဇုံဖြစ်လာမယ့် ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းမှာ အထူးစီးပွားရေးဇုံ တည်ဆောက်ဖို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမယ်လို့လည်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီမှုတွေဟာ တညတာအတွင်းမှာတင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ သီလ၀ါစီမံကိန်းရဲ့ တစိတ်တပိုင်းမှာတင် အကြွေးလျော်တာတွေနဲ့ ထပ်ချေးတာတွေဟာ ၅ ဘီလီယံဒေါ်လာထိအောင် ရှိတာမို့ ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ မှာ အမေရိကန်တွေပေးတဲ့ ဒေါ်လာ ၇၆ သန်းနဲ့ အီးယူအဖွဲ့က ၂ နှစ်အတွင်းပေးမယ်ပြောထားတဲ့ ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကို သိမ်နုတ်စေပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သတိကြီးကြီးဆက်ဆံနေရာကနေ ဘယ်လိုများတနှစ်အတွင်းမှာ ရွှေရောင်ချစ်ကြည်ရေးအဆင့်ကို တက်သွားရတာလဲလို့ သိရအောင် သတင်းဌာနအနေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အယောက် ၅၀ လောက်ကို လိုက်လံမေးမြန်းကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ပြောပြတာကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေသစ်အတွက် သက်တမ်းနုလှတဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ငြင်းခုန်နေဆဲအဆင့်မှာတောင်
သေးငယ်ကျစ်လျစ်ပြီး အဆက်အသွယ်ကောင်းလှတဲ့ ဂျပန်အဖွဲ့ဟာ တိုကျိုအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့တွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မြန်မြန်ချနိုင်အောင် တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာအာရှရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ အရေးအပါဆုံးဈေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးလိုက်တာပါပဲ။ ဂျပန်များကတော့ မြန်မာခေါင်းဆောင်များဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မဆုံးတမ်းလွှမ်းမိုးမှုက လွတ်မြောက်အောင်ကူညီမယ့်သူများကို ရှာဖွေနေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့တွန်းအားဟာ မြန်မာပြည်အပေါ် အမေရိကန်နဲ့ အီးယူအဖွဲ့တို့ထက် တလှမ်းသာနေပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူအဖွဲ့တွေက ၁၉၉၀မှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ တွန့်ဆုတ်နေကြတာမို့ပါ။ ဒီအတွက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရလာဒ်ကတော့ ဂျပန်များရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးရုံးခန်းတွေ၊ ဘဏ်တွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို တရှိန်ထိုးခုန်တက်သွားစေတာပါ။
အမေရိကန်တွေက ကျွန်တော်တို့ကိုညှာတာပြီး မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကံကောင်းသွားတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အနောက်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ မြန်မာပြည်ထဲမှာ လုံးဝကို ရှိမနေခဲ့ဘူးလေ လို့ ဒိုင်ဝါ သုတေသနဌာနရဲ့ မန်နေဂျာ ဂျပန်လူမျိုး ရှီငဲတို အီနမိက ပြောပါတယ်။ ဒီဥာဏ်ကြီးရှင်များအဖွဲ့ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ သေးငယ်လှတဲ့ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကို ၂၀၁၅ မှာ အကြီးအကျယ်ပြောင်းပစ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ အီးယူ သံတမာန်များကတော့ ဂျပန်က အခွင့်ကောင်းရသွားတယ်လို့ မမြင်ပါဘူးတဲ့။ ၀ါရှင်တန်က တိုကျိုအပါအ၀င် အားလုံးကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီး စီးပွားရေးမှာကူညီဖို့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ရေးသမားတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ တိုက်တွန်းနေခဲ့တာပါလို့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အကြီးတန်းတာဝန်ခံတဦးက ပြောပြပါတယ်။
လက်တဆုပ်စာ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဂျီအီးနဲ့ ကိုကာကိုလာ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ပြန်ဝင်လာပါပြီ။ သီလ၀ါမှာဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံလျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ ဂျီအီးနဲ့ စီမန်း တို့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ ဘက်ခ်ျတယ်နှင့် ဘယ်လ်ဖိုး ဘက်တီ တို့ဟာ ဂျပန်များထံက ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကို ခွဲဝေရရှိကြပါတယ်လို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလေ့လာသူများက ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်အများအပြားဟာ ဈေးကွက်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနှင့်နေကြတာမို့ ကျွန်တော်တို့ အတော်ကို နောက်ကျနေပါပြီလို့ အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး ဂျွန် ဂိုယာကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာများက အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများကို အလွန်လိုလားတယ်ဆိုတာကတော့ သိသာပါတယ် တဲ့။
ဂျပန်များရဲ့ အလျင်စလို နိုင်မှုဟာ စွန့်စားမှုတွေများလှပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်နေတဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးသမားနဲ့ အတူတွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများရဲ့ နာမည်ကောင်းကို ထိခိုက်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။
ဂျပန်များရဲ့ ဧက ၅၉၃၀ အကျယ်အ၀န်းရှိတဲ့ သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုံ တည်ဆောက်ရေးဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မြေများမှာ အငြင်းပွားနေဆဲ ပိုင်ဆိုင်မှုပြသနာများကို မဖြေရှင်းရသေးခင်မှာ သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ အခုထိ သီလ၀ါမှာ ကွင်းပြင်ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေပါသေးတယ်။ စပါးစိုက်ပျိုးတဲ့လယ်မြေတွေကို စက်ရုံတွေဆောက်ကြမှာပါ။ အလုပ်သမားများဟာ ရွှံ့မြေတွေကို ခြင်းနဲ့သယ်ကြပြီး ကားကြီးတွေနဲ့ ကျောက်ခဲတွေကို လမ်းဆိုးပေါ်ပုံချတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အယ်ဒိုရာဒို(အာဖရိက တောနက်အတွင်းမှ မြို့အမည်) နယ်မြေသစ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ယခင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်ပြီး အခုအခါမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေကို မြန်မာ့ဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးနေသူက အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ထဲကားဖြတ်မောင်းရင်းနဲ့ ပြောပါတယ်။
ဂျပန်အမှုဆောင်အရာရှိများဟာ စွန့်စားခန်းတွေက များနေမှန်းသိကြပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်းမှာ ပိုတောင်များပါသေးတယ်တဲ့။ အခုနေ ပြသနာစာရင်းကိုသာ ချရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် စာကြောင်းရေ ၅၀-၆၀ လောက်ထွက်လာမှာပါ လို့ မာရူဘဲနိ ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ အာရှနှင့် သမုဒ္ဒရာ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ယာဆုဟိရို မိုရိမိုတို ကပြောပါတယ်။ ဒါတောင်မှ သူကထပ်ပြောပါသေးတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေက ကုန်သွယ်မှုကို ပျက်စီးနိုင်ခြေတွေထက် များပါတယ်တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆုလာဒ်တခုလို့ မြင်ထားကြတာ ကြာပါပြီ။ မြေဧရိယာအားဖြင့် ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံပေါင်းထားသလောက် ကျယ်ပြောပါတယ်။ နယ်စပ်ခြင်းထိစပ်နေတာကလဲ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၄၀ ရာနှုန်းဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် ထိုင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ပါ။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် အက်ဒမန်ပင်လယ်ထဲကို သွားနိုင်မယ့် ဆိပ်ကမ်းတွေကလည်း ကမ္ဘာ့အလုပ်အများဆုံး သင်္ဘောလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ မလ္လကာရေလက်ကြားရဲ့ မြောက်ဘက်လေးတင်ရှိနေပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိက ထောက်ပံ့သူဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လစာရင်းများအရ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေအပါအ၀င် တရုတ်နိုင်ငံက ၁၄ ဘီလီယံဒေါ်လာကျော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှုများရဲ့ ၇၀% ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ ၁၉၈၈-၂၀၁၁ အတွင်းမှာ ဒေါ်လာ၂၁၂ သန်းသာ မြှပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ဂျပန်များ ရှပ်အင်္ကျီလက်ပင့်တင်လို့ ဟန်ပြင်နေကြပါပြီ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှ ယနေ့ ဂျပန် မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာ မယုံနိုင်စရာ နွေးထွေးလွန်းလှပါတယ်။
ကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို စစ်လျော်ကြေးတောင်းတဲ့နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပထမဆုံးသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်းတို့ဟာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ သင်တန်းတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာတွေဟာ ဂျပန်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဆိုးတွေကို ချန်ထားခဲ့ပြီး ဂျပန်ကွန်ဆာဗေးတစ်နိုင်ငံရေးသမားများကို ဖက်လှဲတကင်း ကြိုဆိုနေကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံများလိုမဟုတ်ပဲ ဂျပန်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးတွေကို ပိတ်ဆို့မှု မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လဲ ဂျပန်ကော်ပိုရေးရှင်းများဟာ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ မီဆုဘီရှီ UFJ၊ Sumitomo Mitsui Financial and Mizuho Financial Group ရဲ့ရုံးခွဲတွေဟာ ဆုံချက်ကြီးတွေအဖြစ် ရန်ကုန်စီးပွားရေးနယ်မြေထဲမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ ဂျပန်မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို ငွေပြန်ဖော်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ ထိပ်ပိုင်းဘဏ်အရာရှိက ပြောပါတယ်။
တိုကျိုတာဝန်ခံ ၀ါတာနာဘဲဟာ သြဇာရှိအပေါင်းအသင်းများနှင့် နုိုင်ငံရေးသြဇာထူထောင်ရာမှာ အစွမ်းထက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာ သူ့အတွက် ဒုတိယမြောက် မှတ်တိုင်ပါ။ စစ်ပြီးစက ၀ါတာနာဘဲဟာ ၁၁ နှစ်သားပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူ့အကိုကြီးတယောက်ကတော့ ကာမီကာဇေ လေသူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြိး အိုကီနာဝါကျွန်းတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သူက မိန့်ခွန်းထဲမှာ တခါတလေ ထည့်ပြောတတ်ပါတယ်။ သူဟာ ကွန်ဆာဗေးတစ်နိုင်ငံရေးသမားဝါရင့်ကြီးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များမှာ ဂျပန်နိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ပထမဆုံးပတ်သက်ခဲ့တာကတော့ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်များကို တိုကျိုမှာ ဧည့်ခံခဲ့ရစဉ်ကပါ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ကျောင်းသားများရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့ပေမယ့် ၂ နှစ် အတွင်းမှာပဲ နာကာဆိုနဲဟာ ၀ါတာနာဘဲကို မြန်မာပြည်နဲ့ တရားဝင်မဟုတ်သော ဆက်ဆံရေးများထူထောင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၀ါတာနာဘဲရဲ့ အာဏာရှင်များကို ထောက်ခံမှုဟာ ဘယ်တုန်းကမှ တွေဝေယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာတရားဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလွဲပြီး တခြားရွေးစရာမရှိခဲ့ပါဘူး လို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများရရှိဖို့ သူကိုယ်တိုင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်မြန်မာ ဖက်စပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ website မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ သူဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ရှမ်းပြည်နယ်ကို ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများပေးပို့တဲ့ လမ်းခရီးမှာ နယ်မြေခံ တပ်ရင်းမှူးအနေနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်က သူ့ကို ဂေါက်ရိုက်ကစားဖုိ့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတချိန်ပဲ ပျော်စရာရှိခဲ့တာပါလို့ ၀ါတာနာဘဲက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြောပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဂေါက်သီးရိုက်တော်ပါတယ်။ စစ်ဝတ်စုံနဲ့ဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်ဟာ တကယ်ကြည့်ကောင်းပါတယ် တဲ့။ ဒါဟာ လယ်သမားမိသားစုမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး နှစ် ၄၀ လောက်စစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အတွက် ပုံမှန်မှတ်ချက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ စာဂျပိုးပုံပေါက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ စစ်တပ်က အစိုးရထဲမှာ နေရာရဖို့ အာမခံခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ပထမဆုံးအရပ်သား သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၀ါတာနာဘဲရဲ့ စိတ်ကြိုက်ဆက်ဆံမှုတွေဟာ တခါတလေမှာ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကိုအိချိရို ဂမ်းဘဟာ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ညစာဖိတ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ၁၆ နှစ်အတွင်းမှာ ပထမဆုံးအဖြစ် နှစ်နိုင်ငံထိပ်ပိုင်း သံအရာရှိများတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂမ်းဘက မြန်မာပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ဂျပန်က ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအသစ်တွေလုပ်ပါမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီညမှာပဲ နေပြည်တော်မှာ ၀ါတာနာဘဲကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မြေပုံထုတ်ပြခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ၀ါရင့် အာဏာပွဲစားကြီးကတော့ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် လုံးဝကွဲပြားတဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတသစ်က ၀ါတာနာဘဲကို ထိုင်းတွေ မရူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ထားဝယ်မှာ စီးပွားရေးဇုံဆောက်ဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဟာ တရုတ်ပြည်က ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိုလည်း ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဂျပန်တွေအတွက် တံခါးပွင့်သလိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဂမ်းဘ နှင့် ဦးသိန်းစိန်
ဦးသိန်းစိန်က ၀ါတာနာဘဲစံ - မင်းကိုပေးစရာတခုရှိတယ် လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှုးကို စာရွက်စာတမ်းတွေယူလာဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ သီလ၀ါစီမံကိန်း ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတာပါပဲလို့ ၀ါတာနာဘဲက ပြန်ပြောပြပါတယ်။ တိုကျိုမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးနဲ့ နေပြည်တော်သမ္မတရုံးကတော့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ၀ါတာနာဘဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းအပေါ် နှုတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာမှာ တိုကျိုကို အစည်းအဝေးတက်ဖို့ ပြန်လာတဲ့ဝါတာနာဘဲက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂမ်းဘနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်က ဂမ်းဘကို နှစ်မကုန်ခင် မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်ပြီး သီလ၀ါစီမံကိန်းကို လုပ်ဖို့နီးစပ်နေကြောင်း ပြပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒါဟာ နှစ်ဘက်အစိုးရပိုင်းရဲ့ တရားဝင်စီမံကိန်းဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ တဲ့။
ဂမ်းဘကို ဖိအားပေးဖို့အတွက် ၀ါတာနာဘဲဟာ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ယူကီအို အဒါနို နဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီမှာ သြဇာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမား ယိုရှီတို စန်ဂိုကုတို့ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန်သွားဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသွားပြီးတော့ အဒါနိုက မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်ဖို့ ကတိပေးလိုက်ပြီလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထက်အရင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင် ဂမ်းဘက မျက်နှာပျက်ရပါတော့မယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ မြန်မာပြည်ကို သူရောက်သွားတာပေါ့တဲ့။
မတ်လထဲမှာ ၀ါတာနာဘဲဟာ ဂျပန်မြန်မာ ဖက်စပ်အဖွဲ့ကို ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ နာကာဆိုနဲနဲ့ တရုတ်ပြည်ကို ဖိအားပေးရာမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တာရို အစို တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့မှာ အငြိမ်းစား အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးများဖြစ်တဲ့ မာရူဘဲနိ နဲ့ မစ်ဆူဘီရှီ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေက အုပ်ချုပ်သူများပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ အထောက်အပံ့တွေပေးအပ်ရာမှာ ထိထိရောက်ရောက်ပုံဖော်နိုင်အောင် တနွေလုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၀ါတာနာဘဲက အကြွေးတွေလျှော်ပစ်ဖို့ကိုလည်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆက်အသွယ်တွေကို သုံးပြီးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့ - နေပြည်တော် ညစာစားပွဲအပြီး ၆ လ အကြာမှာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြွေးတွေရဲ့ ၆၀%ကို လျှော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၀ါတာနာဘဲက သူ့အနေနဲ့ အကုန်လုံးတောင်လျှော်ပစ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါတဲ့။ ဒါပေမယ့် ပဲရစ်အဖွဲ့ဝင် အကြွေးရှင်နိုင်ငံများက တင်းခံနေခဲ့လို့ပါ တဲ့။
ဒီအထောက်အပံ့တွေပေးတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက တိုကျိုဟာ အကြွေး ၃.၇ ဘီလီယံဒေါ်
လာကို ချေပစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များက အကြွေးတွေကို ပြန်ဆပ်ဖို့ ဒေါ်လာသန်း ၉၀၀ ကိုလည်း တိုကျိုမီဆုဘီရှီ UFJ ဘဏ်ကတဆင့် ထပ်ချေးဦးမှာတဲ့။ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ က တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဂျပန်ရဲ့ လျှင်မြန်နှုန်းကို အံ့သြသွားကြပါတယ်လို့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောပါတယ်။ သူတို့ဒါမျိုး တခါမှ မမြင်ဖူးဘူးလို့လည်း ပြောလိုက်ပါသေးတယ်တဲ့။
ဂျပန်ကကြွေးတွေလျော်ပစ်တာဟာ မြန်မာပြည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေဖို့ အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်သုံးခဲ့တာမို့ တခြားအလှုရှင်ထပ်ရှာဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တခြားပါတီများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဒီကိစ္စကို ရှေ့အပတ်မှာ ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။
အမည်ပျက်စာရင်းဝင် လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေးသမားများ
မတ်လမှာ တိုကျိုနိုင်ငံရေးသမားများဟာ အမေရိကန်က နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဝင်းအောင်နှင့် လက်တွဲခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်ဟာ ဂျပန်မြန်မာ ဖက်စပ်အဖွဲ့ထူထောင်တဲ့ပွဲမှာ အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောဖို့ ဂျပန်ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အိဒါနို၊ ဆန်ဂိုကူ၊ နာကာဆိုနဲ တို့နဲ့ အနီးကပ်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုနိုင်ငံထူထောင်ဖို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရေးကြီးပါတယ်လို့ ဦးဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်ဟာ ၀န်ကြီးအိဒါနို ရဲ့ သီလ၀ါစီမံကိန်းအပေါ် ထောက်ပံ့မှုကို အလွန်အမင်းဝမ်းသာပါတယ် တဲ့။
ဦးဝင်းအောင်ဟာ ဒဂုံ ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာ ဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာ နေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်း ၈ ခုထဲက တခုဖြစ်ပါတယ်။ ၀ီကီလိခ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သံတမာန်များရဲ့ လျို့ဝှက်သတင်းအရ သူဟာ စစ်တပ်အဆက်အသွယ်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ တားမြစ်ဒေသတွေက ကျွန်းသစ်တွေကို နိုင်ငံခြားတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးဝင်းအောင်ဟာ ဒီကိစ္စကို မှတ်ချက်ပေးဖို့ email မှတဆင့်တောင်းဆိုပေမယ့် အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။ သူဟာ အမေရိကန်ရဲ့ တားမြစ်ထားတဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အမေရိကန်များဟာ သူနဲ့အတူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဦးဝင်းအောင်ဟာ သီလ၀ါဆောက်လုပ်ရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းက ဘယ်သူပါဝင်ခွင့်ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်လူဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတဦးရဲ့ အဆိုအရတော့ ဦးဇော်ဇော်ပါဝင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်ဟာ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီး အာဏာရှင်များနဲ့နီးစပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းများဟာ ကျွန်းသစ်၊ ရာဘာစိုက်ပျိုးရေးများ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအထိ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ သူဟာလည်း အမေရိကန်နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်ဟာ ဂျပန်ကားဟောင်းများ တင်သွင်းခြင်းဖြင့် ချမ်းသာလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ Max-Myanmar တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ ထရပ်ကားတွေ ကို သီလ၀ါဒေသမှာ မြင်နေကြရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Sasakawa and DASSK
Gemba and DASSK
နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ယိုဟေးအိ ဆာဆာကာဝါဟာလည်း ၀ါတာနာဘဲရဲ့ မြန်မာဖွင့်ပွဲကို ကူညီခဲ့ပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းကို စစ်ပြီးခေတ်ဂျပန်မှာ သြဇာကြီးပြီး အရှည်မျှော်တွေးတတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆရာကြီး ဖြစ်ခဲ့သူ ဆာဆာကာဝါရဲ့ ဖခင်ကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆာဆာကာဝါက မြန်မာပြည်ကို စိတ်ဝင်စားနေတာကြာခဲ့ပါပြီ။ သူဟာ ၀ါတာနာဘီ၊ ဆန်ဂိုကုတို့နဲ့အတူ သီလ၀ါကိစ္စကို ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဂျုလိုင်လအတွင်းက ထပ်မံညှိနှိုင်းပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဆာဆာကာဝါက အာဏာရှင်လက်ထက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများဒေသမှာ အထောက်အပံ့အကူအညီတွေ ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူနည်းစုတွေဟာ အစိုးရသစ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရည်ရွယ်ကြောင်း နားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ဒေသတွေဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များကို သြဂုတ်လအတွင်းမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဘက်က ဦးဝင်းအောင်ကဦးဆောင်ပြီး စက်မှုဇုံကို အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး ဂျပန်ဖက်ကတော့ infrastructures များကို အကြမ်းရေးဆွဲနေပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီကတော့ စစ်တပ်ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့ ဒီလိုရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေလုပ်ကိုင်တဲ့အပေါ် မစိုးရိမ်ပါဘူးတဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လွှတ်တော်မှာတောင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေကို ထောက်ခံတဲ့အပြင် အနောက်နိုင်ငံများကိုလည်း ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုတ်သိမ်းဖို့ကို တောင်းဆိုနေပါပြီ။
ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ ဦးဟန်သာမြင့်က ကျွန်တော်တို့ လုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ဒီရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေနဲ့ အကူအညီတွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိ မရှိဆိုတာပါပဲ တဲ့။ အာဏာရှင်ဟောင်းများနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ လက်ဝါးကြိးအုပ်စီးပွားရေးသမားများနဲ့ သီလ၀ါစီမံကိန်းမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများလည်း နာမည်ပျက်ကိန်းရှိနေတာကို ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ ဘာမှတ်ချက်မှ ချမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သီလ၀ါဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဟာ မြန်မာအစိုးရဖက်က စတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်အစိုးရများက စဉ်းစားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ချက်အတိအကျ ချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး လို့ ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အဆာဂိ ဆာကာအိက ဆိုပါတယ်။
တိုကျိုရုံးခန်းမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ စောစီးစွာ ၀င်ရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမယ့်သူများအနေဖြင့် ကြုံနိုင်ချေရှိတဲ့ ဆုံးရှူံးမှုများအကြောင်းကို မေးတော့ ၀ါတာနာဘဲက ပုခုန်းတွန့်ပြပါတယ်။ ဒီလိုစိုးရိမ်နေတဲ့ ကုမ္မဏီရှိနေတယ်ဆိုရင် ဂျပန်မှာနေခဲ့ပေါ့။ ဒါ သူတို့ဘာသာ ရွေးရမှာပဲ တဲ့။
( ဘာသာပြန်အမှားများ ချွတ်ယွင်းချက်များကို အားမနာတမ်းထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။ )
( အန်တိုနီ စလိုကော့စကီးရေးသားပြီး ဂျေဆန်ဇွိ နှင့် အောင်လှထွန်း (ရန်ကုန်)၊ ဆီဘရှန် မိုဖက် ( ဘရာဇီး)၊ အန်ဒရူးကွင်း (၀ါရှင်တန်)၊ မာတင်ပက်တီ (ဘန်ကောက်) တို့ ပူးပေါင်းတင်ပြသည်။ ကီဗင်ကရိုလစ်ကီ၊ ဘေလ်တာရန့်၊ မိုက်ကယ်ဝီလီယံ တို့မှ တည်းဖြတ်သည်။)
05/23/13--21:51: “လူထုအားကို အများကြီးလိုသည်”
by Soe Min (Notes) on Tuesday, April 30, 2013 at 12:26am
ရုပ်သေးပွဲတွေမှာ တိုင်းတော်ပြည်တော် တည်ကြတဲ့အခါ ကမ္ဘာပျက် ကမ္ဘာတည်၊ဟိမ၀န္တာခန်းပြီးတာနဲ့ သပြေပန်းတွေထိုးထားတဲ့ ၀ါးကျည်တောက်ကလေးကို ဇာတ်စင်အလယ် လာထားလိုက်ရင်ပရိသတ်က သဘောပေါက်တယ်။ ဒါဆို နောက်တစ်ခန်းက ၀န်လေးပါးထွက်လာပြီး စကားပလ္လင်ခံ၊ ဘုရင်မင်းတရားကြီးနဲ့ ညီလာခံခေါ်ပြီး ဇာတ်ပန္နက်ရိုက်တော့မှာ။ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း သိပ်တော့ မကွာပါဘူး။တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်ချင် ဘယ်သူက အုပ်ချုပ်မှာတုန်း၊ ဘယ်ပုံစံနဲ့ အုပ်ချုပ်မှာတုန်း။၀န်ကြီးတွေက ဘယ်သူပါသတုန်း။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုရွေးကောက်ခွင့်ရှိသတုန်း၊ စတာတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရတယ်။
ဒါကြောင့်သူတို့လည်းလွှတ်တော်တွေ ညီလာခံတွေ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ရတယ်။ ဒါပြီးရင်တော့ တိုင်းပြည်ဆိုတာ ရှင်ဘုရင်၊မူးမတ်၊ စစ်သူကြီးချည့်ပဲ ဇာတ်လမ်းဆင်ကပြီး တိုင်းသူပြည်သားကို ဖြတ်လျှောက်နောက်ထ ဝေလေလေလေးငါးယောက်လောက်နဲ့ ပြီးသွားလို့ မရဘူး။ တကယ့်အပြင်မှာ အဲသည်လူတွေက သန်းခြောက်ဆယ်တောင်ရှိတာ။ နည်းနည်းနောနော မှတ်လို့။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့ပါးစပ်က တဖွဖွအော်နေကြတဲ့ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ကြီး တည်ဆောက်ချင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် အဲသည်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အင်အားအပေါ်မှာ အများကြီး အခြေခံပြီးမှ တည်ဆောက်ယူလို့ရမယ်။ ဒါကို သူတို့ဆီကအခေါ်အဝေါ်ကCapacity Building တဲ့။ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရင် ဗူးလုံးနားမထွင်းနဲ့မို့ ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြပါ့မယ်။
မိုးရွာလို့ ရေခံကြတဲ့အခါ စဉ့်အိုးရှိတဲ့သူက စဉ့်အိုးလောက်၊ ဖျဉ်းအိုးရှိတဲ့သူကဖျဉ်းအိုးလောက်၊ အုန်းမှုတ်ခွက်ပဲ ရှိတဲ့သူကတော့ အုန်းမှုတ်ခွက်လောက်ပဲ ရလိမ့်မယ် မဟုတ်လား။ အခွင့်အလမ်းဆိုတာကတော့
ကောင်းကင်ကရွာတဲ့မိုးများလို ဖြိုင်ဖြိုင်ရွာချင်ရွာမယ်။ ဖွဲဖွဲကျချင်ကျမယ်။ ကိုယ့်အတွက် ရေဘယ်လောက် ရလိုက်သလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဆီမှာခံတဲ့ အိုးပေါ် မူတည်လိမ့်မယ်။Capacity ဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာ။ နိုင်ငံတစ်ခုကို တိုးတက်အောင် ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းအဲသည်နိုင်ငံက ပြည်သူတွေရဲ့ ခံယူနိုင်စွမ်းအားကို အတတ်နိုင်ဆုံး မြှင့်ထားပေးမှ တိုင်းယက်တဲ့ပက္ကလာ မိုးရွာတော့အသင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုပြောတဲ့ခံယူနိုင်စွမ်းအားဆိုတာက ၁၅၀၀တန်ဖုန်းချပေးရင်ဘယ်လောက်များများတန်းစီပြီး ရအောင်ယူနိုင်သလဲဆိုတာမျိုးကို မဆိုလိုဘူး။ တိုင်းပြည်လူထုဆီမှာရှိတဲ့ ငွေအင်အား၊ လူအင်အား၊ ကာယစွမ်းအား၊ ဥာဏစွမ်းအားတွေကို ပြောတာ။ အဲဒါကြောင့် တို့နိုင်ငံထူထောင်ခါစကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့ဖူးတယ်လေ။ “လူထုအားကို အများကြီး လိုသည်” တဲ့။
ပထမဦးဆုံးကတော့ ငွေစကားကြေးစကားပဲ စပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာစားဝတ်နေရေးတောင် ဘယ်လောက်ရုန်းကန်ရသလဲ လူတိုင်းအသိ။ တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံး ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အဆက်မပြတ် လိုအပ်နေတဲ့ ငွေကြေးဘဏ္ဍာတွေဆိုတာ မိုးပေါ်က ကျမလာဘူးဗျ။ နတ်ရွာစံ၊ နန်းကျဘုရင်ကြီးတွေကတိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ ရွှေတွင်းငွေတွင်း၊ ပယင်းဒုတ္ထာတွေကို အမွေချန်ထားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။နောင်လာနောက်သားတွေ ဆပ်ရစ်ကျဖို့ ကြွေးမြီကုဋေကုဋာချန်ပြီး အကုန် အိပ်ထဲအပါ ယူသွားကြပြီ။အရင်ခေတ်ကလို နန်းမွေပေးမရတဲ့အတွက် ကိုယ်သေရင် မိသားစုအရေး စိတ်အေးရအောင် စီမံသွားနိုင်မှတော်ကာကျတာကိုး။ (မလိမ်မာရင် မုန့်ဟင်းခါးအိုး မျက်စောင်းထိုးနေရမစိုးလို့) ဒါကြောင့်မို့တက်လာတဲ့အစိုးရဆိုတာ “မှားပါတယ် ကိုသောင်းရယ်။ ရှင့်မလဲ အကြွေးတွေနဲ့။ ကျုပ်မလည်း ကလေးတွေနဲ့။”လို့ ထိုင်မငိုရယုံတမယ်ပဲ။ သည်အရေတွေမြင်လို့ အောင်ဆုပန်ထီလက်မှတ် ပေါက်မဲကြီး အကြီးကြီးပါတဲ့စုဖုရားမယ်မယ်ကို သူတို့ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းလိုက်ကြတာ။ သူသာမကယ်ရင် လွှတ်တော်ကြီးထွန်းတဲ့မီတာခတောင် ပေးစရာရှိမယ် မထင်ဘူး။ ကဲဗျာ။ “အမေလာပြီ။ ငွေပါသည်” ဆိုယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူး။ တစ်သက်လုံး သူများပေးစာကမ်းစာ ထိုင်စားနေလို့ မကြီးပွားဘူး။ နိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်ငွေဘဏ္ဍာ ရရာရကြောင်း ဘယ်လိုရှာကြမလဲ။
၀န်ကြီးဌာနကြီးတစ်ခုလုံး ရှိတယ်လေ။ ဘဏ္ဍာ/အခွန်တဲ့။ ကိုယ့်မိဘအိမ်ကိုကိုယ်စားရိတ်ထောက်သလို ကိုယ့်သားသမီးနောင်ရေးအတွက် စုဘူးထဲ ပိုက်ဆံထည့်သလို တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံး အခွန်ဆောင်ကြတာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ ရယ်ချင်လိုက်တာ ဖတ်ဖတ်မော ရင်ဘတ်နောက်ကကျော။တောမှာသွားပြောလို့တောင် ဘယ်သူမှ မယုံတဲ့စကား။ လူကိုများ မအဘူးမှတ်နေ။ ဖွန်ကြောင်ချင် ကြောင်ပလိုက်မယ်။အခွန်တော့ မဆောင်နိုင်ဘူး။ အခွန်ဆောင်စေချင်ရင် အဲသည်အခွန်တွေက ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီးဘာအတွက်သုံးတယ်ဆိုတဲ့ ထရန်စပယ်ရန်စီကလေးတော့ ရှိဦးမှပေါ့နော့။ မယုံရင် စလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေမေးကြည့်လေ။ သူတို့ နှစ်တိုင်း မဖြစ်မနေ အခွန်ဆောင်ရတယ်။ အဲသည်ဆောင်လိုက်တဲ့ အခွန်တွေဘယ်ရောက်သွားသလဲ သိလား လို့။ မဆောင်ရင် အိမ်ပေးမပြန်လို့သာ မသထာရေစာအဖြစ် ဆောင်လိုက်ရတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သူတို့လည်း လစ်ရင်လစ်သလို အခွန်လွတ်ဈေး ပြေးချင်ကြတာ လွန်သလား။ ကိုယ့်ဟာကချွေးနည်းစာဗျ။ မိဝေးဖဝေး သူများရပ်ရွာ သေလုအောင် အပင်ပန်းခံရှာထားရတာ။ အဲဒီပိုက်ဆံတွေမော်တော်ပီကယ် အိမ်ခေါ်ပါးရိုက်ပြီး လျော်ကြေးပေးတဲ့အထဲများ ပါသွားမှဖြင့် ရင်ထဲ မချိပေါင်။စွပ်စွဲနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မယုံရင် အခွန်ဆောင်နေတဲ့အချိန် အဲဒီစိတ်ကူးကလေး မုဒ်သွင်းကြည့်။မျက်ရည်တွေ ဘူးသီးလုံးလောက်ကျမလာတော့ ပြောချင်တိုင်းပြော။ ဒါကြောင့် ထရန်စပရန်စီလိုတယ်လို့ ပြောတာ။
ထျန်ပလန်စီကအဲဒီနေရာမှာသာ မရှိတာပါအေ။ ရှိချင်တဲ့နေရာကျတော့ ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်အောင်ကို ရှိတယ်။အမည်မဖော်လိုသူ ဘဘကြီးက (ကိုယ်ကသာ နံမယ်ဖုံးရေးနေတာ သူကဖြင့် အဲသည်မျက်နှာကြီး မမြင်မြင်အောင်ထုတ်ပြရတာ အမော။ ကြွားစရာများ မှတ်နေလားမသိ) မင်းသမီးချောလေးအတွက် သိန်း၈၅၀တန် ကားဝယ်ပေးသွားတာရန်ကုန် ပွဲစားတန်းတစ်တန်းလုံးသိတယ်။ ဗြောင်လာဝယ်တာ။ သည်လိုပြောလို့ မင်းသမီးကလေး မကောင်းမမြင်လိုက်နဲ့ဦးနော်။သူတို့ချင်းဆက်ဆံရေးက သိပ်သန့်ရှင်းတာ။ ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှ မပါဘူး။ ကလေးမလေးက မေတ္တာဖြင့်ကူညီတာတစ်ခုခု ရှိခဲ့လို့ ဘဘဘက်ကလည်း မေတ္တာတုန့်ပြန်ရုံသက်သက်။ ဘတို့ချင်း မေတ္တာပြိုင်ကြပုံများတော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်း စိန်ဆိုင်မှာ သိန်း ၃၅၀တန်နားကပ် ဘောက်ချာတောင် မဖြတ်ပဲ ၀ယ်ပေးသတဲ့။ကဲ ဘယ်လောက် မေတ္တာတရားကြီးမားကြသလဲ။ အမယ်။ အဲဒီပိုက်ဆံလည်း သူတို့ ပေးရတာ မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့။အထုတ်ကြီးပိုက်ပြီး လိုက်ရှင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီးက သပ်သပ်ရှိတယ်။ သူတို့ချင်းချင်းမေတ္တာနှင်းကြတဲ့ ကိစ္စမှာ ဘယ်သူတွေက မေတ္တာခွန်၊ စေတနာခွန် ၀င်ကောက်လို့ရမှာတုန်း။ ခင်ဗျားတို့ဝင်ငွေခွန်ကောက်ချင် လခထုတ်တော့ လာကောက်လှည့်။ အဲဒီစေတနာ မေတ္တာတွေက အခွန်လွတ်ဗျ။
ပွဲစားတန်းကပေါက်ပန်းဈေးသတင်းတွေကို စာမျက်နှာပေါ်လာတင်နေပြန်ပြီ ထင်ဦးမယ်နော်။ သူများအတင်းတုတ်ရတာမကောင်းဘူး။ ကိုယ့်ဘက် မြားဦးလှည့်မလာခင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လှည့်ပလိုက်ဦးမယ်။ လာလေ့။ကိုယ်တို့ ဆရာဝန်တွေကရော ဘာထူးလို့တုန်း။ စေတနာရှင်ပြည်သူတစ်ဦးက ၀င်ငွေခွန်အကြောင်းစကားလေး စလိုက်မိပါတယ်။ ပဒူအုံ တုတ်နဲ့ထိုးမိသလား မှတ်ရ။ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့ လူတန်းစား မဟုတ်ဘူး လို့။ မချမ်းသာရုံ ဘယ်ကမလဲဗျ။ ဆင်းကိုဆင်းရဲတာ။ သူများမကြည့်နဲ့။စာရေးသူ မောင်စံဖားကလေး လာကြည့်လှည့်။ ဒါပေသိ ကိုယ့်မရှိတိုင်း တိုင်းပြည် မရှိဘူးလို့တော့မမှတ်နဲ့ဗျ။ အထင်သေး မခံနိုင်လို့ ထုတ်ကြွားလိုက်ဦးမှ။ သားသားတို့ ဆရာကြီးတွေထဲက မြန်မာပြည်မှာထိပ်ရွှေမိဆေးလိပ်ဆိုတဲ့ ဆရာကြီး တစ်ယောက်ဟာ ပင်စင်သွားတော့ စိတ်အေးလက်အေး အိမ်အပိုကလေးအငှားချပြီး စားပါတယ်။ သူ့အိမ်ငှားကလေးက ဘာရှိမှာလဲ။ မစို့မပို့ရယ်။ တစ်လမှ ဒေါ်လာရှစ်ထောင်ပဲရရှာသတဲ့။ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ အခွန်ဦးစီးမှူးဆိုတာ အိမ်အလည်မခေါ်ရတဲ့ အစားထဲပါတယ်နော်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကြည့်ဖူးတာ အိမ်ရောက်လာလို့ ဧည့်ခံရင်တောင် ဘယ်တော့မှ အရက်ကောင်းမတိုက်လေနဲ့။ ရှာလကာရည်ဆားခပ်ပြီး ဟုမ်းမိတ်ဝိုင်ပါ လို့ ပွဲထုတ်ရသတဲ့။ (နောက်ဆို အိမ်အလည်မခေါ်သင့်တဲ့အထဲမှာ မောင်စံဖားလည်း ပါသွားပြီ) ကိုယ်တို့ဆီက ဆရာကြီးတွေ တစ်နှစ်တစ်နှစ်တိုင်းပြည်အတွက် ဆောင်ထားတဲ့အခွန်တွေလည်း နည်းမထင်ပေါင်ဗျာ။ တိုင်းသိပြည်သိထဲကဆို ကြည်ကြည်ဌေး၊၀င်းဦး၊ တွံတေးသိန်းတန်ဆိုတဲ့ လက်ဖျားကရွှေသီးတဲ့ အနုပညာရှင်ကြီးတွေ အားလုံး အမြတ်တော်ကြေးနဲ့မွဲပြာကျသွားပါသတဲ့။ ဒီအစွန်းနှစ်ဘက်ကြားမှာ ကျုပ်တို့တတွေ ဘယ်လို အခွန်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာမေးနေစရာ လိုသေးလို့လား။ တော်လောက်ပြီကွယ်။ ကိုယ့်ဖြင့် ခြူးတစ်ပြား မကပ်ပဲ ငွေစကားကြေးစကားတွေပြောနေရတာ လျှာယားလိုက်ပါဘိ။
တကယ်တမ်းဖြည့်တင်းဖို့လိုတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကာယ ဥာဏ အင်အားတွေပဲ။ Human Resource ဆိုပါတော့။ပြောသာပြောရ သည်စကားတွေက မဆလာစော် အတော်နံလှတယ်။ ဒါပေသိ မပြော မပြီး လို့ ပြောရဦးမယ်။တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်ဖို့ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာလို့ ပြည်တွင်းပြည်ပကရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အသစ်ပေါ်ပေါက်လာရင် အဲသည်နေရာတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြဖို့လုပ်သားအင်အား အများအပြား လိုမယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ့်ဆီမှာ ဘာတွေ ရှိနေသလဲ အရင် တွေးကြည့်ပါဦး။ငယ်ရွယ်သန်မြန် ထက်မြက်တဲ့သူတိုင်းက သူများနိုင်ငံတွေမှာ ထွက် ကျွန်ခံနေကြရတာ။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာအိုနာကျိုးကန်းနဲ့ ထားမကောင်း ရောင်းမစွံတွေပဲ ကျန်တယ် လို့ ပြောရင် ဘယ်လောက် အသည်းနာစရာကောင်းသလဲ။ ကိုယ့်ဆီကလူတွေက အထည်ချုပ်သမအဆင့်လောက်ပဲ ရှိရင် အထည်ချုပ်သမနေရာပဲ ရမယ်ဗျ။မန်နေဂျာလောက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှ မန်နေဂျာနေရာကို ရမယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မညာတမ်းတွက်စမ်းပါ။ ဘယ်နေရာမှာ မြန်မာတွေ များမလဲ။ ကိုယ်မတတ်လို့ သူများခေါ်လုပ်ရရင် တခြားမကြည့်နဲ့ အိုင်အန်ဂျီအိုတွေကိုပဲ ကြည့်။ ၀န်ထမ်းလစာရဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကို အဖြူဘယ်နှစ်ယောက်ကပြန်ယူသွားသလဲဆိုတာ။ အဲသည် အချိုးအစားနဲ့တော့ ဗာရာဏသီတောင် တည်လို့ မရဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ဟိုတလောက တို့မေကြီးက ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေကို ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်ကြရအောင် ပြန်လာပါခေါ်ပြန်တော့ ကိုယ်ကပဲ အသည်းနာမိသေးတယ်။တကယ်တော့ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်၊ အာဏာရ အတိုက်အခံဆိုတာ မရှိဘူး တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ဆိုတာတစ်ဘက်တည်းရှိတယ်။ (ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မရပ်တဲ့ဘက်ပါဗျာ) တရုတ်ပြည်မကြီး တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတာပြည်ပကို လွင့်စင်ထွက်သွားတဲ့ တရုတ်လူငယ် ပညာတတ်တွေက နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊စုဆောင်းထားတဲ့ အရင်းအနှီးတွေနဲ့ သူတို့ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်လာကြလို့ပါတဲ့။ ကိယ့်ဆီမှာလည်းတူတူပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာ ဟန်မပျက်ကလေး လူတန်းမစေ့တစေ့ နေနိုင်စားနိုင်တဲ့ မိသားစုတိုင်းမှာနိုင်ငံခြားက ပိုက်ဆံရှာပြီး ပို့တဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ရှိကြတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ကြီးပွားဖို့ဆိုတာ မအေပေးမျိုးတွေပဲ တက်လမ်းရှိသဗျ။ (ဟုတ်တယ်လေ။ သူတို့ခမျာမအေတောင် ကြိုပွိုင့်နဲ့ပေးထားမိလို့ ဒယ်ဒီဖားသားဖေဖေက ကြည်ဖြူတာ။ နို့မို့ မေမေလေးတွေဆီအပ်ပလိုက်မှာပေါ့)
ဘယ်သူမဆိုသူများနိုင်ငံထွက် အလုပ်လုပ်ပြီး ငွေလေးကြေးလေး စုမိရင် အရင်ဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့မိသားစုကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့တာပါ။ အဲသည်ကမှ ပိုလျှံရင် ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် စုဆောင်းရင်းနှီးတယ်။နောင်သံသရာအတွက် လှူတာတန်းတာလည်း ပါတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်အတွက် လို့ ပြောလိုက်ရင်ငါတို့ အခွန်ဆောင်ထားတယ်လေ လို့ အမေရိကန်ဆန်ဆန် ပြောလိမ့်မယ်။ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သူတို့ဆီကတိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်နေတာ လစာဝင်ငွေထဲက တစ်ကျပ်တစ်ပြား မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဲ့ဒီထက် အရေးကြီးတယ်။ဦးနှောက်ကလေး တဖဲ့တပိုင်းလောက် ပါဝင်စေချင်တာပါ။ အတွေ့အကြုံလည်း ရှိခဲ့ပြီ။ ဥာဏ်ရည်လည်းထက်ကြတယ်။ ပညာတတ်ဆိုတဲ့ အလွှာတွေများတယ်။ ပြည်တွင်းကလူတွေအနေနဲ့ သူတို့ကို လိုက်မမီနိုင်တာတွေအများကြီးပဲ။ ဥပမာဗျာ။ ရွာမှာ သာအေးတို့လယ်ထွန်ရင် ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား လူရောနွားပါဘုန်းဘုန်းလဲသေဦးတော့။ အမေကြီးကားမှာ ထွန်စက်ကြီးမောင်းပြ သွားသလောက်တော့ မြန်ကောင်းသက်သာမဖြစ်ဘူး။ ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့ နည်းပညာဆိုတာတွေက သည်ကလူတွေ ပြတ်ကျန်ခဲ့တာ ရာစုနှစ်လောက်မကဘူး။ ဟိုနိုင်ငံက ပိုက်ဆံကလေး လှမ်းလှူနေသလောက်ကဖြင့် ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်။
သည်လထဲရင်နာစရာ ကာတွန်းကလေး တစ်ပုဒ် ဖတ်မိတယ်။ ကလေးတွေကို မာလတီမီဒီယာရွမ်းကြီးမှာ သင်ပေးနေတာ“သားတို့ သမီးတို့ရေ။ သည်ဘက်က ကွန်ပြူတာ နှစ်လုံးနဲ့ဟိုဘက်က ကွန်ပြူတာ လေးလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ကွန်ပြူတာ ဘယ်နှစ်လုံး ရသလဲကွယ်။” တဲ့။ မရယ်နိုင်ပါဘူး။နင်သွားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကြီးဆုံးဆေးရုံကြီးပေါ်မှာတောင်မှ ကျွန်ပြူတာဆိုတာ စာစီစာရိုက်ဖို့၊ပါဝါပွိုင့်တင်၊ ပရင့်ထုတ်ဖို့ထက် ဘာတစ်ခုမှ ပိုပြီး အသုံးပြုလို့မရဘူး။ လူနာကို ဆေးဝယ်ခိုင်းရင်စာရွက်ပိုင်းကလေးနဲ့ ရေးရေးလွှတ်ရတာ ရှင်ဘုရင့်ယောက်ဖ နန်းတော်အောက် ခွေးကြည့်ခိုင်းတာထက်ခေါက်ရေများဦးမယ်။ သွေးပုလင်း သွားတောင်းပါဦး။ ရော့ သွေးဖောက်ပြီးပြီ။ ပြန်ပို့ချေပါဦး။အဖြေဘယ်တော့ ရမတဲ့လဲ။ သွားရွေးပါဦး။ ဆိုတာတွေက ပလူကိုပျံနေတာပဲ။ အဲဒါတွေကို ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့မှာလိုက်၊ တင်လိုက်၊ ငွေချေလိုက်၊ အဖြေဖတ်လိုက် လုပ်လို့ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ထုံးသုတ်တာခြုံခုတ်တာလောက်ကို အဆင့်မြှင့်တင်တယ် ပြောပြောနေရတာ ရှက်စရာကြီး။
ဒီအလုပ်တွေကိုနိုင်ငံခြားမှာ လုပ်လာတဲ့သူတွေကျတော့ ဘယ်နေရာ ဘာလုပ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုမြန်တယ် မှန်တယ်အကုန်သိတာဗျ။ သူတို့ဆီက အဲသည်အသိကလေးတွေ မျှပေးလိုက်ဖို့ပဲ လိုတာ။ ကျုပ်တော့ လာမမျှနဲ့ဗျာ။ပါဝါမရှိဘူး။ အထက်က ဘိုးတော်ဘတော်တွေသာ “သည်မှာကြည့် တစ်လကိုးသီတင်း ထွန်းချင်တိုင်းထွန်းမကုန်ဘူးတော့။” လို့ ပြပေးလိုက်စမ်းပါ။ သည်တော့မှပဲ တို့ရွာသားတွေ အားလုံး ဓူဝံအင်ဗာတာသုံးရတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ခရက်ဒစ်ကဒ်သုံးလို့ရတဲ့ ဘဏ်စံနစ် မရှိဘူး။ ရုံးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ ကွန်ပြူတာ ကွန်ယက်စံနစ် မရှိဘူး။ နိုင်ငံခြားငွေလက်ထဲမိရင် ထောင်ချမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကြီးဖျက်သိမ်းတယ် မကြားမိသေးဘူး။ ဖက်အီးစီတွေ ခေါက်ရိုးထင်ရင် မယူဘူး။ ခဲခြစ်ရာပါရင်မယူဘူး။ ဟောင်းသလိုလိုလေး နွမ်းချင်ရင် မယူဘူး။ ဒေါ်လာအကြွေလာ မပေးနဲ့ မယူဘူး။ ပိုက်ဆံကိုဆာလာအိတ်နဲ့ထမ်းပြီး ကားနဲ့တိုက်သယ် ငွေချေရတဲ့နိုင်ငံ။ အဲဒါတွေ အားလုံး ကျုပ်တို့ကတော့ဘာမှ လုပ်တတ်ဘူး။ နိုင်နံဂျားဘျန်တွေမှ နားလည်မယ့်အရာတွေ။ ကူကြကယ်ကြပါဦး။ Capacityဆိုတဲ့အထဲမှာ အဲသဟာတွေ ပါသဗျား။
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြည့်ဆည်းယူရမယ့် အရာလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အသိဥာဏ်ပါ။ သနားစရာကောင်းလောက်အောင်ကို နုံနဲ့ပါတယ်။ ပညာသင်တာချင်းတူရင်တောင် ရန်ကုန်နဲ့နယ်နဲ့ မတူဘူး။တက္ကသိုလ်တွေ မှိုလိုပေါက်လာလို့ ပညာတတ်ကြီးတွေ တစ်နှစ်ဘယ်လောက်ထွက်နေတယ် လာမပြောနဲ့။ကိုယ်တွေ့ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ထောက်ပြမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေကသာ နယ်ကိုလွှတ်ရင် တီဆားနဲ့တို့သလို တွန့်လိန်တွန့်လိန်နဲ့ အလုပ်ထွက်ကုန်တာ။ တက္ကသိုလ်က ကျူတာဆရာလေးတွေဆိုနယ်ကို အလွှတ်ခံရဖို့ ငွေတွေ နင့်နေအောင် ပေးရတယ်။ အထူးသဖြင့် အဝေးသင်တွေ အတန်းရှိတဲ့အချိန်ဆို သင်္ကြန်တွင်း ချောင်းသာကဟိုတယ်တွေလိုပဲ။ နယ်ပြောင်းကြေးက မြင့်လာတယ်။ ဟိုမှာအနီးကပ်ကျူရှင်ပေးရမှာကိုး။ ခေတ်တွေ ပြောင်းသွားပုံများနှယ်။ ကျူရှင်ဆိုတာ အသင်အပြကောင်းမှလို့ ထင်မနေနဲ့တော့။ သင်ချင်သင် မသင်ချင်နေ။ တက်တက် မတက်တက်၊ ကျူရှင်အပ်ပြီး ခုံနံပတ်ပေးထားလိုက်ပွဲသိမ်းပြီ။ ဒါကြောင့်သူတို့တတွေ နယ်ကောလိပ် ထွက်တယ်ဆိုတာ မိုင်းရှူး၊ ဖားကန့်တက်သလိုပဲလို့ဆိုကြတယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိနေတဲ့ Capacity ပါပဲ။
အမှန်တရားဟာနားခါးတယ် မဟုတ်လား။ “The truth is ugly.” တဲ့။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဘွဲ့ရဘွဲ့ရ။ ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ တောနဲ့မတန်တော့ဘူး။ မြို့တက်ပြီး ရုန်းကန်ကြရတယ်။ အစွမ်းအစရှိရင်နိုင်ငံခြားအထိထွက်ပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ တောမှာကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ အလုပ်ကြမ်းကို နေမမြင်လမမြင်လုပ်ချင်လုပ်၊ မလုပ်ရင်လည်း ဘောလုံးပွဲ။ ချဲထီ၊ ဘီယာ၊ အရက် နဲ့ မကင်းသူတွေချည့် ဖြစ်ကုန်တယ်။အခု ပြသနာတွေ ဖြစ်တော့ အဲသည်နေရာတွေမှာ ဖြစ်လာတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေတစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ လူယုတ်မာကြီးတွေ မြှောက်ပေးတိုင်း အကုန်လုပ်ကြတာပေါ့။ သတင်းစာဂျာနယ် မရှိတဲ့တောကလူတွေကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့လေ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အင်တာနက်ပေါ်ရောက်ပြီးဖေ့စ်ဘုတ်သုံးပါတယ် ဆိုတဲ့သူတွေမှာတောင် သူများမလှည့်ရပဲ ချာလပတ်ရမ်းနေတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးဘူးလား။ဒီအတွက်ကြောင့် အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကို ကယ်တင်ရန် သင့်ဦးနှောက်နှင့် အတွေးအခေါ်များကိုလည်းလိုအပ်ပါသည် လို့ ပြောချင်တာ။
အမေကျော်ပြီးဒွေးတော်လွမ်းနေလိုက်တာ။ ပြည့်အင်အားသည် ပြည်ကြီးမှာသာ ရှိသည်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတောင်အားနာမိပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စံနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးတွေမရှိဘူး ထင်လို့လား။ ရှိတယ်။ ရှိတယ်။ သိပ်ရှိတာပေါ့။ သေသေချာချာကို လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ထားတယ်။လိုအပ်ရင် နိုင်ငံခြားကိုလည်း လွှတ်ပြီး ပညာတွေ သင်ခိုင်းတယ်။ ဟိုအထဲမှာလေ။ သို့ပါသော်ငြားအနာဂတ်အတွက် အားကိုးလောက်ဖွယ်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခု ချို့တဲ့နေရှာတယ်။ အမိန့်နာခံမှုမှာအားနည်းသွားမစိုးလို့ တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုဘက်ကို
လေ့ကျင့်မပေးဘူး။ လူဆိုတာ ပညာတတ်ရင်ကန်တန်တန် နဲ့ရယ်ဗျ။ ဘယ်လို ဘာကြောင့် ဘယ်သူ့အတွက် သိပ်သိချင်လာမယ်။ အဲသလိုရေဗူးအပေါက်နဲ့ဘယ်လိုရေသယ်မလဲ။ ဖောက်ထွင်းတွေးတော တတ်တဲ့သူကလည်း သူတို့အသိုင်းအ၀န်းမှာ အံမ၀င်ခွင်မကျတော့ဘူး။၀န်ထမ်းလောကမှာ ကြီးစိုးတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကြီးတွေကို ချေမှုန်းပစ်နိုင်ရင်၊ သူတို့လောကမှာအဓိကကျတဲ့ ဆရာမွေးတပည့်မွေးစံနစ်ကြီးကို ဖျောက်ပစ်လိုက်နိုင်ရင် ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ဘယ်သူကမှ လိုက်လို့မှီစရာ မရှိဘူး။
Capacity Building အတွက် ပြည်သူတွေကိုချည့် အပြစ်တွေဖို့ပြီး တောင်းဆိုနေလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး။အစိုးရမင်းများဘက်က ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာတွေလည်း ရှိသေးသပေါ့။ များများ မတောင်းဆိုပါဘူး။စိန်တွေလည်း မပေးပါနဲ့။ ရွှေတွေလည်း မပေးပါနဲ့။ စားမယ့်ထမင်းလုပ်လည်း ခွဲကျွေးဖို့မလိုပါဘူး။ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ စေတနာစိတ်ထားကလေး တစ်ခုပဲ ထားပေးပါ။ အလုံးလည်းမလျော့စေရပါဘူး။ အရပ်လည်း မလျော့စေရပါဘူး။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သည်အလုပ်တွေကိ လုပ်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်နစ်နာရချည်ရဲ့ လို့ အသိတရားလေး တစ်ချက်တစ်ချက် ကပ်သွားရင်၊ ငါ့ဘက်က သည်မာနကလေးလျော့ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြည်သူတွေ စိတ်ဝမ်းချမ်းသာသွားရချည်ရဲ့ လို့ ပီတိစိတ်ကလေး မွေးနိုင်ရင်၊မျက်မှောက်၊ နောင်ခါ ဘယ်မှာမဆို အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းမယ်။ မိမိ၊ သူတပါး၊ တိုင်းသူပြည်သားများလည်းစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့မယ် မဟုတ်ဘူးလား။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ မာရ်နတ်မင်းကို အောင်တော်မူတော့ဥဒါန်းကျူးရင့်တော် မမူပါဘူး။ ကိုယ်တော့်ထံမှာ သံသရာအဆက်ဆက်က တွယ်ငြိလိုက်ပါလာတဲ့ တဏှာလက်သမားကိုအပြီးတိုင် အောင်မြင်ပြီး သစ္စာလေးပါး အမှန်တရားကို ထိုးထွင်း သိမြင်တော်မူမှသာ အောင်သံကြွေးကြော်နတ်လူသာဓုခေါ်ခဲ့ပါသတဲ့။ ရန်သူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ အမြဲ ကဏ္ဍကောစဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံလုပ်နေသူကိုချည့်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်တွင်းမှာ ကိန်းအောင်းနေပြီး ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ နှစ်ဖြာသောဆင်းရဲကိုဖြစ်စေမယ့် မကောင်းသော မထားအပ်သော အကုသိုလ် စိတ်တွေဟာလည်း ရန်သူစစ်စစ်ကြီးပဲ မဟုတ်ဘူးလား။သဗ္ဗေသတ္တာ အဝေရာ ဟောတုပါဗျား။
05/24/13--00:22: " တပ်မတော်…..ဘာလဲ….ဘယ်လဲ... - ၅ "
" တပ်မတော်…..ဘာလဲ….ဘယ်လဲ... - ၅ "
၁၅.၉.၈၈ရက်နေ့နံနက် ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ …..
တပ်မတော်ရဲ့ ရှေ့ တန်းခံစစ်စခန်း ဖြစ်တဲ့ …..
ကစို စခန်းပေါ်က ဘန်ကာ တစ်လုံးဟာ ….
ရန်သူ့ လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်ပြီး မွမွကြေ သွားခဲ့ ပါတယ်…….
ဒါဟာ မဲသဝေါ ဒေသ တိုက်ပွဲစဉ်ကြီးရဲ့…..
တပ်မတော် ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျောက် …….
ခါးသီးလှတဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုကို ......
ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ( ၇ ) တစ်ခုလုံး ဟာ …..
မဒတ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု) ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့…….
မဲသဝေါဒေသ တစ်ခုလုံးကို ……
အင်အား ၂၀၀၀ ကျော်နဲ့ …..
စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ မှာတော့ …….
တပ်မတော်ဟာ မဲသဝေါဒေသ ရဲ့ကာကင်းကုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့…..
အံ့ကျော်ကုန်းစခန်း ၊ပွိုင့် ၁၇၇၈ စခန်း တို့ ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး……
မနေးမနောင်းမှာပဲ ကဆာနလီတောင်ကြောနဲ့…….
မဲသဝေါ ပင်မစခန်းတို့ ကပါ ဆုတ်ခွာရပါတော့တယ်…….။
၁၉၈၈ ခုနှစ်ထိ ……
ခြေမြန်တပ်မ (၈) မပဲရှိသေးတဲ့ တပ်မတော်အဖို့ ကတော့ ……
တစ်ခြား တိုက်ခိုက်ရေး တပ်မတွေကို ……
အဲဒေသကို စစ်ကူလွှတ်နိူင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး…….
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ …….
တပ်မတွေဟာ နယ်မြေခံ မြို့ စောင့်တပ်တွေနဲ့ မနိူင်တော့ပဲ ……
ဆူပူမှူတွေ အပြင်းအထန်ဖြစ်နေတဲ့ ……
မြို့ ကြီး အတော်များများကို ၀င်ရောက်တာဝန်ယူနေရပြီး …..
အရှေ့ မြောက် မိုင်းယန်း ဒေသ နဲ့ကချင်ပြည်နယ် ဒေါ့ဖုန်းယန် တို့ မှာလဲ ….
ဗကပ နဲ့ကေအိုင်အေတို့ က တစ်ပြိုင်တည်း ထိုးစစ်ဆင်နွှဲတာကို …….
အပြင်းအထန် ခုခံ နေရ ပြီဖြစ်ပါတယ်…။
၁၉၈၈ခု စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ …..
ဗကပ ပန်ဆန်းဗဟို ရဲ့ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမူနဲ့ချီတက်လာတဲ့……
လက်ရွေးစင်တပ်ရင်း ၁၃ ရင်းဟာ …….
မိုင်းယန်းဒေသမှာ တပ်စွဲထားတဲ့ …….
တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော် ခြေလျင်တပ်ရင်း တစ်ရင်းကို …..
နယ်မြေတွင်းက စစ်ကူ စစ်ကြောင်းတွေ မလာနိူင်အောင်……
အဖက်ဖက်က ပိတ်ဆို့ ဖြတ်တောက်ပြီးမှ …….
အပိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…….
ဒီတိုက်ပွဲ ဟာ တိုက်ပွဲကြီး ၁၄ ကြိမ် တိုက်ပွဲငယ် ၂၃ ကြိမ် …..
အနီးကပ် လှံစွပ်ထိုးတိုက်ပွဲ အကြိမ် ၃၀ ထိ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့် …….
အဲဒီ တပ်မတော် ခြေလျင်တပ်ရင်းဟာ ……
စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို စောင့်ဆိုင်းရင်း ……..
(၈) ရက်လုံးလုံး မဆုတ်ခွာပဲ အသေခံ ခုခံနေတာကြောင့် …….
ဗကပ တို့ ရဲ့ မိုင်းယန်းကနေ ......
မူဆယ် နမ့်ခမ်း ကြူကုတ် ထိ သိမ်းပိုက်မယ့် စစ်ရေးစီမံချက်ဟာ …….
စစ်ကူ စစ်ကြောင်းတွေ ရောက်လာချိန် မှာတော့ ……
အဲဒီ တပ်ရင်းဟာ ......
တပ်ရင်းမှူး နဲ့ အရာရှိ လေးဦး အပါအ၀င် ……
စစ်သည် ၄၇ ဦး ရဲ့အလောင်းတွေ ပြန့် ကျဲနေပြီး ……
၁၂၄ ဦး ကိုတော့ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်နဲ့ …….
သူတို့ ကတုတ်ကျင်းတွေထဲမှာ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်……..
သူတို့ စခန်းပေါ်က မြန်မာနိူင်ငံ အလံကတော့ ......
မိုင်းယန်းတိုက်ပွဲကို အနိူင်တိုက်လိုက်နိူင်တဲ့တပ်မတော်ဟာ……
မဲသဝေါ ဒေသ တိုက်ပွဲ တွေရဲ့ အစ မှာတော့ ……
အကြီးအကျယ် အထိနာခဲ့ ပါတယ်…..
တိုက်ပွဲကာလ သုံးလကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ….
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ မှာတော့ …….
ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မဲသဝေါ ပင်မစခန်းကြီးကို ပြန်သိမ်းပိုက်နိူင်ခဲ့ပေမယ့်……
တိုက်ပွဲကြီး ၈၅ ကြိမ် တိုက်ပွဲငယ်၁၄၅ ကြိမ် နဲ့……
အနီးကပ် လှံစွပ်ထိုးတိုက်ပွဲ ၄၇ ကြိမ် ဆင်နွှဲခဲ့ရပြီး ……
တပ်မတော်ဘက်က အရာရှိ ၁၂နှစ်ဦး အပါအ၀င် ……
အရာရှိ ၄၉ ဦး အပါအ၀င် ၉၂၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်…..
ဒါဟာ တပ်မတော် အတွက်တော့ ………
အမြဲတန်း သတိရနေတော့မယ့် …….
ကိန်းဂဏန်း အရေအတွက် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်……..။
မျက်မှောက်ခေတ် နိူင်ငံရေးသမားအတော်များများဟာ ………
၈၈ အရေးအခင်းကြီးကို …….
ဒီမိုကရေစီ အတွက် ICON တစ်ခုအဖြစ် …..
သတ်မှတ် ဂုဏ်ယူခဲ့ ကြပြီး……
အရေးအခင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ကွက်ပြီးစဉ်းစားလေ့ရှိပေမယ့် …….
တပ်မတော် အနေနဲ့ ကတော့ …….
၈၈ အရေးအခင်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့……..
တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မတွေကို မြို့ ကြီးတွေမှာ
လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ စေလွှတ်လိုက်ချိန်မှာ……
အချိန်ကိုက် ၀င်တိုက်ခံရတဲ့ မိုင်းယန်း ၊ မဲသဝေါ တိုက်ပွဲစဉ်တွေ …….
မိုးညှင်းမြို့ ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ တဲ့ ကေအိုင်အေ အင်အား၄၀၀…..
ဒေါ့ဖုန်းယန် တိုက်ပွဲက ကေအိုင်အေ အင်အား ၉၀၀ကျော်…….
ဒါတွေကိုပဲ တစ်စုတစ်စည်းတည်းပြေးမြင်လေ့ရှိပြီး ……
တပ်မတော်ကို ချေမှူန်းဖို့…..
အချိန်ကိုက် ဟန်ချက်ညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ တဲ့ ….
စစ်ရေး နိူင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ကြီးလို့ ပဲ ယူဆလေ့ရှိပါတယ်…....။
ဒါဟာ လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့…….
နိူင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ တပ်မတော် ကြားက ......
အမြင်မတူညီမှူတွေရဲ့အဓိက ကွဲလဲချက်လဲ ဖြစ်နိူင်ပြီး ……..
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး
အာဏာကို ချက်ချင်းပြန်မလွှဲတော့ပဲ …….
တပ်မတော်ရဲ့ စစ်ရေးအင်အားကို …….
ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို ......
ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ် တစ်ခုလို့ လဲ ....
( အပိုင်း ၆ နောက်ရက်ဆက်တင်ပါမည် )
05/24/13--01:17: ရှင်သန်နေဆဲ အတွေးပုံရိပ်များ
by NayHtet HtetAung (Notes) on Friday, May 24, 2013 at 3:05pm
ရှင်သန်နေဆဲ အတွေးပုံရိပ်များ ရာမဇာတ်တော်ကြီးဟာ အန္ဒိယနှင့် အရှေ့ တောင်အာရှမှာ အလွန်ကျော်ကြားတဲ့ ဂန္တဝင်ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီး ပါ။အဲဒီဇာတ်လမ်း ရှည်ကြီးကိုဖတ်မိချိန်ကစပြီး ဒီနေ့အထိမတူညီနိုင်တဲ့ အတွေးတွေကို အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီး တွေးတော ခံစားမိပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာဖတ်ပြီး ကိုယ်တွေးချင်သလိုတွေးတောတာဟာ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ထိုင်တည်း တွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေးမျိုးမဟုတ်ဘဲ အသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲလာတဲ့အတွေးနှင့် အမြင်များဖြစ်နေ တော့ နည်းနည်း လေးပြောပြချင်မိပါတယ်။
ကျွန်မစဉ်းစားသလို စဉ်းစားပေးမယ့် လူတွေလည်းရှိသလို လက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေ လည်း ရှိကြမှာပါပဲ။ ဂန္တဝင်ဇာတ်လမ်းကြီးကို စဖတ်မိကတည်းက ဒီနေ့အထိ ဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်ကွက်နှင့် ဇာတ်ကောင်တွေဟာ ကျွန်မဘဝရဲ့ အတွေးကမ္ဘာနှင့် စဉ်းစားခန်းတွေမှာ မကြာခဏဝင်ရောက်စိုးမိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်မမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကပေါ့...သစ်ရွက်လှုပ်ရင်တောင် ရယ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အရွယ်မှာ အချစ် အကြောင်းကိုလည်း စဉ်းစားခန်းဝင်တတ်နေပါပြီ။ အဲဒီတုန်းက..ရာမမင်းသားနှင့် မယ်သီတာရဲ့ချစ်ခြင်းကို ခွဲဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဒဿဂီရိကို အမုန်းကြီးမုန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။မယ်သီတာနှင့်ရာမတို့ ဇာတ်သိမ်းမှာ ပေါင်းဖက်ပြီး ဒသဂီရိအပေါ် အောင်ပွဲဆင်နိုင်မှန်း သိနေပေမယ့်လည်း ဒဿဂီရိဝင်နှောင့်ယှက်တဲ့အခန်းတွေဖတ်နေရချိန်မှာ...ရာမနှင့်သူ့ဘက်တော်သားတွေ ရှုံးမှာကိုပဲ စိုးရိမ်နေမိ ပါတယ်။ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ မယ်သီတာက အပျိုစင်စစ်ကြောင်း သစ္စာဆိုပြီး မီးပုံကြီးထဲကို ဆင်းပြတော့ မီးပုံကြီးကကြာပွင့်ကြီး ဖြစ်သွားတာကိုဖတ်ပြီး ကြည်နူးစွာခံစားမိပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာ.. အထူးသဖြင့်မယ်သီတာရဲ့ အချစ်ကို သိပ်ပြီးလေးစား အားကျမိခဲ့ပါတယ်။ ၁၇နှစ်ကျော်လာတဲ့ ဒီဘက်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်က အတွေးတွေဟာ ပြောင်းလဲကုန် ကြပါတယ်။ဒဿဂီရိဟာထင်သလောက်ဆိုးရဲ့ လား...?သူ့ ရဲ့ အသက်၊စည်းစိမ်၊ထီးနန်း၊ဆွေမျိုးမိသားစု၊တိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကို ပုံအောအရှုံးခံပြီး မယ်သီတာကိုချစ်တာဟာ တန်ရဲ့လား....?ဒဿရဲ့အချစ်ကပဲ ပိုပြီးတော့များ တန်ဖိုးရှိနေသလား...? ဒဿဂီရိဟာ သိပ်ကိုသနားစရာကောင်းနေပြီလား...?ရာမကရော မယ်သီတာကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား...? ဒဿဂီရိလောက်တောင်ချစ်ရဲ့ လား...? စတဲ့မေးခွန်းအတွေးတွေဟာ ခေါင်းထဲကိုအစီအရီပြေးပြီးဝင်လာကြပါတယ်။ မယ်သီတာမှမဟုတ်ဘူး ကျွန်မဟာလည်းအပျိုစင်အစစ်တစ်ယောက်မို့လို့ ဒီကိစ္စအမှန်ကို သစ္စာဆိုပြီး ဧ၇ာမမီးပုံကြီးထဲကို ခုန်ချလိုက်ရင်ရော တကယ်မီးမလောင်ဘဲ နေပါ့မလားးး????? ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေက လူကိုရီဝေမူးမိုက်စွာစဉ်းစား တတ်လာအောင်ထိ တွန်းအားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ဝါးမြိုပစ်မယ့် ဧရာမမီးပုံကြီးထဲကို အရှင်လတ်လတ်ဆင်းသွားရတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ဟာ ကြည့်ကောင်းစရာ ကြည်နူးစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သိမြင်လာပါပြီ။ရာမမင်းသားဟာ မယ်သီတာအပေါ်အချစ်စစ် အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်ရိုးမှန်ရင် ဒီလိုရက်စက်တဲ့ စမ်းသပါမှုမျိုးကြီးကို လုပ်ဖို့မသင့်ဘူးလို့လည်း ထင်လာမိပါတယ် ။ဒါဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အပေါ်ကို အနိုင်ကျင့်မှုသက်သက်ပဲ လို့လည်းယူဆလာမိပါတယ်။ မယ်သီတာဘက်က ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘဲ ဒဿဂီရိက အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားခံရတဲ့ ကိစ္စမှာ မယ်သီတာ အပျိုမစစ်တော့ရင်တောင် ရာမမင်းက ခွင့်လွှတ်သည်းခံပေးသင့်တယ်လို့လည်း ခံစားလာမိပါတယ်။ အသက်၂၀ပိုင်းကိုဝင်လာခါစမှာပဲ အတွေးအမြင်တွေက လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲကုန်ကြပြန်ပါတယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အသိဥာဏ်ပညာကိုရှေ့တန်းမတင်ဘဲ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ထင်ရာစိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ပေဆပ်ရမယ့် တန်ဖိုးဟာ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒဿဂီရိဟာ အချစ်သူရဲကောင်းကြီး များလား????? ရာမမင်းသားဟာ တကယ်ချစ်တတ်သူမှဟုတ်ရဲ့လား???? မယ်သီတာဟာ ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ သနားစရာလေး ပါလား????....စတဲ့အတွေးတွေဟာ လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးးး။ရာမဇာတ်တော်ကြီးထဲက ဘယ်သူ့ရဲ့အချစ်ကိုမှလည်း အားမကျမိ တော့ပါဘူး။ ဘယ်ဇာတ်ကောင်ကိုမှလည်း အထင်မကြီးတော့ပါဘူး။မိဖုရားဖွားစောလို၊ ဖွားဦးဇွန်းတို့လို အသိဥာဏ်ပညာကြီးမား ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ် စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့ သတ္တိရှိပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အမျိုးကောင်း သမီးတွေကိုပဲ အားကျလာမိပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအတွေးတွေ ဝင်လာကတည်းက ကျွန်မဟာ စိတ်ကူယဉ်ပုံရိပ်ထဲက ချစ်သူကိုလည်း မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း ချစ်သူဆိုတာကို မရှာဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲဒီအစား မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ ပိုမိုရှာဖွေလာခဲ့ပါတယ်။လူတွေနဲ့လည်း စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်လာပါတယ်။စာအုပ်တွေနဲ့ပဲ အချိန်တွေကုန်နေရာကနေ လူတွေနဲ့အတူ တကယ့်လက်တွေ့ပြင်ပကမ္ဘာကို လေ့လာစူးစမ်းချင်စိတ်တွေဟာ ထိန်းလို့မရအောင် ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ လောကကြီးအကြောင်းကို ဒီ့ထက်ပို သိအောင်လုပ်ရင်း ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ ဗဟုသုတဆိုတာတွေကို ပိုမိုရှာဖွေလာချင်ခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်မြေမှာ လူမှုရေးအသင်းတွေ၊ အားကစားအသင်းတွေဝင်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒေသန္တရခရီးတွေ သွားလာရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ အခြားလူတွေကို ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်ထွန်းလာအောင် လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကို အမြဲစူးစမ်းလေ့လာခဲ့မိပါတယ်။ ရေတွင်းငယ်ဟာ သမုဒ္ဒရာမဟုတ်မှန်း သိလာတဲ့ ဖားသူငယ်လေးလိုပဲ ခံစားလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မရှေ့မှာ ဒုက္ခရောက်ပြီး ခိုကိုးရာမဲ့နေကြတဲ့ လူတွေကို သတိပြုတတ်လာချိန်မှာ ကူညီချင် ပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုကူညီရမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ကူညီနိုင်တဲ့ အင်အားနဲ့ အခြေအနေလည်း မရှိပါဘူး။အဲဒီလိုအခါတွေမှာ ကျွန်မဟာ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ပဲ လူသားတွေအပေါ် ကူညီနိုင်တဲ့ စောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေရော အရေအတွက်တွေပါ ရှိလာအောင်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတာ ပိုသိလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ စမ်းတဝါးဝါး ကြိုးစားသင်ယူရင်း နောက်၃၊၄၊၅နှစ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်မဟာ ဘယ်လိုတွေတွေးပြီး ဘာတွေလုပ်ကိုင်နေမလဲဆိုတာ မသိနိုင်သေး ပေမယ့် သေချာတာကတော့ ကျွန်မရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သူများတွေကိုပါ အကျိုးပြုစေရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး ရှင်သန်နေထိုင်သွားမယ်ဆိုတာ သေချာနေပါတယ်။(မှတ်ချက်။ ။ အချိန်နဲ့အမျှ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေက ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်းအတွေးများ မပါဝင်သေးပါ။) နေထက်ထက်အောင်
05/24/13--04:57: လူတွေပြောနေတဲ့ အမှန်တရား
မြန်မာတွေ အများစုရဲ့ကြားထဲမှာ "အမှန်တရား" ဆိုတဲ့ စကားသိပ်ပြောကြတယ် ။ အကြောင်းရာတစ်ခုခုဆိုရင် "ဘာကိစ္စအဖြစ်မှန်" ... " ဘာသမိုင်းအမှန်" ...
"ကျွန်တော်တို့ မှာသမိုင်းအမှန်ကိုတော့ ဖော်ထုတ်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်" ၊ "အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်သင့်တယ်" ဆိုတာမျိုးပေါ့ ။
တွေ့လာရတဲ့ အကြောင်းရာတွေမှာ ... ဒဏ္ဍရီပြဇာတ်တွေလိုပဲ ... မင်းသား/မင်းသမီးလေး တွေ ပရိတ်သတ်ရှေ့ ဇာတ်နာအောင် တဖက်ကို လူကြမ်းကြီးတွေ အဖြစ် တန်ပိုတွေ စွတ်တင်ကြတယ် ။ ဒါ မှ မဟုတ် ... မင်းသား/မင်းသမီးလေး ဂုဏ်မြှောက်အောင်လည်း စွတ်ချီးမြှောက်ကြတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ လူ့ဘဝ တစ်ခုချင်းစီ မှာ အားလုံး က မင်းသား / မင်းသမီးတွေချည်းပါပဲ ။
ဇာတ်ထုပ်တစ်ခု ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို ..ရော့ မင်း လူကြမ်းလုပ်လို့ ၊ ရော့ ညည်းက ဇာတ်ရံလုပ်လို့ ပြောလို့ မရဘူး ။ အဲလို One Dimension ... အဆိုပြုချက်တိုင်းကလည်း အရှိတရား ကို ထင်ဟက်နိုင်မှု ဟာ လွန်ရောကျွံ ရော ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပို ပါဘူး ။
အမှန်တရား နဲ့ ပက်သက်ပြီး တော့ အမှန်တရား ဆိုတဲ့ စကားလုံး စ သုံးနှုန်းလာကြတာကိုသွားသတိရမိတယ် ။အမှန်တရား ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်လို့ ခုခေတ် နဲ့ အရင်ခေတ် ၊ အရှေ့တိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်း တွေရဲ့ အယူဆတွေတောင်မှာ တောင် စံ နှုန်းတွေက မတူကြဘူး ။
ဟိုးရောမခေတ်တုန်းကတော့ အမှန်တရားဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား သိမြင်ခြင်းရဲ့ အန္တိမပန်းတိုင် လို့ ဆိုကြတယ် ။
အရစ္စတိုတယ်ကကျတော့ အမှန်တရားဆိုတာ - အရာဝထ္ထု တစ်ခုခု နဲ့ သူရဲ့လှုပ်ရှားသက်ဝင်မှု တို့ အသိအရဆက်နွှယ်နေမှုတဲ့ ။
ဒေးကား (René Descartes) က ကျတော့ အမှန်တရားဆိုတာ - မှန်ကန်သောအသိဥာဏ် ထင်ရှားပြတ်သားမှုအတွက် အရေးကြီးဆုံး သင်္ကေတ တဲ့ ။
မာ့ခ် တို့ ၊ ဂျော့ဘာကလေ(George Berkeley) တို့ ၊ အာဗင်နားရပ်စ် (Richard Avenarius) တို့ က ကျတော့ အမှန်တရားဆိုတာ အများစုရဲ့ သိမြင်နားလည်မှု တွေနဲ့ ထပ်တူညီချင်းရဲ့ ရလာဒ်တဲ့ ။
ယခုခေတ်အနောက်တိုင်း အယူဆမှာကျတော့ အမှန်တရားဆိုတာ - အရှိတရားနဲ့ အချက်လက်တွေ နဲ့ လိုက်ရောညီထွေဖြစ်နေတာကို အမှန် လို့ ခေါ် သတဲ့ ..။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျတော့ ပရမထ္ထသစ္စာနဲ့ သမုတ္တိသစ္စာဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲပြောတယ် ။ နေရာ ၊ ကာလ ၊ ပုဂ္ဂလ္လ တွေ ပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနေတဲ့ အမှန်နဲ့ အချိန်တိုင်း ၊ နေရာတိုင်း ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက် မှန်နေတဲ့ အမှန်ဆိုပြီး ခွဲ ပြောတယ် ။
သစ္စာ လေးပါးရဲ့ အယူအဆ ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့ နေရာကနေ ထွက်ပြီး ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါ
realism အတိုင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ facts တွေကို သူစွဲ ၊ ငါစွဲ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ မပါပဲ အရှိတိုင်းသိလိုက်တာကို သစ္စာ (အမှန်) လို့ ခေါ်ရမယ်ထင်တယ် ။
အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ logic က အစပြု လို့ အမှန် (သို့) အမှန်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာအမှား ဆိုတဲ့ concept ကြီးက ခေတ်စားလာတယ် ။ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ တွေမှာ အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ True-False Logic က အတော်လေး အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ၂၁ ရာစု မှာတိုးတက်ခဲ့ သမျှ နည်းပညာရဲ့ foundation လို့တောင် ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ် ။
အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ အဆိုကို ဖီလာဆန့်ကျင်လာသူကတော့ Fuzzy Logic ရဲ့ဆရာဇာဒါးပေါ့ ။
သူ့ အယူအဆမှာတော့ အမှန်ထဲမှာ အမှားပါနိုင်သလို ၊ အမှားထဲမှာလည်းအမှန်ပါနိုင်သတဲ့ ။
အမှန် အမှချင်း အမှားအမှားချင်းတောင်မှာ ...ပိုမှန်တဲ့ ဟာနဲ့ ပိုမှားတဲ့ဟာ ဆိုပြီးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။
တခါတခါ ကျတော့ ..ကျွန်တော်တွေး ကြည့်မိတယ် ။ ခုခေတ် လူတွေ လည်း ဘီစီ ၅၀၀ ၊ ၆၀၀ လောက်ကလို ပညာတ်စကားလုံး တွေ ကို အဆင်သင့် သုံးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ .. အကျိတ်အနှယ် ဆွေးနွေး ငြင်းခုံပြီးမှ သုံးလို့ရရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်မိတယ် ။
အဲဒါဆိုရင် အမှန်တရား ဆိုတဲ့ ပညတ်အောက်မှာ အလွယ်တကူကာဗာ ယူဖို့ ခက်သွားသလို ၊ အမှားဆိုပြီး သူတပါးပေါ် ယိုးစွပ် မှုတွေလည်း လွယ်လွယ်လုပ်လိုက်ဖို့ ခက်သွားမယ်ထင်တယ် ။
ငါကတော့ မင်းသား ၊ သူကတော့ လူကြမ်း ၊ ငါကတော့ မင်းသမီး ..သူကတော့ ဗီလိန် ဆိုတဲ့ dogmatism အမှန်တရားတွေထက် ... အားလုံး က သရုပ်ဆောင် လို့ ဘုံခံစားမှုတစ်ရပ်ထွက်ပေါ်လာရင် မြန်မာ့လူမှု အသိုင်းဝိုင်း ဟာ အတော်လေးငြိမ်းချမ်းပြီး ၊ အခုထက်ပိုပြီး နေချင်စရာကောင်းသွားမယ်ထင်တယ် ။
05/24/13--05:17: ဝ ပြည်နယ် တောင်းဆိုမှုအပေါ်.
ဝ ပြည်နယ်တောင်းတဲ့အပေါ် အမျိုးမျိုး ပြောနေ ဆိုနေကြတယ်.... တစ်ချို့ကလည်း ဝ ဟာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်..... တစ်ချို့ကလည်း တရုတ်လက်ပါးစေလို့ ဆိုကြတယ်.... တစ်ချို့ကလည်း တရုတ်ကို ကြည့်မရတာနဲ့ ဝ ပါ ဆော်ပစ်ဆိုပီး ပြောနေကြတယ်...... တစ်ချို့ကတော့ ဝ ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ရဲ့ အခြေအနေကို ထောက်ပြပီး အန္တရာယ်ရှိတယ်လို ဆိုလာတယ်..... ဒါပေမယ့် ဝ တွေပြည်နယ် တောင်းတာဟာ အခုမှမဟုတ်ပဲ အတော်အတန်ကြာပီဆိုတာ အများစု မေ့လျော့နေတဲ့ အချက်ပဲ..... ဒီသတင်း ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် KIA နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပီးတော့၊ SSA၊ DKBA နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ လှည့်ရန်တိုက်လို့မရချိန် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်ထွက်ချိန်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေတာကို သတိထားမိတယ်......
သူတို့တွေ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီသတင်းကို အစပျိုးထုတ်လွှင်လာတယ် ဆိုတာကို ထူးပီးမဝေဖန်လိုပေမယ့် ဒီသတင်းအပေါ်မှာစီးမြောရင်း အပြန်အလှန် ဝေဖန်မှုတွေ များလာတယ်...... ဒါပေမယ့် အနှစ်ပါတဲ့ ဝေဖန်မှုက နည်းပါးပီး ထစ်ခနဲရှိ ဒေဝေါကြီး ဒေဝေါကြီးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍန်နဲ့ တရုတ်က တရုတ်က ဆိုတာကို ထည့်သွင်းပြောလာကြတာပဲ အများဆုံးတွေ့ရတယ်..... အခုလက်ရှိ ဝ ကိစ္စဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက် ဝ လူမျိုးတွေ ဘာကြောင့် ပြည်နယ်တောင်းသလဲဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့လူ နည်းတာကို သတိထားမိတယ်.... တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီအစ်ကိုလို သင့်မြတ်နေရင်တော့ တရုတ်ကို သံသယရှိတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်.... တိုင်းရင်းသားချင်းလည်း ကြုံတိုင်း လူမျိုးတုန်း သတ်နေချိန်မှာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိဖို့ ဝ တွေရဲ့ ရပ်တည်မှုကို သေခြာလေ့လာဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်....... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ ဝ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဘာကြောင့် ပြည်နယ်တောင်းသလဲဆိုတာကို သိစေဖို့ ဒီစာကို ရေးလိုက်ပါတယ်......
ဝ ပြည်နယ်ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာ သယံဇာတတွေထွက်တယ်၊ သတ္ထု၊ ရွှေ၊ ရာဘာ အများကြီးပဲ ဒါကို ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း မျက်စိကျတယ်...... ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကလည်း မျက်စိကျခဲ့တယ်..... ခွန်ဆာကို တိုက်ပီး ဝ လူမျိုးတွေရဲ့ သွေးတွေနဲ့ ရင်းယူထားတဲ့ မြေပေါ်မှာ ရာဘာပင်တွေ စိုက်ထားပီး ဖြစ်ထွန်းလာချိန်မှာမှ ယခင် စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင် နောက်ကိုဆုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်တိုက်လု တိုက်ခင် အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်...... ဝ ဒေသရဲ့ ပန်းဆန်းမှာ ရှိတဲ့ လောင်းစကားရုံဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ရှာဖွေထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ လာရောက်ဖြုန်းတီးရာ၊ တရုတ်တွေရဲ့ ငွေတွေ စီးဝင်သွားရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့ တရုတ် အာဏာပိုင်တွေက ပိတ်စေချင်ပေမယ့် အဓိက ဝင်ငွေရလမ်းဖြစ်လို့ ဝ တွေက မပိတ်ပဲ ထားတဲ့အခါမှာ တရုတ်ရဲ့ ဒဏ်ခတ်တာတွေ ခဏခဏ ခံရလေ့ ရှိတယ်....... ဒီအတွက်ကြောင့် ဝ ဟာ တရုတ်ရဲ့ ဒဏ်တွေ နောကျေနေပီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်..... ဝ ဒေသရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုကတော့ အဲ့ဒိဒေသမှာရှိတဲ့ ၂၄ နာရီ မီးရရှိမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြေပြစ်မှု၊ ကြိုးဖုန်း၊ အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု၊ လောင်စာဆီ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု၊ ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှု အစရှိတာတွေနဲ့ ပြန်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်.....
ဝ ကိစ္စဟာ အကိုင်အတွယ် မတတ်ရင်၊ အထိမ်းအသိမ်းမတော်ရင် ရှမ်းပြည်အရင် ပြိုကွဲမယ့် ကိစ္စပါ..... ဝ ကိုပြည်နယ်ပေးရင် ပြည်နယ်အစိုးရ လက်ခံမှာလား မေးစရာရှိလာတယ်...... ကိုယ်တိုင်က တိုင်းရင်သားခြင်း တန်းတူအခွင့်အရေး ကြွေးကျော်နေတဲ့ လူမျိုးကြီး ရှမ်းတွေအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ရဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ ဝ ကို လက်ခံနိုင်မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ...... အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာအများစုဟာလည်း ကိုယ်တိုင်က တိုင်းရင်းသားလွတ်လပ်ခွင့် တောင်းနေပေမယ့် ကိုယ့်အောက်က တိုင်းရင်းသားတွေကိုတော့ ကိုယ့်လက်အောက်ခံလို ထားနေတဲ့အတွက် ပြဿနာဖြစ်နေတာပါ..... ဥပမာအနေနဲ့ KIA ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တိုင်းလိုင် ရှမ်းနီတွေကို တန်းတူမထားလို့ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာမျိုးပါ..... ဗဟိုအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကို လက်ခံချင်တဲ့ ဝ ကို ပြည်နယ်တောင်းတာကို ပြည်နယ်အစိုးရက သဘောထားကြီးဖို့ လိုမယ်လို့ မှတ်ယူတယ်..... အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး ဆိုတာကို ကြွေးကျော်နေသူတွေက ကိုယ့်အောက်က အခြားတိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်တာမျိုးလည်း မဖြစ်ဖို့လိုမယ်.....
ဒီအတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဝ ရဲ့ ပြည်နယ်တောင်းဆိုခြင်းကို ဆက်ဆက်ခါ ဆန့်ကျင်နေကြသူများအပေါ် မေးလိုတာကတော့ ဗဟိုအစိုးရလည်း လက်လှမ်းမမှီ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိတဲ့ ဝ ဟာ ဘာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံ မထူထောင်ပဲ မြန်မာပြည်ကို ဖက်တွယ်နေသလဲ၊ ဘာကြောင့် ဝ ဟာ အင်အားကြီးတဲ့ တရုတ်ဘက်ကို ပါမသွားခဲ့သလဲ၊ အခုအချိန်ထိ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ စောင့်လျှောက်မှုကို တောင်းဆိုနေသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ........ပြည်နယ် မပေးချင်ဘူးဆိုရင်ဖြင့် ဝ ဒေသနဲ့ သူတို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ညှပ်ပူး ညှပ်ပိတ် အခက်အခဲအပေါ် ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ မြင်ပါသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပါပဲ..... အပြုသဘောဆန်စွာ ဆွေးနွေးမည့်သူများကို လက်ကမ်းကြိုလျက်ပါပဲ.......
05/24/13--05:37: စာရေးသူများ နှင့် စာဖတ်သူများ
by Htet Hninse (Notes) on Sunday, May 19, 2013 at 4:18am
ဖေ့ဘုတ်တွင် စာရေးသူအမျိုးမျိုး ရှိကြပါသည်။
တချို့ ကအပျော်အပြက် ရေးတတ်တယ်။
တချိုံ့ ကအပျင်းပြေ သဘောရေးကြတယ်။
တချိုံ့ က အတည်အခန့် ဆန်ဆန်ရေးကြတယ်.။
တချိုံ့ က စိတ်ဖြေရာ ရေးကြတယ်။
တချိုံ့ က တိုင်တည်ရာ ပုံစံမျိုး ရေးတတ်ကြပါတယ်။
မည်သို့ပင် ရေးသားကြစေကာမူ ရေးသားမှုသဘောတွင်
မိမိ၏ အတ္တ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်၊ စေတနာသဘောများ
စာရေးသူများမှာ မိမိစိတ်ကြိုက်သဘော ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်..။
ဒီနေရာတွင် ပြောစရာ အကြောင်းက ရှိလာပါတယ်..။ စာရေးသူများ၏ မျှော်လင့်ချက်ပါ။
တခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ ရေးသားခြင်းများသည် အကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း..
အတည်အခန့် ဆန်ဆန် ရေးသားကြသော စာရေးသူများအတွက် စာဖတ်သူများ၏ နားလည်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ
နှစ်သက်မှု၊ ထောက်ခံအားပေးမှုကို မျှော်လင့်လာတတ်ကြပါတယ်။ အပြန်အလှန်ငြင်းခုံမှုနဲ့ အတူ တဆင့်တက်
စာဖတ်သူများမှာ စာရေးသူများထက် ပိုများလေသောကြောင့် အမျိုးအစားများစွာ စုံလင်လှပါတယ်..
တချိုံ့ က အပျော်ဖတ်များ ရွေးဖတ်တတ်ကြပါတယ်..။
တချိုံ့ က ရသဆန်ဆန် ခံစားမှုစာများ ဖတ်လိုကြတယ်.. (ကဗျာ၊ စာညွန့်၊ ဝတ္ထုဆန်ဆန်)
တချိုံ့ က အတင်းအဖျင်း သတင်းပလင်းများကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်..။
တချိုံ့ က ဘာသာရေး ဆုံးမစာများ သင်ယူလိုကြတယ်..။
တချိုံ့ က စီးပွားရေး သင်ခန်းစာများ ဆည်းပူးချင်ကြတယ်.။
တချိုံ့ က နိုင်ငံရေးအကြောင်းများ နားလည်ချင်ကြတယ်..။
တချိုံ့ က အလှအပနဲ့ ဈေးဝယ်တာကို အားသန်ကြတယ်..။
တချိုံ့ က ရုပ်ရှင်နဲ့ ဂီတ အနုပညာလောကကို မျက်ခြေမပြတ်ချင်ကြဘူး..။
တချိုံ့ က ပညာရပ်ဆန်ဆန် စာပေများ လေ့လာချင်ကြတယ်..။
စာဖတ်သူများတွင် အရွယ်အမျိုးမျိုး၊ အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုး၊ အလုပ်အကိုင် ပညာသင်ကြားမှု အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရည်ရွယ်ရာ ဦးတည်ရာ မတူသော်ငြားလည်း၊ မိမိတို့စိတ်ဝင်စားရာကို မိမိတို့ အသိဥာဏ်ရှိသလောက် ရှာဖွေလေ့ရှိကြပါတယ်..။
မိမိတို့ ကျင်လည်ရာဘဝ၊ အတွေ့အကြုံ၊ ပညာအရည်အချင်း သာမက အလုပ်အကိုင်ပေါ်မူတည်ပြီး နားလည်နိုင်စွမ်းအားသည်လည်း အထိုက်အလျောက် ကွာခြားလာတတ်ကြပါတယ်..။ ဘာသာစကားတူသော်ငြားလည်း အရာအားလုံးကို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ဆိုတာ.. လူအားလုံးအတွက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.။ တချိုံ့ က တဝက်မက နားလည်သော်လည်း အများစုမှာ မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင် ဆက်စပ်ရာကိုသာ နားလည်နိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်....။
စာရေးသူများသည် မိမိတို့ပို့စ်များအား စာဖတ်သူများ LIKE လုပ်လေသောအခါ မိမိတို့ရေးသားသမျှကို နားလည်ပြီး ထောက်ခံအားပေးသည်ဟု လွဲမှားစွာ ယူဆကြလေသည်။ တခြားသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရေးသားသူများအတွက် မထူးခြားနားလှသော်လည်း..အတည်အခန့် ရေးသားသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာပေများနှင့် ဘာသာရေးစာပေများ အတွက်မူ များစွာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်..။
အချို့ သောစာဖတ်သူများသည် လူချင်းခင်မင်မှု စိတ်ဝင်စားမှု သဘောနှင့်သာ LIKE လုပ်ကြပြီး တခါတရံ ပို့စ်ကို တောင် မဖတ်ကြဘဲ သူထက်ငါ ဦးအောင် LIKE လုပ်တတ်ကြတာကို စာရေးသူများ သိသင့် သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်..။
ထိုစာဖတ်သူများထဲမှ တကယ်တမ်း သိချင်သူ တတ်ချင်သူ တချို့တလေသာလျှင် မေးခွန်းထုတ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်.... ၄င်းတို့တွင်လည်း တကယ် တတ်ကျွမ်းသဖြင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသူများ ရှိသကဲ့သို့၊ မသိ မတတ်ကျွမ်းပေမဲ့ နားလည်ချင်လို့ တတ်ကျွမ်းချင်လို့ မေးမြန်းသူများ ရှိနိုင်လေသောကြောင့်.. တခါတရံ မေးခွန်းဦးတည်ချက် လွဲတတ်သည်များအား စာရေးသူများ သည်းခံနားလည်ပေးသင့်ပါတယ်..။
တချို့သော စာရေးသူများအနေနှင့် မိမိအား ပညာစမ်းလေသလား၊ မိမိ ပညာမာနကို ထိခိုက်သည်ဟူသော ထင်မြင်ယူဆချက်များသည် စာရေးသူနှင့် စာဖတ်သူများအကြား ကြီးမားသော နားလည်မှု လွဲချော်မှုပင် ဖြစ်နေပါသည်။
ထို့အတူ စာဖတ်သူများဖက်မှလည်း.. အမှန်တကယ် ရိုးသားမှုရှိစွာနှင့် စာရေးသူအား ထိခိုက်မှု ရှိစေချင်သော ရည်ရွယ်ချက်မျိုးမပါဘဲ၊ မနာလို ဝန်တိုမှုကင်းစွာ မိမိသိချင်သည်များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ.. ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲသူများ၏ အတ္တ ၊ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်လျက် . အနှစ်သာရ အမျိုးမျိုး ကွာခြားနိုင်သော်လည်း... စာရေးသူ များ နှင့် စာဖတ်သူများသည် ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှိ ပုံစံမျိုးနှင့်သာ အစဉ်အမြဲ ဆက်ဆံနေရမည်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။။။။။။။။။
05/24/13--20:17: တန်ဖိုးတက်လာတဲ့ မြန်မာ့ငွေကြေး
by NayHtet HtetAung (Notes) on Monday, September 5, 2011 at 5:34pm
ယနေ့မြန်မာငွေနှင့် ဒေါ်လာလဲလှယ်ရာမှာ မြန်မာငွေတန်ဖိုး တရိပ်ရိပ် တက်လာနေပါသည်။ မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်လာပေမယ့် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေဘာလို့မကျတာလဲလို့မေးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမား တွေက ပြောကြပါတယ်။ ဗမာငွေတက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒေါ်လာဈေးကျတာတဲ့။အဲဒီအဖြေဟာမှန်ပါသလား။ မှန်သည်ဟုယူဆလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဒေါ်လာလို အင်အားကြီးတဲ့ ငွေမာတွေတောင်တန်ဖိုးကျတဲ့အချိန်မှာ ဗမာငွေက ဘာလို့ မကျဘဲနေတာလဲဆိုရင်ရော အဖြေကဘာလဲ။ ဗမာငွေတန်ဖိုး တက်နေလို့သာတန်ဖိုးကျမသွားတာ ဆိုတဲ့ အဖြေပဲ ဖြစ်လာရပါတယ်။ ထပ်ပြီးသုံးသပ်စရာတခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
ယခင်က ဒေါ်လာဈေးနှင့်ယွမ်ဈေးများတက်တယ်လို့ ပြောကြတုန်းကရော .... အဲဒီငွေကြေးတွေက တက်တာလား၊ ဗမာငွေက ကျတာလား။ မြန်မာငွေနဲ့ ကန်ဒေါ်လာချိတ်ဆက်မှု၊ မြန်မာငွေနဲ့ ယွမ်ငွေချိတ်ဆက်မှုမှာ မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျစဉ်တုန်းက ဒေါ်လာနဲ့ ယွမ်လဲနှုန်း၊ ဒေါ်လာနဲ့ ဘတ်လဲနှုန်း၊ ဒေါ်လာနဲ့ Singapore Dollar လဲနှုန်းတွေဟာ မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေကြတဲံအတွက် မြန်မာငွေကျတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ မြန်မာငွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ လဲရာမှာတင်မကဘဲ ယွန်နဲ့ လဲရာမှာပါ တန်ဖိုးတက်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ လဲလှယ်ရာမှာလည်း တန်ဖိုးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးသမားများ မ၀န်ခံချင်လည်း မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်နေတာဟာထင်ရှားပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်လိုရင်းကို ပြောကြပါစို့။
မြန်မာငွေသည် ဒသမနောက်က အစွန်အဖျားလေးကျသွားခဲ့တာနဲ့ တပြိုင်နက် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေ ဒုန်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ အားရပါးရ ခုန်တက်ခဲ့သလောက် မြန်မာငွေတန်ဖိုး တရိပ်ရိပ်တက်နေသော်လည်း import ကုန်စည်ဈေးများမကျဘဲ တင်းခံနေခြင်း၊ ချပေးတော့လည်း မဖြစ်စလောက် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်နေခြင်း တွေဟာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ importတင်သွင်းလာသော ကုန်သည်ကြီးများနှင့် export ကုန်သည်ကြီးများကလည်း မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်လာသဖြင့် ငြီးငြူနေကြပါသည်။ ဒေါ်လာစားနှင့် FEC စားများကလည်း ညီးတွားနေကြပါသည်။ ဒါဆိုရင်မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်လာတာဟာ တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဟု ယူဆနေကြပါ သလား။
မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျလို့ ကုန်စည်နဲ့ အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ မတန်တဆ ဈေးတွေမြင့်တက်ပြီး ငွေဖောင်းပွမှုတွေဖြစ်စဉ်တုန်းက
ပြင်ပ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လစာတွေ တိုးတက်မှု တစုံတရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ နဂိုလုပ်ခ လစာအနေအထားနဲ့ပဲ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်မှုဒဏ်ကို ခါးစည်းပြီး ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ငွေဖောင်းပွပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်ချိန်မှာ ၀င်ငွေတိုးမလာမှုဒဏ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိသားစု စားဝတ် နေရေးမပြေလည်မှု သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးအသုံးစရိတ်မလုံလောက်မှုတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုတွေအပေါ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစရိတ် မသုံးစွဲနိုင်ကြမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ငိုညည်းသံတွေက ခပ်သဲ့သဲ့ ထွက်လာရှာပါတယ်။
မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်လို့ ကုန်စည်ဈေးတွေ မဖြစ်စလောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့် လူတစ်စုဆီက ပေါ်လာတဲ့ ညည်းတွားသံတွေက ကျယ်လောင်လွန်းလှပါတယ်။ ယခင်တုန်းက စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ငွေဖောင်းပွမှု Inflation Rateနှင့်ပတ်သက်ပြီးငွေတန်ဖိုးကျလည်း ဘာလုပ်ရမှာလည်း၊ ပို့စရာ Exportမှ မရှိတာ၊ အကျိုးမရှိလှပါဘူး။လို့ ရေးခဲ့ပြောခဲ့ကြတဲ့ လူတွေက ခုလိုမြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်ချိန်မှာ လက်ခုပ်တီးပြီး ခပ်ရဲရဲ လေး ကြိုဆိုပေးကြရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာမြန်မာငွေ တန်ဖိုးတက်လို့ ကုန်စည်ဈေးတွေကျသင့်သလောက်မကျတာတွေ၊ ပြည်သူတွေအကျိုးရှိသင့်သလောက်မရှိတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး များများလေး ရေးစေပြောစေချင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ရေရှည် အဆိုးအကောင်းကို ဝေဖန်ထောက်ပြပြီး ရေးပေးကြပါ။ လူတစ်စုရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ခံစားချက်ကို သိပ်ဦးစားပေးပြီး ရေးလွန်းဖော်ပြပေးလွန်းလို့ မသင့်တော်ဘူးထင်ပါတယ်။
ယခင်တစ်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြန်မာငွေ (၁၃၅၀) ကျပ်ခန့်ရှိစဉ်က ဒေါ်လာနဲ့ တွက်ပြီးရောင်းချနေကြတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးက ဒီနေ့ တစ်ဒေါ်လာဈေး (၇၅၀) ကျပ်နီးပါးဖြစ်နေချိန်မှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်) ၄၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ဘာလို့ မကျတာလဲ။ မြတ်တုန်းက အမြတ်ယူပြီး ရှုံးတော့ကျ အရှုံးမခံနိုင်လို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုသာလုပ်နေကြရင် ပီပြင်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ် Market Economy ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ယခုဆိုလျှင် Loreal cosmetic company က တစ်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ (၁၄၀၀) ကျပ်နီးပါးပေါက်ခဲ့စဉ်က ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများကို ယခုအခါမှာ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပြီး ဈေးတင်ရောင်းချခြင်းမျိုးကို ကြိုဆိုရပါမယ်။
မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း (၃)ချက်ရှိပါတယ်။
၁။ Government ကနိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းကြီးကို တည်ငြိမ်စွာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အလားအလာ ကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာခြင်းရဲ့ ရလဒ်ကလည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့တွေ ပိုမိုတွေ့ရှိမှုနှင့် တင်ပို့နိုင်မှုတွေ များပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ နိုင်ငံတော်က ကျင့်သုံးနေတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ Fiscal Policy ပိုင်းမှာContractionary Monetary Policy ဘက်ခြမ်းကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းဆိုတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်ခြင်းဟာ မြန်မာ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်နေသလို သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ခြုံပြီး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်ထွန်းစေပါလိမ့်မယ်။ ငွေတန်ဖိုးကျ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေတက်ပြီး ငွေဖောင်းပွမှုတွေဖြစ်နေတုန်းက ဝေဖန်ခဲ့သူတွေဟာ ခုလို ငွေတန်ဖိုးတက်ချိန်မှာ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ထောက်ခံပေးစေချင်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိအနေအထားဟာ ဆင်တစ်ကောင်လုံးမျက်စေ့ရှေ့ရောက်နေတာကို ဆင်ခြေရာဘယ်မှာလဲ၊ ဆင်ဖြစ်ကြောင်းဘာနဲ့ သက်သေ ပြမှာလဲလို့ ၀ိုင်းပြောနေကြသလိုပါပဲ။ မြန်မာငွေတန်ဖိုးကို ရေရှည်ခိုင်မာအောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည် စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု Economic Development ရအောင်ကြိုးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တစ်ဆုပ်စာငွေကြေးအင်အားကြီးသူ လူတစ်စုရဲ့ စီးပွားဖြောင့်အောင်၊ အခြေအနေကောင်းအောင် ဦးစားပေးကယ်တင်ခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ကြီးထွားလာရုံ Economic Growth လောက်ပဲဖြစ်လာမှာကို သတိပြုရပါမယ်။ မြန်မာငွေ တန်ဖိုးတက်ပြီး ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းခြင်းဟာ လစာနည်း၊ ၀င်ငွေနည်းလူတန်းစားသန်းပေါင်းများစွာကို အလိုအလျောက်လုပ်ခလစာ တိုးပေးနေသကဲ့သလို့ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါ သတိပြုမိကြစေလိုပါတယ်။
နေထက်ထက်အောင် (Mandalay Times Journal)
05/24/13--20:48: ဝါဒဖြန့် မှာလား၊စည်းရုံးဆွဲဆောင်မှာလား။
Peace Man's status.
ဝါဒဖြန့် တယ်ဆိုတာ ရန်သူလို့ သဘောထားသူများအပေါ်တွင်ကျင့်သုံးရသည်။
ပြည်သူလူထုဟူသည် ဥာဏ်ရည်အနိမ့်အမြင့် ၊ဖြက်သန်းခဲ့ရသည့်လူမှုဘဝပါက်ဝန်းကျင်၊
အရေးကြီးသလို စိတ်ရှည်၊သည်းခံမှုများစွာဖြင့်ခံယူချက် ယုံကြည်ချက်များတစ်ထပ်တည်း
အခြေခံပြည်သူလူထုမှစည်းရုံးဆွဲဆောင်လိုသူအပေါ်တွင် ငါတို့ အများနဲ့ အမြင်သဘောထား
မင်းတို့ ကအခြေခံလူတန်းစားမို့ ငါတို့ လောက်မသိပါဘူဆိုသည့်အရေးအသားအပြောအဆို
by Soe Min (Notes) on Friday, May 24, 2013 at 6:00pm
သည်နေ့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဆိုတော့ မြန်မာတွေက ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် လုပ်ကြတဲ့နေ့ပေါ့။ “ပွဲခါညောင်ရေ သွန်းမြဲပေတည့်၊ မြစ်ရေ၀န်းလည် မြိုင်တောဆီက၊ ရွှေပြည်ကိုသာ တ ရှာတော့မိ၊ မိုးရှိရှိလျှင်…” လို့ မဲဇာတောင်ခြေရတု ထဲမှာ ရေးခဲ့တယ်။ မနှစ်ကတုန်းကတော့ ကဆုန်လရဲ့ သစ်သစ်ဆန်းဆန်း လှပုံတွေကို ကြည့်ပြီး သမီးဆီကို အောင့်မေ့တဲ့စိတ်နဲ့ “လကဆုန် နဲ့ မြရဂုံ” ဆိုပြီး ရေးခဲ့သေးတယ်။ ရန်ကုန်က ကဆုန်လကတော့ နေရာကွက်ကျား မီးအနည်းငယ် လာရန်ရာနှုန်းခြောက်ဆယ်ကလွဲလို့ သိပ်လွမ်းလောက်စရာ မရှိပါဘူး။ ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားမှာတော့ မနက်ခင်း ညနေစောင်းတွေမှာ ညောင်ရေသွန်းတဲ့သူတွေနဲ့ စည်တယ်။ နယ်တွေမှာတော့ ညနေဘက်ဆို ရေအိုးလေးတွေရွက်ပြီး အိုးစည်ဗုံမောင်းတွေနဲ့ ရေလောင်းထွက်ကြတယ်။ ထုံးစံကတော့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဆိုရင် မိုးကလေး တဖျောက်နှစ်ဖျောက်ကျလေ့ရှိတာ ပုံမှန်ပဲ။ သည်နှစ်တော့ သမီးကလည်း ငွေ့ငွေ့ကလေးဖျားနေ၊ ကိုယ်ကလည်း မျက်စိနာနေတာနဲ့ သားအဖနှစ်ယောက် အိမ်တွင်းပုန်းနေဖြစ်တယ်။
ကဆုန်လအကြောင်းကို သမီးလေး နားလည်အောင် ဘယ်လိုသရုပ်ဖော်ပြရကောင်းမလဲ လို့ စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ တပေါင်းလလို သာယာလွမ်းမောစရာကောင်းတဲ့လလည်း မဟုတ်ဘူး။ တန်ခူးလလို ပျော်ရွှင်မြူးတူးဖွယ်ရာ နှစ်ဆန်းချိန် အခါသမယလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကဆုန်လကတော့ ဖေတို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထွဋ်အမြတ်ထားရမယ့် လတစ်လလို့ ဆိုရမယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့နေ့ကို ခရစ်စမတ်နေ့အဖြစ် ကျင်းပကြသလိုပဲ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကတော့ တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ ဖွားတော်မူရာ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ။ သုမေဓာ ရှင်ရသေ့ဘ၀က ဘုရားဆုကိုပန်လို့ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်ထံတော်မှာ ဗျာဓိတ်ပန်း ဆင်မြန်းခဲ့ရတာလည်း ကဆုန်လပြည့်၊ ပထမအောင်ခြင်းမင်္ဂလာ ဖြစ်တဲ့ မာရ်နတ်မင်းကို အောင်တော်မူပြီး သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ကို ရတော်မူခဲ့တာလည်း ကဆုန်လပြည့်၊ ကုသိနာရုံပြည်က မလ္လာမင်းတို့ရဲ့ ဥယျာဉ်တော်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့တာဟာလည်း ကဆုန်လပြည့်နေ့ပဲလေ။ ဒါကြောင့် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။
ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ အကောင်းဆုံး တစ်နေ့တာကလေး ရေးဆွဲရမယ်ဆိုရင် မနက်စောစောစီးစီး မင်္ဂလာရှိတဲ့ ဓမ္မတေးသီချင်းလေးတွေ နားထောင်တာနဲ့ စ ရမှာပဲ။ ဒေါ်ကြည်အောင်ကြီးဆိုတဲ့ “ဗောဓိပင် နဲ့ ရွှေပလ္လင်” ဆို ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။ ဘဂ၀ါဇိနအရှင်ဟာ တဏှာရှိသမျှစင်လို့ အပရာဇိတပလ္လင်ကို အောင်တော်မူခြင်း ဖြစ်ပါသတဲ့။ အဲဒါအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဟာ ဘုရားအဖြစ်ကို ရရှိဖို့ ကိုယ့်အတွင်းမှာ ရှိရှိသမျှသော တဏှာတွေကို အရင် နှိမ်နှင်းအောင်မြင်ရတယ်လို့ဆိုလိုတာ။ သုံးလောကထွဋ်ထား မြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်မှပဲ ကိုယ်တွင်းက အတွင်းရန်ကို အရင်နှိမ်နှင်းပြီးမှ အပြင်ရန်ကို ဆက်လက်နှိမ်နှင်းရတယ် လို့ သဘောပေါက်လိုက်ပါလေ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးကလာတဲ့ ဖေတို့ဘိုးဘွားများကတော့ သင်ပုန်းကြီးကုန်တာနဲ့ အဲသည် အတွင်းအောင်ခြင်း အပြင်အောင်ခြင်းတွေကို နှုတ်တိုက်ကျက်မှတ် သင်ကြားခဲ့ရလေသတဲ့။ သမီးလေးတို့ခေတ်မှာတော့ ဒါတွေ မသင်ရတော့ဘူး။ “မနှစ်က ခရစ်စမတ်တုန်းက ကိုယ့်အသည်းလေး ပေးထားတာ နောက်တစ်နေ့တောင်မခံဘူး။ လွှင့်ပစ်လိုက်ပါလေရော။” ဆိုတဲ့ သီချင်းမျိုးကို နားရည်ဝနေကြပြီ။
နောက်ထပ်သီချင်းကောင်းကလေးတွေ ထပ်မိတ်ဆက်ပေးရပါဦးမယ်။ ဒေါ်မေရှင်ရဲ့ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး ဆိုတာ မြန်မာမှန်ရင် မကြားဖူးဘူးလို့ ပြောရတာ ရှက်စရာကောင်းတယ် သမီးရဲ့။ နို့မို့ဆို လူပျက်ကြီးတွေက “အောင်သိန်းဟာ အောင်ငြိမ်းယောက္ခမပါ” လို့ ပြောရင် သမီး ရယ်တတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ စောစောက ဒေါ်ကြည်အောင် သီချင်းထဲမှာလည်း “မာရ်နတ်မင်းမှာ အကြွေးတစ်ထောင် ရှိသည်” လို့ ပြောရင် လူတိုင်း ပွဲကျတယ်။ အင်မတန် မြန်မာရေလည်နေတဲ့ ဘိုတွေတောင် ဒီစကားတွေကိုတော့ နားလည်ဖို့ခက်တယ်။ သမီးက မြန်မာမဟုတ်လား။ နားမထောင်ဖူးဘူးဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်လေဘူး။ နောက်တစ်ပုဒ် ရှိသေးတယ်။ “သဲဖြူ နဲ့ ရာဇမတ်၊ သြော် ကြာယပ် နဲ့ ငှက်ပျောပင်၊ မနောရွှင်လျက် ဇောကကောင်း၊ ဂေါတမအလောင်းတော် နုတော်မူစဉ်အခါ” ဆိုတာ သုမေဓာရှင်ရသေ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းကလေး။ ဒီသီချင်းတွေဟာ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့မှာ အင်မတန်နားထောင်လို့ ကောင်းမယ့် လိုက်ဖက်တဲ့ သီချင်းကလေးတွေဆိုရင် မမှားပါဘူး။ “မြတ်စွာဘုရားဖြင့် ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပြီ။ ဘဂ၀ါခန္ဓာအကြွင်း နံသာထင်းထပ်ပါလို့ မလပ်အောင် ပူဇော်လေသည်။ ပရမေဘုရား၏ အရေအသားတို့သည် ပုလဲဥပမာလို အခဲစုကာ လျှံထိန်ကြွလေပြီ။ သမ္ဗိန္တ အသမ္ဗိန္တ ရှစ်ကျိပ်သော ဓါတ်မွေသရီ ကြွင်းရစ်ခဲ့သည်။” ဆိုတဲ့ သီချင်းကတော့ ကုသိနာရုံ တဲ့။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဖြစ်တော်မူစဉ် ဗုဒ္ဓ၀င်ကို တေးဂီတကလေးတွေနဲ့ ပူဇော်သက္ကာယပြုထားတာလေးတွေမို့ ဆိုရသူရော၊ ကြားရသူပါ မင်္ဂလာလည်းရှိ၊ ဗုဒ္ဓာနုဿတိကုသိုလ် စိတ်ကလေးတွေလည်း ပွားများရတာပေါ့။
ဘုရားဖူးရင်း လိပ်ဥကလေးပါ တူးချင်သူတွေအတွက်လည်း ကဆုန်သီချင်းလေးတွေ ရှိသေးတယ်။ “ရေအိုးကလေး ရွက်လာတယ်။ ဘယ်ကိုသွားမလဲကွဲ့ ခင်ရယ်။” ဆိုတာ ပြည်လှဖေဆိုတဲ့ လကဆုန် တဲ့။ “ပွဲခါညောင်ရေ သွန်းမြဲပေတည့်။ ကြည်ဖြူသဒ္ဒါ” ဆိုတာက မေမြင့်ဆိုတာ။ ဒါကြောင့် ညနေနေအေးလို့ ခြေခင်းလက်ခင်းကလေး သာတဲ့အချိန်ကျရင် ညောင်ရေသွန်းဖို့ ထွက်ကြရဦးမှာ။ ပြောတော့သာ ညောင်ရေသွန်းတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဗောဓိညောင်က ဘယ်ဟာ၊ ပညောင်ပင်က ဘယ်မှာ၊ လင်းလွန်းပင်က ဘယ်နား ကွဲကွဲပြားပြားလည်း သိတာလည်း မဟုတ်ပဲနဲ့။ သူများတွေ လောင်းတဲ့နေရာ ရေအိုးကလေးသွန်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ ဘယ်အပင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေမလောင်းကောင်းတဲ့အပင်တော့ မရှိပါဘူး။ ပူပြင်းတဲ့ဥတုမို့ အရွက်ကလေးတွေ ကြွေနေတဲ့ အပင်သယောင်းကြီးကို ရေချိုရေချမ်းကလေးတွေ လောင်းပေးရတာ ဘာသာရေးအရ ကုသိုလ်ရယုံတင် မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေအောင်လည်း တစ်ခွက်တစ်ဖလား မှတ်မှတ်သားသား ကူညီရာ ရောက်တယ်။ အပင်ဆိုတာက သတ္တ၀ါတွေလို ရေရှိရာ ခြေလှမ်းလို့ရတာမဟုတ်တော့ မိုးမလာသေးခင် ခမျာတွေမယ် ရေဆာနေရှာမှာပေါ့။ သူတို့တတွေ ဝေေ၀ဆာဆာရှိတော့ ကိုယ်တွေလည်း ခိုစရာနားစရာ အရိပ်ရမယ် မဟုတ်လား။
ညောင်ပင်ဆိုတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အထွဋ်အမြတ်ထားလေ့ရှိတဲ့ အပင်ထဲမှာပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ မချိုင်ရဲ မခုတ်ရဲကြဘူး။ ဓါတ်ကြိုးနဲ့မလွတ်ရင်တောင် ကန်တော့ပွဲလေးပေး၊ တောင်းပန်ပြီးမှ ခုတ်ဝံ့တယ်။ အပင်တိုင်းအပင်တိုင်းမှာ ရုက္ခစိုးနတ်တွေ ရှိကြတယ် လို့ ယုံကြည်ထားပေမယ့် ညောင်ပင်က ရုက္ခစိုးကျတော့ သူကြီးခန့်ထားသလား မသိပါဘူး။ ဘိုးဘိုးကြီး လို့ ခေါ်ကြတယ်။ နယ်တွေမှာဆို ညောင်ပင်မှန် နတ်စင်ရှိတာချည့်ပဲ။ နေရာကောင်းမယ်ဆိုရင် သူ့အရိပ်အောက်မှာ ကွမ်းယာဆိုင်၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကလေးတွေပါ ရှိလိမ့်မယ်။ နံမယ်ကလည်း မေးမနေနဲ့ ရွှေညောင်ပင်ချည့်ပဲသာမှတ်။ လူတွေက ကျန်တဲ့အပင်သာ ဂရုမစိုက်ချင်နေမယ်။ ညောင်ပင်ဆိုရင်တော့ အမွှေးတိုင်ကလေး ဖယောင်းတိုင်ကလေးကစ ရှံပန်းထည်အနီစကလေး၊ မြင်းရုပ် ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်ကလေးတွေ ချိတ်လို့ တွေ့ရမယ်။ ရွာထိပ်ကညောင်ပင်မှာ အရက်နဲ့ကြက် ဆက်ထားတာတွေ့ရင် အဲသည်ရွာ သည်ည ဓါးပြတိုက်ကြမလို့ ဆိုတာ သိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ညောင်ပင်လို့ဆိုရင် စတုမဟာရာဇ်နတ်တွေအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာလို့ သတ်မှတ်ထားပုံရတယ်။
ညောင်ပင်ချင်းတူပေမယ့် ဗောဓိညောင်ပင်ကျတော့ မတူဘူး။ တတ်နိုင်သူတွေက အိန္ဒိယက ဘုရားပွင့်တော်မူရာအရပ် မဟာဗောဓိညောင်ပင်ဆီကနေ ကိုင်းကူးမျိုးပွားပြီး ကိုယ့်ဆီက ဘုရားတန်ဆောင်း ကျောင်းကန်ဇရပ်မှာ ရွှေရည်ငွေရည်လောင်းလို့ အမြတ်တနိုးစိုက်ထားတာ။ “လဲ့လဲ့စိမ်းရောင် ဗောဓိညောင်၊ အတောင်တစ်ရာ သာစွလေး။ သာသည့်ညောင်အောက် ပလ္လင်ပေါက်၊ မြောက်ခွင်အရှေ့ယွန်း။” တဲ့။ မဇ္ဇိမအရပ်က မဟာဗောဓိညောင်ပင်ကြီးဟာ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားရဲ့ ဖွားဘက်တော်ကြီး ဖြစ်တာမို့ ကဆုန်လပြည့် မွေးနေ့ရှင်ထဲမှာ သူလည်း ပါတယ်လေ။ အဲသည် မဟာဗောဓိပင်နဲ့ တစ်လံအကွာမှာ မြက်ရှစ်ဆုပ်ကို အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ ကျဲလိုက်တော့မှ ၁၄တောင် အကျယ်ရှိတဲ့ ရွှေပလ္လင်တော်ကြီး ပေါ်လာတာ။ မာရ်နတ်ကတောင် လာလုလို့ မရခဲ့ဘူး။ လင်းလွန်းပင်ကြီးက ဘယ်ကပါလာတာတုန်းဆိုတော့ ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက် သတ္တဌာန ခုနစ်နေ့ ခုနစ်နေရာ စံမြန်းတဲ့အခါ တစ်ခုသော လင်းလွန်းပင်ကြီးအောက်မှာ ခုနစ်ရက် စံမြန်းတော်မူခဲ့တယ်။ အဲသည် လင်းလွန်းပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာပဲ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ တဖုဿ ဘလ္လိက ကုန်သည်ညီနောင်က ပထမဦးဆုံး ဥပသကာအဖြစ်နဲ့ ဆံတော်အမွေကို
လျှောက်ထားတောင်းပန် ကိုးကွယ်ခဲ့တာဟာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးရဲ့ အစပဲ။ ဒါကြောင့် လင်းလွန်းပင်ဆိုတာလည်း ဗုဒ္ဓ၀င်လာ သစ်ပင်ကြီးတစ်မျိုးပါပဲ။
သည်အကြောင်းတွေကို အဖေက ရေရေရာရာသိသလောက် သမီးကျတော့မှ ကြားဖူးနားဝတောင် ရှိအောင် သင်မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် သည်အဖေလောက် တာဝန်မဲ့တဲ့သူ သည်လောကကြီးမှာ နောက်တစ်ယောက် ရှိနိုင်ပါဦးမလား။ ကိုရီးယားကားတွေထဲကလို ပြောရရင် “အပြစ်စိုးရွံ့မိပါတယ်” ပေါ့။ ကိုယ့်တုန်းက ကိုယ်မိဘဘိုးဘွားက အရိုးထဲမှာတောင် စွဲနေအောင် သင်ထားပေးခဲ့တယ်။ အဖေ့အဖေ ဆုံးကာနီးမှာ ဖေတို့သားအဖ အလောင်းအစားတစ်ခု လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားရှိခိုးစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရောင်ခြည်တော်ခြောက်သွယ်ဖွဲ့ ဘုရားရှိခိုးကြီးဟာ စာအုပ်တ၀က်လောက်ထူတယ်။ သိဖူးသမျှထဲမှာ အရှည်ဆုံး ဘုရားရှိခိုးပဲ။ “ဘုန်းတော်အောင်ပန်း ညောင်နန်းမဏ္ဍိုင် ပလ္လင်ဘူမိ ဗောဓိခရိုင် ပြိုင်ဆိုင်ရန်လှေး မာရ်ဘေးခုတ်ချိုင် သစ္စာပန်းဆင်မြန်း ရွှေလက်ကိုင်။” ဆိုတာနဲ့စတယ်။ အလောင်းအစားနဲ့ တစ်ထိုင်တည်းကျက်ပြီး အလွတ်ပြန်ပြလိုက်တဲ့အခါ သူက တအံ့တသြနဲ့ “သည်မှတ်ဥာဏ်နဲ့ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြစ်လောက်ပါတယ်” လို့ ပြောတယ်။ ဆယ့်ခြောက်နှစ်သားတစ်ယောက် ကိုယ့်အဖေကိုယ် ပြန်ကြွားနိုင်တဲ့အရသာ ဆိုတာ သူများတွေ နားလည်ချင်မှနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်မှာ ပြန်တွေးမိနေတာက “ငါနိုင်တယ်။ ငါမှတ်မိတယ်။ ငါကျက်နိုင်တယ်။” ဆိုတာတွေထက် “ငါ နဲ့ ငါ့အဖေ အတူတူ ကုသိုလ်ရသွားတယ်။” ဆိုတာကလေးကို ကြည်နူးမိတယ်။ အဲဒီဘုရားရှိခိုးအရှည်ကြီးဟာ အခုထက်ထိလည်း မှတ်မိနေတယ်။ သေရွာပါအောင်လည်း မှတ်မိသွားမှာ။ ရေစက်ဆိုတာ အဲဒါတွေကို ခေါ်တာပေါ့။ ဖေ နဲ့ သမီး နဲ့ ကြားမှာ အဲသလို ရေစက်တွေ ထုံလာအောင်တော့ အဖေ မလုပ်နိုင်သေးတာ အမှန်ပဲ။ ဖေတို့သားအဖ ဘုရားပေါ်မှာ ပုဆိန်ပေါက်ကြတာတစ်ခုပဲ ကုသိုလ်တူတူရမှာ။
ဒုက္ခပါပဲ။ အဲဒါတွေကို သမီးနားလည်သဘောပေါက်လွယ်အောင် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ သင်ကြားယဉ်ပါးပေးရပါ့။ ဗုဒ္ဓ၀င်ရုပ်စုံကလေးတွေ ကာတွန်းကလေးတွေတော့ သမီးကြိုက်သား။ ဦးဖေသိန်း ရဲ့ ပုံပမာလေးတွေကို ထိုင်တောင် ရှိခိုးချင်မိတယ်။ နို့မို့သာဆိုရင် စွန်းဝူခုန်းတို့ရဲသုံးဖော် ရှီးဖောနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါသွားသလောက်တောင် ထဲထဲဝင်ဝင် သိလိမ့်မယ် မထင်ဘူး။ လက်ခုပ်ကလေးတစ်ခြမ်းနဲ့ အော်မီတော်ဖော်ပဲ လုပ်တတ်လာလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်တုန်းက ဘယ်လိုများ အသင်ခံခဲ့ရပါလိမ့်လို့ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တွေးကြည့်မိတယ်။ ဘယ်သူကမှ တဗျစ်တောက်တောက် ငေါက်ကာငမ်းကာ သင်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးပြင်းလာတဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ အမူအကျင့်တွေက ထုံမွှမ်းလာခဲ့တာ။ မနက်အိပ်ယာနိုးရင် အဘွားက ဘုရားရှိခိုးတယ်။ ပြီးရင် ပရိတ်ခွေတစ်ခွေ ဆုံးအောင်ဖွင့်တာပဲ။ ကိုယ်တွေကလည်း တစ်ခါမှ နားစိုက်ထောင်မနေခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုတလောက လက်ပံတောင်းကဓါတ်ပုံတွေ တွေ့လိုက်တဲ့အခါ အဲသည်စာသားတွေ ခေါင်းထဲက အလိုလိုပြန်ထွက်လာတယ်။ “အသည်းအူနှုတ် ရိုက်ပုတ်ချည်နှောင် ကယောင်ကတမ်း ယောင်ယမ်းငိုကြွေး ပူဆွေးဆူပွက် မနှစ်သက်ဖွယ်သော အိပ်မက်တို့သည်လည်းကောင်း၊ အနှုတ်အဖွဲ အစွဲအလမ်း အကြမ်းအနု ပြုပြုသမျှ မကောင်းသော လုံ့လပယောဂတို့သည်လည်းကောင်း” တဲ့။ လင်းနို့သားငါးရာ ပဋ္ဌာန်းတရားအသံကြားကာမျှနှင့် နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာ အဲတော့မှပဲ ယုံသွားပါတော့တယ်။ ကျက်လည်းကျက်မထားပဲ နားလည်းလည်မထားပဲနဲ့ အဲသည်အသံတွေက နားထဲမှာကျန်နေတုန်းပဲ။ အိမ်မှာနေ့တိုင်းဆွမ်းခံကိုယ်တော် ဆွမ်းလောင်းတယ်။ ဆွမ်းချိုင့်ကို ကိုယ်တိုင်သွားပို့ခိုင်းတယ်။ တရားပွဲသွားရင် အဖော်လိုက်ရတယ်။ ကြာနီကန်ဆရာတော် တရားခွေမှန်သမျှ မနာဖူးတာ မရှိဘူး။ အဲဒါ သူတို့ ကိုယ့်အပေါ် ဘာသာရေးမျိုးစေ့ချတဲ့ ပုံစံပါပဲ။ ကိုယ့်လက်ထက်ကျတော့မှ ကိုယ့်သမီးရှေ့မှာ အိပ်ယာဝင် ပုဆိန်ပေါက် ဘုရားရှိခိုးမပြမိခဲ့ဘူး။ အိမ်မှာဆွမ်းကပ်လို့ ရေစက်ချ တရားနာ အိပ်ယာကထပြီး လာထိုင်ခိုင်းမထားမိဘူး။ ဥပုသ်သီလ ကိုယ်ကတောင် စောင့်မပြခဲ့ဖူးဘူး။ လမ်းထဲမှာ တရားပွဲတွေလာလို့ သမီးက နားဆူတယ်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ အပြင်လိုက်ပို့မိတယ်။ ဒါနဲ့များမှ တစ်နေ့သောအခါ သူယူချင်ရာနဲ့ ယူမယ်လို့ ပြောလာရင်လည်း သူ့အပြစ်ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲ။ ကိုယ့်အပြစ် စစ်စစ်ကြီး။ ကိုယ်က ဘာမှ ပေးမထားတဲ့အတွက် သူကောင်းမယ်ထင်တာကို သူ့ဘာသူယူသွားတာ မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ ကိုယ့်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာ ဘာသာရေးအဆုံးအမ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေကို တလေးတစား လိုက်နာ လက်ခံကျင့်သုံးနေရမယ်။ ကိုယ့်သားသမီးတွေလည်းပဲ အဲသည်အရာတွေနဲ့ ယဉ်ပါးရင်းနှီးနေအောင် အကျွမ်းတ၀င်ထားသင့်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း မသိတာ မရှင်းတာ သေသေချာချာ သဘောပေါက်အောင် ဖတ်ရှုလေ့လာထားရမယ်။ ကလေးတွေက မေးလာမြန်းလာတဲ့အခါမှာလည်း အမှန်အမှား ကွဲကွဲပြားပြား ဂဃနဏ ပြောပြတတ်ရမှာပေါ့။ သူများဘာသာတွေကို လှည့်ပတ်ရန်ရှာနေရုံနဲ့ သာသနာတော်အတွက်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရတာ ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ အမွေဆိုကတည်းက ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိတဲ့အရာတွေကိုသာ ဆက်ခံသူကိုပေးလို့ရတာလေ။ ကိုယ့်ဆီမှာတောင်မရှိတဲ့ ဘာသာရေးအသိအလိမ္မာတွေကို ပေးခဲ့ချင်တယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီနေ့ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့လေ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရော ဗုဒ္ဓ၀င်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်လောက်ထိ ထဲထဲဝင်ဝင် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိသလဲ။ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကိုရော အဲသည်သိထားတာကလေးတွေ ပြောပြဖူးသလား။ မုန္စလိန္ဒာအိုင်မှာ ပြန်လည်ဆုံမယ် ဟောတဲ့ဗေဒင် ဆိုတာ ဘာပြောတာလဲ။ အဇပါလ ဆိတ်ကျောင်းညောင်ပင်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ။ ပါဋလိပုတ် နဲ့ ကောသမ္ဘီ ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာလဲ။ ကာသိတိုင်းက ဘာတွေထွက်လို့ နံမယ်ကြီးတာလဲ။ သေချာပါတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးက အိန္ဒိယမှာ နီပေါမှာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက ရှိသာရှိတယ် မသိကြတော့ဘူး။ ကိုယ်တွေကတော့ မရှိပေမယ့် သိနေသေးတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးလက်ထက် ရောက်တဲ့အခါ သိလည်းသိမှာ ရှိလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုး ထင်ပါရဲ့။ အရင်ဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်၌မှာ ကျန်နေသေးတဲ့ သာသနာပမာဏကို အရင် ထိန်းသိမ်းရစ်ကြပါဦးလေ။
ဗောဓိပင် နဲ့ ရွှေပလ္လင်
05/25/13--05:05: အမျိုးသားရေးစိတ် ရှိကြစေဖို. သတိမလစ်စေချင်
-လွန်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ. ( 22.05.2013 ) နေ.လည် ၂ နာရီ ကျော်လောက်က အင်္ဂလန် Woolwich အရပ်မှာ တာဝန်ချိန်ပြီးဆုံးလို. တပ်ရင်းကို ပြန်လာတဲ့ စစ်သားတယောက်ကို အလာအတွက်လို.ကြွေးကြော်ပြီး လူနှစ်ယောက်က သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု.ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။
သေဆုံးချိန်မှာ စစ်သားဖြစ်သူက Help for Heros ဆိုတဲ့ ယူနီဖောင်း တီရှပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ် ။ အရင်ဆုံး ကားနဲ.အတိုက်ခံရပြီးမှ ခုတ်ထစ်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါ ။
ဒါနဲ.ပတ်သတ်ပြီး မကျေနပ်မှု.အများအပြား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြင် ဒါဟာ အကြီးကျယ်ဆုံးသော စော်ကားမှု.တစ်ခုဖြစ်တယ်လို. အများက သုံးသပ်ကြပါတယ် ။ EDL (English Defence League) အဖွဲ.ခေါင်းဆောင် Tommy Robinson ရဲ့ ပြောဆိုချက် ကို နားထောင်ဖို. မျှဝေထားပါတယ် ။
EDL ဆိုတာ သူ.နိုင်ငံ ၊ သူလူမျိုးကို ကာကွယ်ဖို.ဖွဲ.စည်းထားတဲ့ အဖွဲ.ဖြစ်ပြီး သူကစပြီး ရန်စခြင်း ၊ စော်ကားခြင်း မကြားဖူးပါ ။ သို.သော် သူ.နိုင်ငံ ၊ သူ.လူမျိုးကို ထိလာရင်တော့ တုံ.ပြန်တတ်သည့်အဖွဲ.ဖြစ်ပါသည် ။
အင်္ဂလန်သည် သူကျူးလွန်ခဲ့သော အမှားများအတွက် အမြဲပြန်လည်ပေးဆပ်တတ်ပါသည် ။ ကမ္ဘာစစ်များတွင်းက စစ်ပွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အိန္ဒိယ၊ ဂေါ်ရခါး လူမျိုးများကို ဆွေစဉ်မျိုးဆက်လိုက် ခေါ်ထားကာ နေရာချထားပေးပါသည် ။ ထို.ပြင် အီရန်၊ အီရတ်၊ အာဖဂန်မှ နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူများ ၊ ဒုက္ခသည်များကိုလည်း လက်ခံ ထောက်ပံ့ထားပါသည် ။ အမှန်အကန်များရှိသလို ၊ အလိမ်အညာများလည်း ရှိပါသည် ။ ခြေစုံလက်စုံရှိပါလျှက် လိမ်ညာကာ အထောက်အပံ့တောင်းစားသူများလည်း ရှိပါသည် ။ ထို.အတွက် သူတို.ပြန်ရလိုက်သည်မှာကား အိမ်ရှင်ဖြစ်လျှက် အိမ်ရှင် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာ (၁၁) ရက်နေ.ရောက်တိုင်း စစ်အတွင်းကျ ကျဆုံးသွားသူများအတွက် Armistice Day (or) Poppy Day ကို ကျင်းပလေ့ရှိပါသည် ။ ထိုနေ.မတိုင်ခင် poppy ပန်းပွင့်ရင်ထိုးများကို လူတိုင်းနီးပါး တပ်ဆင်ကြပါသည် ။ မြို.လယ်လူများရာနေရာများတွင်လည်းကောင်း ၊ ဘူတာရုံများတွင်လည်းကောင်း စစ်ပြန် အဖိုးကြီးများ ၊ ကျန်ရစ်သူ ဇနီးများ ၊ တခါတရံ ယူနီဖောင်းဝတ် servicemen လူငယ်များ ကို အလှုခံဗုံးများဖြင့် တွေ.နိုင်ပါသည် ။ ကျမတို.အတွက် သူတို.ဘိုးဘွားများသည် နယ်ချဲ့များ ဖြစ်သော်လည်း သူတို.အတွက် သူရဲကောင်းများပင်ဖြစ်သည် ။ ကျမတို. ကြိုက်သော်ရှိ ၊ မကြိုက်သော်ရှိ တားဆီးပိုင်ခွင့်မရှိပေ ။ သူနိုင်ငံတွင် သူလုပ်ချင်ရာ လုပ်ခွင့်ရှိပေသည် ။ ကျမတို.နိုင်ငံတွင် လာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပေ ။ သို.သော် ထိုလူနည်းစုဟုဆိုသော မွတ်ဆလင်များက ထို poppy များကို မီးရှို.ခြင်း၊ ဘုရင်မကြီး ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီး ၂ မိနစ်ခန်.ငြိမ်သက်အလေးပြုနေစဉ် ပန်းခြံအပြင်မှ ဆန္ဒပြခြင်း ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး စစ်သားများတိုင်းပြည် ပြန်လာချိန်တွင် အော်ဟစ်ဆန္ဒပြခြင်း များကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည် ။ ရှရီယာ ဥပဒေ ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် လူ.အခွင့်အရေးကို အသုံးချလျှက်ရှိသည် ။ ယခု မျှဝေခြင်းများသည် ဗဟုသုတအတွက်သာ ဖြစ်သည် ။ ဗီဒီယိုထဲတွင် ပြောကြားချက်များသည် မျှတမှန်ကန်မှု.ရှိသည် ။ အကယ်၍ နားထောင်ရန်ခက်ခဲပါက ဘာသာပြန်ခြင်းကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည် ။
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးကို တောင်းဆိုချင်တာက မိမိအမျိုးဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းပါ ။ မိမိကြောင့် မိမိဘာသာ ၊ မိမိလူမျိုး မပျောက်ကွယ်ပါစေနှင့် ။ အကယ်၍ မိမိအနေဖြင့် အလွန်ချစ်မြတ်နိုးလှပါက မိမိရွေးချယ်ထားသူနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ကာ ၄င်း ဘာသာကျင့်သုံးသော နိင်ငံများသို. သွားရောက်နေထိုင်ပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂန်နိုင်ငံကဲ့သို. အိမ်ရှင်အား စော်ကားမှု.များကို လက်ခံနိုင်စွမ်း မရှိပါ ။
ယခုလက်မခံသကဲ့ သို. နောင်မည်သည့်အခါမှလည်း လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ ။ ဘာသာအားလုံး အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပါ ။ အစွန်းရောက်ခြင်း ၊ ဘာသာရေးဗန်းပြခြင်း ၊ အိမ်ရှင်ကို စော်ကားခြင်းများကို လုံးဝ လက်သင့်မခံပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ။ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GjNfQGm2HeI
05/25/13--05:26: ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအပေါ်အကြံပြုတင်ပြခြင်း
နောင်ဖြစ်လာမဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ လွှတ်တော်၃ရပ်အတွင်းမှာ
အချက်အလက်အချို့ နဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးထာဝစဉ်တည်မြဲရေးအတွက်
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းစွာပေါ်ပေါက်လာရေးတို့ ကိုသာဦးစားပေး
၂။ ၎င်းအချက်များကိုပြင်ဆင်ပြီး၍ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးနှင့်အချူပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး
တို့ အတွက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကကျေကျေနပ်နပ်သဘောတူထောက်ခံမှုများ
၃။ မဖြစ်မနေဒေါ်စုကိုသမ္မတဖြစ်ရေးကန့် သတ်ထားသောအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်မည်ဆိုပါ
ကလည်း၂၅%ကို လျှော့ချရေးကိုတော့ တိုင်းရင်းသားများနှင့်နှစ်ဘက်ယုံကြည်မှုခိုင်မာစွာတည်
၅။ အဘယ်ကြောင့်မထောက်ခံရပါသနည်း။ရှင်းပါသည်။ယခုလက်ရှိပါတီများ၏ပြည်သူလူထုနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံ၍ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်မှုစွမ်းရည်များအပေါ်အပြည့်အဝကျေနပ်အားရဖွယ်မမြင်သေး
၇။ နိုင်ငံတော်၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည့်ဥပဒေပြုရေးအာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်အတွင်းသို့ နိုင်ငံတော်အဆင့်အရည်အသွေးမပြည့်မှီသော၊မိမိပါတီ မိမိအဖွဲ့ အစည်း၊မိမိဝန်းကျင်တစ်ခု
ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊နှောင့်နှေးကြန့် ကြာကာ လွှတ်တော်အတွင်းအုပ်စုဖွဲ့ ဂိုဏ်းဂဏဖွဲ့ ၍ သူပြော
ငါဖျက် ငါပြောသူဖျက် အပျက်ပျက်နှင့်နှာခေါင်းသွေးထွက်ရမည့်အခြေအနေမျိုးကိုကျနော့်အနေဖြင့်
၈။ ဤသို့ ဆိုလျှင်ကျနော်ဘာကိုဆိုလိုခြင်ပါသလည်း။
အခါ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်များ၌ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ နှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုး
တစ်ဖွဲ့ ကိုတစ်ဖွဲ့ မည်သို့ မျှချန်ထားရစ်ခဲ့ခြင်းငှာမဖြစ်နိုင်ဟုတွေးဆမိပါသည်။
ဒေါ်စုနှင့်NLD၊တပ်မတော်တို့ ၏ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသာစောင့်ကြည့်အကဲခတ်၍သာ၎င်းတို့ ၏ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုစီမံနေကြသည်ဟုယုံကြည်မိပါသည်။
၁၀။ သို့ ဖြစ်၍ အထက်တင်ပြပါနိုင်ငံရေးအင်အားစုများအနေဖြင့်တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက်အကြွင်းမဲ့
ပြုသူများသာဖြစ်သည်ကိုအကြွင်းမဲ့နာလည်းယုံကြည်ကြမည်ဆိုပါကအစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့ ရာ၌ညွန့် 
သည့်ပြည်သူ့ အသံဟူသမျှကိုယ်စားပြုသည့်ကျီး-ဘုတ်ရိုသေ၊ဘုတ်-ကျီးရိုသေ၊အဓိကအာဏာရနှင့်အတိုက်အခံဟူ၍မခွဲခြားဘဲပြည်သူ့ အကျိုး၊တိုင်းပြည်၏လက်တလောနှင့်ရေ
တွင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးနှင့်တပ်မတော်၊တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးတို့သည်
ကျနော်တို့ ၏မြန်မာလူ့ ဘောင်းအေးချမ်းသာယာရေးကိုမည်သို့ မျှအကျိုးမပြုနိုင်သည့်အပြင်၊ပြည်
ဆောင်ရွက်မှုများကို ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ နောက်မျိုးဆက်များအနေဖြင့်တစ်ယောက်မကျန်ခံစား/
နေ့ လည် ၁နာရီ ၄၂မိနစ်
— with ရာ ဝဏ, Ko Kanaung, Seaman Nayminthu and 21 others.
05/25/13--05:35: ကျွန်တော် နှင် နိုင်ငံရေး
by Win Minthein (Notes) on Saturday, May 25, 2013 at 11:19am
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ခါတစ်လေ နိုင်ငံရေး နည်းနည်းပါတဲ့ စာလေးတွေ ရေးပါတယ်။ဒီတော့ကားမင်း နိုင်ငံေ၇းသမားလုပ်မှာလားလို့သူငယ်ချင်းတစ်ချို့က မေးကြပါတယ်။ကျွန်တော် နိုင်ငံေ၇းသမားမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဖြစ်ချင်သေးပါ။ ဒါဆိုဘာလို့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ်တာတွေေ၇းတာလည်းလို့ မေးလာပါသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ပြောပြပါ့မယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ ကျွန်တော့်အမြင်တွေကို ဘာလို့ရေးသလဲဆိုတော့ကား ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သတ်လာလျင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အမြင်ကို ကိုယ်ထုတ်ဖော်ရေးသင့်တယ်ထင်လို့ ရေးပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ရေးလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကို ဖတ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး ကွန်းမန့်တွေပေးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကား နားလည်ထားသင့်တယ် ထင်လို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ရှိလာပါပြီ။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ မဲတစ်မဲပေးပြီး နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်မည့်သူ၊ တနည်းဟားဖြင့် ကိုယ့်ကို ၅ နှစ်စာ အုပ်ချုပ်မည့်သူ့၊ ကိုယ်လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဥပဒေတွေကို ပြဌာန်းမည့်သူတွေကို ရွေးချယ်၇ပါတော့မယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နိုင်ငံေ၇းသမားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့၇ဲ့ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားကိုယူပြီး ကျွန်တော်တို့ကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ် ဥပဒေတွေပြုကြတော့မှာပါ။ သည်အခါမှာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ မဲတစ်ပြားဟာ ကိုယ့်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုကို တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်လာမည်ဆိုတာကို သတိထားသင့်ပါပြီ။ ကိုယ့်ပေးလိုက်တဲ့ မဲတစ်ပြားဟာ ကိုယ့်တိုင်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ရေ၊ ကိုယ့်မြေကို နိုင်ငံသားတွေ အတွက် အကျိုးရှိအောင် တာဝန်ယူ ဦးဆောင်ပေးနိုင်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ပါတီ တွေကို ရွေးချုယ်မိရင်တော့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါသည်။သို့မဟုတ်ပါပဲ လူတစ်စု ပါတီတစ်ခု၊ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု ကောင်းစားရေးအတွက် အသုံးချသွားမည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ပါတီကို မဲပေးမိပါက ရလဒ်ဆိုးများကို သိပ်မကြာခင်မှာ ကြုံတွေ့လာ၇မှာပါ။
ယခုအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အဓိ
ကသဘောတရား တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ စတင်ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ လွှတ်တော်ဟာ အရေးပါတဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်လာပါသည်။ လွှတ်တော်မှ နေ၍ကျွန်တော်တို့လိုက်နာကြရမည့်ဥပဒေ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကို ပြဌာန်းရပါမည်။ လွှတ်တော်မှနေပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးကို အကျိုးရှိစေမည့် ငွေလုံးငွေရင်း သုံးစွဲမှုတွေကို စိစစ်ပြဌာန်းရပါမည်။ နိုင်ငံနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် စီမံကိန်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ၊ ပညာရေး မြင့်တင်မှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ပေါ်လစီ ၊ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ စသည် စသည်များကို လွှတ်တော်မှ ထိန်းချုပ်ပြဌာန်းသွားပါမည်။
ထို့အပြင် လွှတ်တော်တွင် အမတ်နေရာ အများစု ရရှိထားသော နိုင်ငံရေးပါတီမှ ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံကိုဦးဆောင်မည့်
အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲစည်းတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း အစိုးရအဖွဲ့မှ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊နိုင်ငံခြားရေး ၊ ကာကွယ်ရေး စသည်များကို ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖေါ်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရမည့် မဲတစ်ပြားကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါသည်။ နိုင်ငံနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ
အတွက် တိကျတဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ မူဝါဒ၊ နိုင်ငံကို ကောင်းအောင် တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မည့် မူဝါဒ ရှိသည့် ပါတီကိုသာ
ကျွန်တော် မဲပေးချင်ပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကောင်းစားရေး ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ကောင်းစားရေး၊ ပါတီတစ်ခု
တည်း ကောင်းစားရေးအတွက် ဦးတည်သော နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲအစည်းများကို ကျွန်တော် မဲမပေးလိုပါ။ နိုင်ငံနှင့် တိုင်းရင်းသား
အားလုံးအတွက် တိုးတက်အောင် ကြီးပွားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ပါတီကို သာ မဲပေးလိုပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော် နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့်ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာပါသည်။ ပါတီကိုသာလျှင်မဟုတ်ပါ။ ထိုပါတီကို ကိုယ်စားပြုမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း လေ့လာပါသည်။ ပါတီ၏မူဝါဒ ၊ လမ်းစဉ်များ
မည်သို့ပင် ကောင်းနေပါလည်း ထိုမူဝါဒ လမ်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၏ အရည်အချင်း အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းပါက အဘယ်သို့ယုံကြည်ရပါမည်နည်း။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် နိုင်ငံေ၇းကို လေ့လာပါသည်။ နိုင်ငံရေး ကို လုပ်နေပါသည်ဆိုသော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို လေ့လာ
ပါသည်။ ကျွန်တော့် အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ရေးပါသည်။ ပြောပါသည်။ ဝေဖန်ပါသည်။ မကြိုက်သည့် မူဝါဒကို မကြိုက်ကြောင်းပြောပါမည်။ မကြိုက်သည့်ပါတီကို မကြိုက်အကြောင်းပြောပါမည်။ ဝေဖန်ပါမည်။ မကြိုက်သည့် နိုင်ငံရေးသမားကို မကြိုက်ကြောင်းပြောပါ
မည်။ ဝေဖန်ပါမည်။ ကျွန်တော့်တွင် မကြိုက်ကြောင်းပြောခွင့်ရှိပါသည်။ ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါသည်။ မကြိုက်ကြောင်းပြောတာကို လက်မခံနိုင်၊ ဝေဖန်တာကိုလည်း လက်မခံနိုင် ၊ ပြင်ရန်လည်း မစဉ်းစားသော အာဏာရှင် ဆန်သော လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပါတီများ
ကို ၂၀၁၅ တွင် ကျွန်တော်မဲပေးမည်မဟုတ်ပါ။
05/25/13--05:48: " တပ်မတော် …..ဘာလဲ….ဘယ်လဲ…- ၆ "
၁၉၈၈ ခုနှစ် ……..
အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းရဲ့သာမန်နေ့ တစ်နေ့ မှာ ……..
တပ်မတော်(လေ) တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးဟာ ……..
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တောတွင်းစခန်း တစ်ခုပေါ်ကို တစ်ပတ်ပျံဝဲရင်း ……..
စာရွက် အတော်များများကို ပလူပျံအောင်ကျဲချသွားပါတယ်……..
ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အိမ်ပြန်လာဖို့ နဲ့ …….
နယ်စပ်မြို့ ၂၇ မြို့ ရဲ့ အမည်တွေကိုပါ ဖော်ပြထားပြီး …..
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်နေ့ ထိ ဖွင့်လှစ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း…….
ထိုင်းနိူင်ငံတပ်ခ်မြို့ မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စခန်းကို ၀င်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ……..
တပ်မတော်(လေ)အထူးလေယာဉ်နဲ့…
လာရောက် ခေါ်ယူပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်……။
နယ်စပ်ဒေသက ကျောင်းသားကျောင်းသူ ……
အမြောက်အများ ပြန်လာခဲ့ သလို ……
တစ်ချို့ ကျတော့လဲ ……
တောတွင်းလက်နက်ကိုင်ဘ၀ကိုပဲ အပြီးခံယူခဲ့ ပါတယ်…….
ကျန်ခဲ့တဲ့ အင်အားစုတွေထဲက တစ်ချို့ ဟာ……
တောတွင်းမှာပဲ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ ရပြီး …….
တစ်ချို့ ကျတော့လဲ တတိယ နိူင်ငံ တစ်ခုခုကို…….
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တပ်မတော် အတွက်ကတော့ ……..
စစ်ရေးစွမ်းရည် ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မရှိလှပေမယ့်…
သူတို့ ကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ……
ဆန့် ကျင် အတိုက်အခံလုပ်နေမယ့် အင်အားစုတစ်ခုကို …….
များပြားလှတဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ် တာဝန်တွေနဲ့ ….
နိူင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကိုဖွဲ့ စည်းပြီး ……
နိူင်ငံ အနှံ့ အပြားမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ ….
ဆူပူမှု အကြွင်းအကျန်တွေကို ဆက်လက်နှိမ်နှင်းနေရင်းပဲ
တစ်ဖက်ကလဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးဖို့……
၂၃.၉.၈၈ နေ့ မှာ စတင်ပြီး …….
နိူင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ တဲ့ အတွက်….….
နိူင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၂၃၈ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ ပြီး …….
၉၃ ပါတီ တိတိဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်…….
ဗကပ တို့ အသွင်ယူ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ ၃ ပါတီကိုတော့ ……
နိူင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်က ဖျက်သိမ်းပြစ်ခဲ့ပြီး
အနိူင်ရပါတီကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း …….
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ်တိုင်က ……
တိုင်းပြည်ကို ကတိပေးခဲ့ ပါတယ်……..။
နိူင်ငံခြား အရန်ငွေ မရှိသလောက် ဖြစ်နေပြီး….
အရာရာ ပြိုလဲကျနေတဲ့ စီးပွားရေးကို အမွေဆက်ခံလိုက်ရတဲ့ .....
အစိုးရယနရား လည်ပတ်နိူင်ဖို့ အတွက် .......
အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ 
စက်သုံးဆီနဲ့ အခြားပစည်းများ ၀ယ်ယူဖို့ ….
ဂျပန်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးရဲ့ မြေကွက်ကို …
တပ်မတော်ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ အနေနဲ့…….
ဘယ်သူမှ ညှိနိူင်းဖို့ မစွမ်းဆောင်နိူင်ပဲ…….
ဘယ်သူ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် …….
သူတို့ ပဲ တစ်ချိန်လုံးတိုက်နေရတဲ့ရန်သူတွေကို ………
သူတို့အာဏာပြန်မလွှဲခင် အချိန် အတွင်း ……
ရသလောက် ဦးနှိမ်ချေမှုန်းဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်……….။
၁၉၈၉ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်ဦးမှာ ……..
တပ်မတော်ရဲ့ နာမည်ကျော် တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မ နှစ်ခုဟာ….. ..
ကေအန်ယူတို့ ရဲ့အခိုင်အမာ စခန်းများဆီကို ……
မြှားပစ်သလို တရှိန်ထိုး ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်…….
၁၃.၁.၈၉ ရက်နေ့ မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ထိုးစစ်ဟာ …..
ကေအန်ယူ ရင်း၂၁ ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ ……
မဲထရီ နဲ့ ခလယ်ဒေး စခန်းတွေကို …….
၇ ရက်အတွင်း ကျဆုံးသွားစေခဲ့ ပြီး…...
၂၆.၃.၈၉ မှာတော့ …..
တပ်မ ၄၄ ရဲ့ အင်မတန်မာကြောလှတဲ့ တပ်ရင်းတစ်ချို့ ဟာ …….
နာမည်ကျော် မော်ဖိုးကေ စခန်းကို ၀င်ရောက်စီးနင်းနေပါပြီ………
မဲလစခန်းဟာလဲ ၁၈.၄.၈၉ ရက်နေ့ မှာ ……
တပ်မ ၃၃ ရဲ့ လှံစွပ်ထိုး ၀င်ရောက်စီးနင်းမူကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ ပါတယ်………
၁၆.၅.၈၉ ရက်နေ့ မှာ ၀ါးခဟောင်းစခန်းပါ ကျဆုံးသွားပြီး….
ဖလူး စခန်း ၊ ဝေါလေ နဲ့ သေဘောဘိုး စခန်းများပါ……
၁၉၉၀ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်း …….
ကေအန်ယူရဲ့အမာခံစခန်းအားလုံးနီးပါးကျဆုံးခဲ့ပြီး…..
မာနယ်ပလော တိုက်ပွဲ မတိုင်ခင်
ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသမျှ ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲမှာ…
စီစီဝမ်တာပန် နဲ့ မိုင်းယန်းတိုက်ပွဲ တို့ အပြီးမှာ…...
၁၉၈၉ခု မတ်လ ၁၂ရက်နေ့ မှာ….
သူ့ ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျောက်….
ကိုးကန့် လူမျိုးများခေါင်းဆောင်တဲ့…..
လက်အောက်ခံ တပ်မဟာတစ်ခုက ခွဲထွက်ပြီး …..
ဗကပမြောက်ပိုင်းဗဟိုခွဲ (မုန်းကိုး) ကို သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းပါပဲ……
၀ လူမျိုးများ ဦးစီးတဲ့ အဖွဲ့ က ပုန်ကန်ပြီး ….
ဗကပ ဗဟိုဌာနချုပ် (ပန်ဆန်း) ကို သိမ်းပိုက်မယ့် ဖြစ်ရပ်ရဲ့ ….
ရှေ့ ပြေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်……။
ရှမ်းအရှေ့ ဒေသက ဗကပ တပ်မဟာ (၇၆၈) နဲ့…..
၈၁၅ စစ်ဒေသက တပ်တွေပါ …ထပ်မံ ခွဲထွက်တဲ့အတွက်…..
ဗကပ ဟာ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာပြိုကွဲ သွားခဲ့ပါတယ်……..။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိဖို့ ခက်ခဲခဲ့ ပေမယ့်….
ခွဲထွက်ပြီး တစ်ပတ်အကြာလောက်မှာ စတင်ခဲ့တဲ့
တောတွင်းက လျှို့ ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ….
ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန့်ဦးစီးတဲ့ အဖွဲ့ ဟာ….
ဗကပ က ခွဲထွက်လာတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် အားလုံးနဲ့…….
စစ်ပြေငြိမ်းရေး စာချုပ်ချုပ်ဆို ပြီး ……..
ဗကပနဲ့ အနှစ် ၄၀ကျော် တိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကို အနိူင်ယူခဲ့ပါတယ်…..။
( အပိုင်း ၇ နောက်ရက်ဆက်တင်ပါမည် )
— with James Mint and 71 others.
28Unlike· · Share